relationship – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn Thu, 29 Nov 2018 07:26:45 +0000	en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.1.1 http://www.burmesehearts.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-SortingBurmeseNumbersA-32x32.png relationship – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com 32 32 ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးများ မေ့နေရင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba/#respond Fri, 21 Sep 2018 14:18:09 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74759
ကျွန်မကတော့လေ ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်နေနေ ၊ ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်ဘာသာပဲ ကိုးကွယ် ကိုးကွယ် ၊ ဘယ်ဘာသာစကားပဲပြောပြော ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိရင် လူမပီသဘူးလို့ ထင်မြင်မိတာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို အမြဲလက်ကိုင်ထား သုံးနှုန်းပြောဆို လုပ်ကိုင်တွေးပေးလေ့ရှိတယ်။
ကိုယ့်သားသမီးရလာတော့လည်း ဒီစိတ်ကလေးကိုပဲ အမြဲလေ့ကျင့်ပေးတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ၊ ဘာပဲပြောပြော ၊ ဘာပဲတွေးတွေး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးကို ဦးစားပေးဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတာပါ။ ကလေးကို သူစကားမပြောတတ်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့ ပြောဆိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာ။
ကိုယ့်ကိုဒီလိုပြောရင်ကြိုက်သလား ၊ မကြိုက်ရင် သူများကိုလည်း မပြောနဲ့။ ကိုယ့်ကိုဒီလိုလုပ်ရင်ကြိုက်သလား ၊ မကြိုက်ရင် သူများကိုဒီလိုမလုပ်နဲ့။ သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ အထပ်ထပ်အခါခါ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။
ကလေးဆိုတော့ မနာဖူးရင် နာတယ်ဆိုတာဘာမှန်းမသိဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် သူများ ဘယ်လောက်နာသွားသလဲဆိုတာ မနာဖူးတော့ ကိုယ်ချင်းမစာတတ်ဘူးလေ။ လသားကလေးတိုင်း သူများ ဆံပင်ကို လှမ်းဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ အားကြီးရင်ကြီးသလောက် သူများမှာ အတော်ခံစားရတာလေ။ သူကတော့ နာပါစေရယ်လို့ တမင်ရည်ရွယ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။ သူများနာသွားတာကိုတောင် သဘောတကျ တခစ်ခစ်ရယ်နေရင် ရယ်ဦးမှာ။ သူမှ ဒီလိုနာတတ်မှန်းမသိပဲလေ။
အဲဒီလိုလသားအရွယ်လေးကတည်းက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဆိုတာကို သန္ဓေကျအောင် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ရမှာ။ တခါတလေ သင်ပေးတဲ့မိဘဆရာတွေဟာ မလုပ်ချင်လည်း တပါးသူ သိနားလည်သွားဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ရမှာတွေရှိတယ်။ ဒါဟာ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ရက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အတိုင်းအတာတခုအထိ သင်ယူသူ တကယ်နားလည်သွားဖို့ သင်ပေးရတာတွေရှိတယ်။ နာမှန်းမသိတဲ့ကလေးကို သူနာရုံလောက်လေး ပြန်လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ သြော်ဒီလိုနာတာပါလားလို့ သိသွားမှာပါ။ ဒီလောက်လေး ဖော့ဖော့လုပ်တာတောင် နာပြီးငိုတယ်ဆို အားနဲ့လုပ်တာခံရတဲ့ တပါးသူမှာ ဘယ်လောက်နာလိုက်မလဲဆိုပြီး ချော့ရင်းရှင်းပြခဲ့ရတာပေါ့။
အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့ ကျွန်မရဲ့သမီးဟာ ယခုအချိန်အထိ တပါးသူကို ဆံပင်ဆွဲတာ ၊ ဆိတ်ဆွဲတာ ၊ တွန်းချတာ ၊ ကုန်းကိုက်တာမျိုးတွေ တခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ အဲဒါတွေအကုန် ကျွန်မကို သူအရင်လုပ်ခဲ့တာ။ အသည်းခိုက်အောင် နာသွားတိုင်း အပြင်မှာ ဆော့ကစားရင်း စိတ်တိုင်းမကျလို့ သူများကလေးကို သူသွားလုပ်ခဲ့ရင်လို့ ကျွန်မတွေးရင်း မိဘချင်း ကိုယ်ချင်းစာတာမို့ အဲဒီလိုတွေမဖြစ်အောင် သူနာရုံလေး ပြန်လုပ်ပြီး ဒီလိုလုပ်ရင် တပါးသူမှာ ဒီလိုပဲခံစားရတယ်။ ကိုယ့်လုပ်တာမကြိုက်ရင် သူများကိုလည်း မလုပ်ရဘူးလို့ သင်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်သားသမီးကို တခြားကလေး လာလုပ်ရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။
ဒီလိုတွေ လေ့ကျင့်သင်ပေးလာခဲ့တာ လူတွေအပေါ်မှမဟုတ်ဘူး။ တရိစ္ဆာန်လေးတွေလည်း နာကျင်ခံစားတတ်တာမို့ သူတို့တွေကိုလည်း မနှိပ်စက်ရဘူးဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တယ်။ သဘာဝဆိုတာ သဘာဝအတိုင်းလှပနေတာမို့ သဘာဝဆိုတာ မဖျက်စီးသင့်ဘူး။ အပင်တွေ ၊ အရွက်တွေကို မဖျက်စီးသင့်ဘူး။ သူတို့အလှအပကို ထိန်းသိမ်းပေးထားမှ ဒီလူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာနေလို့ ပိုကောင်းမှာ ၊ ပိုလှပသာယာနေမှာဆိုတာမျိုးတွေလည်း သင်ပေးခဲ့တယ်။
ဒီလိုသင်ပေးဖို့ဆိုတာ မိဘနဲ့သားသမီး အချိန်များများပေးပြီး နားဝင်အောင် အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါမှ ဒီကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး အသားကျနေမှာ။ ကလေးအနားမှာရှိတဲ့ လူကြီးမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး လက်ကိုင်ထားပြောဆိုလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ ကလေးဆိုတာမျိုးက အတုမြင်အတတ်သင်တာ အရမ်းလွယ်တယ်။ တတ်သွားတဲ့အကျင့်ဆိုးကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့သာ ခက်နေတာ။ အကျင့်ဆိုးတွေ ကလေးမှာကူးသွားရင် အတော်အချိန်ယူ ဖျောက်ဖျက်ရတာ။ ကလေးကဆင်ခြေပေးမှာပေါ့ သူတို့ကျလုပ်ပြီး ကိုယ့်တော့ မလုပ်နဲ့ပြောဆိုရိုက်နှက်နေတာကိုး။
အိမ်အကူတွေနဲ့နေတဲ့ ကလေးအများစုမှာ အကျင့်ဆိုးတစ်ခု ကူးသွားတတ်တယ်။ ဒါဟာ အင်မတန်ဖျောက်ဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ တန်အောင်ခိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲ။ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိနေရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။ အိမ်အကူဟာလည်း လူပဲ။ အရွယ်အလိုက် လေးစားသမှုရှိရမယ် ၊ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရမယ် ၊ အစစအရာရာ အိမ်အကူလိုက်လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားသင့်ဘူးဆိုတာတွေဟာ မိဘတွေက သင်ပေးမှရမှာ။
မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ကလေးတခုခုမှောက်သွားရင် အိမ်အကူသွားရှင်း ၊ ကလေးအလုပ် အိမ်အလုပ်မှန်သမျှ အိမ်အကူလုပ် ၊ နောက်ဆုံးအိတ်လွယ် ဖိနပ်စီးပေးတာတွေကအစ ကလေးလုပ်နိုင်နေပေမယ့် ပေးမလုပ်ဘဲ အိမ်အကူသာ လုပ်စေမယ်ဆို ဒီကလေးဟာ ရေသာခိုတဲ့စိတ်နဲ့ တန်အောင်ခိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေး သူ့စိတ်မှာ ကိန်းအောင်းသွားပြီ။ ဒီစိတ်ကြီး အမြစ်တွယ် ကြီးပြင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူးပေါ့။
ကြုံလို့ဝေမျှဦးမယ်။ ကျွန်မသမီးကို သူ့ဘာသာ ဖိနပ်စီးတတ်ဖို့ ခပ်လွယ်လွယ်စီးလို့ရမယ့် ကပ်ခွါဖိနပ်လေးတွေကို သုံးနှစ်လောက်အရွယ်ကတည်းက ပေးစီးခဲ့တယ်။ ဘယ်ညာမှားစီးတတ်ပေမယ့် သူ့ဘာသာ စီးတတ်တဲ့အကျင့်ကို အဲဒီအရွယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာ။ မှားရင် ဘယ်နဲ့ညာ ဘယ်လိုခွဲခြားစီးရတယ်လို့ သင်ပြပြောဆိုပြီး ပြန်စီးပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘာသာသူ အရင်စီးတတ်အောင်ကို အဲဒီအရွယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာ။ ထိုနည်းလည်းကောင်း ခေါင်းစွတ်ဝတ်ကလေးတွေ သရေကြိုးဘောင်းဘီတွေဆိုရင်လည်း ကောက်စွပ်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ သူကိုယ်တိုင်ထည့်တဲ့ သူ့ကစားစရာအိတ်သေးလေးဆိုရင်လည်း သူ့ဘာသာသူ လွယ်စေတာပဲ။ တအားလေးနေမှ ဒါမှမဟုတ်လဲ ခရီးဝေးပါမှ ကိုယ်က ကူသယ်တာ။ တကယ်က သူ့အားသူကိုးတဲ့စိတ်ကလေးကို လေ့ကျင့်ပေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် သမီးလေးထက် (၆)လလောက်ပိုကြီးတဲ့ သမီးသူငယ်ချင်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဖိနပ်သူကိုယ်တိုင်မစီးဘဲ သမီးလေးကို ဝတ်ပေးဖို့ အမြဲခိုင်းလေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်သမီးဟာ စိတ်ထဲဘာမှ ကောက်ကက်ပြီး တွေးတတ်သူမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရှင်းအတိုင်းပဲ ပြုမူလုပ်ကိုင်တတ်သူမို့ သူချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ သူ့ဖိနပ်သူကိုယ်တိုင်စီးပြီးတိုင်း သူငယ်ချင်းဖိနပ်ကိုလည်း စီးပေးလေ့ရှိတယ်။ စီးခိုင်းတဲ့ကောင်းမလေးကတော့ ကျွန်မသမီးလေး သူ့ကိုဖိနပ်စီးပေးတာကို ကျေနပ်လို့ပေါ့။
ပထမ တစ်ကြိမ် ၊ နှစ်ကြိမ်ကတော့ ကျွန်မ မျက်နှာလွှဲထားလိုက်တယ်။ ကလေးချင်းပဲလေလို့ ။ ဒါပေမယ့် ကလေးမိခင်တွေကတော့ ကလေးတွေ ဘေးမှာပေါ့။ သုံးလေးငါးကြိမ်ကျော်လာတော့ ကျွန်မရင်ထဲမကောင်းတော့ဘူး။ အကြောကြီးနဲ့ အမြဲလို ဖိနပ်စီးခိုင်းတဲ့သူများကို ဖိနပ်စီးပေးနေရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ မိခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်မအတွက်တော့ ရင်ထဲမကောင်းဘူး။ သူ့အမေတစ်ယောက်လုံးရှိပါရက် အမြဲလိုလို ကိုယ့်သမီးက စီးပေးနေရတာရယ် ၊ သူ့ထက်ငယ်တဲ့ ကိုယ့်သမီးတောင် သူ့ဘာသာသူစီးဝတ်ရက်နဲ့ သူကတော့ စီးခိုင်းမြဲစီးခိုင်းနေတာရယ်က မျက်စိထဲကန့်လန့် ၊ ရင်ထဲကန့်လန့်ဖြစ်လာတယ်။
တနေ့တော့ သမီးကို ကျွန်မဒီကိစ္စစကားစလိုက်တယ် ဘာလို့သူ့ဖိနပ်ကိုအမြဲစီးပေးရတာလဲပေါ့။ ကိုယ့်သမီးကလည်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်ဖြေတယ် သူချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းက သူ့ကို ကူပြီးစီးခိုင်းတာမို့ သူငယ်ချင်းကိုကူပြီးစီးပေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုအမြဲစီးပေးနေရတာ အမေ့ရင်ထဲမကောင်းဘူးလို့ သမီးကိုပြောလိုက်တယ်။ သမီးအဲလို စီးပေးနေတာ အမေတွေ့ရင် အမေ့ရင်ထဲ အလိုလိုဝမ်းနည်းတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်တခါသူစီးခိုင်းရင် ငါလည်းငါ့ဖိနပ်ငါစီးတယ် ၊ နင်လည်းနင့်ဖိနပ်နင်စီးလို့ ပြောကြည့်ပါလားလို့ မေးမိတယ်။ သမီးက ကောင်းပြီ ၊ အမေဝမ်းမနည်းပါနဲ့ ၊ သူမစီးပေးတော့ဘူး ၊ အဲလိုပြောလိုက်မယ်တဲ့။ နောက်တခေါက်ဖိနပ်စီးခိုင်းတော့ သမီးကအဲလိုပြောပြီး သူ့ဖိနပ်သူစီးပြေးထွက်သွားတော့ အဲဒီကလေးမလေး သူ့ဘာသာသူစီးတယ်။
အဲဒီကလေးမလေး မိဘနှစ်ယောက်စလုံးဟာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကလေးဟာ အိမ်အကူနဲ့အချိန်အများစုကို ကုန်ဆုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်အကူဟာ ကလေးကို ကလေးနဲ့အတူရှိတဲ့အချိန်တိုင်း အစစအရာရာတာဝန်ယူလုပ်ပေးရတာ အိမ်ထဲကော အိမ်ပြင်ကောပါပဲ။ သူများကိုခိုင်းတာ အလေ့အကျင့်တခုဖြစ်နေတော့ ကိုယ်ဒီလိုလုပ်ခိုင်းရင် ကိုယ့်အိမ်အကူမဟုတ်တဲ့ တပါးသူ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ၊ သူ့မိဘဘယ်လိုခံစားရမလဲ ကလေးကော ကလေးမိဘပါ တွေးတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် မရှိလေလို့များလားလို့ ကျွန်မတွေးမိတယ်။ ကိုယ့်သားသမီးကို ဒီလိုခိုင်းရင်ရော ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးများရှိခဲ့ရင်လို့လည်း တွေးမိတယ်။ ကလေးမိဘတွေဟာ မြန်မာလူမျိုး ၊ ကိုးကွယ်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ ၊ ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်ဘာသာစကားပဲပြောပြော ၊ ဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးများ လက်ကိုင်ထားပြီး တွေးခေါ်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာမျိုး အလေ့အကျင့်မရှိရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကို ဖန်တီးထိန်းသိမ်းသွားဖို့ဆိုတာ အချိန်ယူရလိမ့်ဦးမယ်။
သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘဲ နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်တာ ၊ အဓမ္မပြုကျင့်တာ ၊ ဖျက်ဆီးတာ ၊ လူအချင်းချင်းဒုက္ခပေးရုံမက သတ္တဝါတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ဒုက္ခပေးတာ ၊ ရက်စက်စွာပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ကြတာတွေရဲ့ အရင်းခံဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မဲ့နေလို့ဆိုရင် မမှားဘူးနော်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba/feed/0မမြင်နိုင်သော အားနည်းချက်များ၏နောက်ကွယ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/#respond Wed, 05 Sep 2018 10:10:27 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74738
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက်တွေ ၊ အားသာချက်တွေ ကိုယ်စီရှိနေကြတာမို့ တခြားသူတွေ မမြင်နိုင်သော အားနည်းချက်များဟာ လူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်။ တခါတလေ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို ကိုယ်တိုင် မမြင်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအားသာချက် ၊ အားနည်းချက်တွေအပေါ် အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်တွေဟာလည်း မတူညီတဲ့ရလဒ်တွေကို ဖြစ်စေတာပါ။ တခါတလေ ကြိုးစားအားထုတ်မှုချင်းတူနေပေမယ့် ရလဒ်ချင်းကွာသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ကံတရားကြောင့်လားလို့ တချို့ကတွေးကြပေမယ့် ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့ အားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကို သတိထားမိလာတဲ့ ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ်မှာ ၊ ကလေးရဲ့ ရလဒ်အပေါ်မှာ အမြဲပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေလို့ ဒီလိုဖြစ်တာလဲ ၊ ဘယ်နေရာမှာ အားသာချက်တွေရှိနေလို့ ဒီလိုရလဒ်ကောင်း ထွက်တာလဲဆိုတာလည်း အမြဲသုံးသပ်ပါတယ်။
တခါတလေမှာ မိမိအားနည်းချက်ကြောင့် ဒီရလဒ် သွယ်ဝိုက်ရရှိလာတာကို အခြားလူအပြစ်လို့ တပါးသူကို အပြစ်ဖို့တတ်ကြတယ်။
ဥပမာ(၁)။ ။ သူများတွေက သူတို့အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့နေပြီး ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ တွဲတဲ့သူတိုင်းနဲ့ မမြဲနိုင်တာ ကံတရားကြောင့်လား ၊ သူ့ကြောင့်လား ၊ ကိုယ့်ကြောင့်လား။ ကံကြောင့်လည်း တနည်းတဖုံပတ်သက်နေနိုင်သလို ကိုယ်နဲ့လက်တွဲမမြဲနိုင်တဲ့သူတွေကိုမှ ချစ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်အားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ပြီးပြည့်စုံသူရယ်လို့မရှိတာမို့ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ချစ်သူကို ရရှိထားသည့်တိုင် အားနည်းချက်တွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေဦးမှာပါ။ ကိုယ့်မှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေ ၊ ထောက်ပြစရာတွေ ရှိနေမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒီလို သူစိမ်းနှစ်ယောက်က အစပြုတဲ့ အချစ်ရေးမှာ မြင့်သူမှန်းရင် သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တိုင်က ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးတွေရှိနေရမှာပါ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အမြင့်ကလူကို အနိမ့်မှာရရှိနေတဲ့ ကိုယ်က လှမ်းနိုင်ရုံ ၊ မှန်းနိုင်ရုံ ၊ သမီးရည်းစားအဖြစ် လက်တွဲခွင့်ရရုံ ၊ ပတ်သက်ခွင့်ရရုံလေးဟာ အဆုံးသတ်သွားတဲ့ အဖြစ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ရေရှည်လက်တွဲမမြဲတဲ့ သမီးရည်းစားတွေရှိတယ်။ နှစ်ရှည်တွဲပြီးကာမှ ကွဲကွာသွားခဲ့ကြတဲ့ သမီးရည်းစားတွေလည်းရှိတယ်။ အကြောင်းအကျိုးမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲကြတဲ့ သမီးရည်းစားတွေလည်း မနည်းတာမို့ သမီးရည်းစားတွေ အိမ်ထောင်ပြုသည်အထိ လက်တွဲမြဲသွားဖို့ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှုတရပ်လိုပါပဲ။
ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ကွေကွင်းသွားပါစေ ကိုယ်တိုင်က တန်ဖိုးရှိတဲ့သူလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိမိရဲ့တန်းဖိုးကို မသိ ၊ တန်းဖိုးထားမှုမရှိတဲ့ အမျိုးသားကို ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် လက်တွဲခဲ့မိတာ ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရုံရှိတာပေါ့။
ဥပမာ(၂)။ ။ သူများအိမ်ထောင်ရေးတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သာသာယာယာပဲနော်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေးကျတော့ အဆင်မပြေမှုတွေ ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ အတိဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်နေသလား။ အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းဘူးလို့ မှတ်ယူထားသလား။
သူစိမ်းနှစ်ယောက် တမိုးအောက်နေထိုင်ကြတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကိုယ့်ချို့ယွင်းချက်တွေ ၊ အားနည်းချက်တွေကို ခွင့်လွှတ်ဖေးမနိုင်တဲ့သူ ၊ ကိုယ့်အားသာချက်တွေကို တောက်ပြောင်အောင် ထောက်ပံ့မှုပေးပြီး အရောင်တင်ပေးနိုင်တဲ့သူ ၊ အပြန်အလှန် ကြင်နာမှုတွေကို ဆယ်စုနှစ်တွေ ပြောင်းသွားသည့်တိုင် အချစ်တွေမပြောင်းဘဲ သစ္စာရှိစွာချစ်ခင်ယုယနိုင်တဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ထူထောင်ဖို့ဟာ အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်းမက်တဲ့ အိမ်မက်တခုပါ။
အိမ်ထောင်ပြုစက သာယာသလိုရှိနေပေမယ့် ကြာလေခါးလေ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဒီအိမ်ထောင်ထဲ ခါးသီးမှုတွေချည်း လွှမ်းမိုးနေရင် ဒီအိမ်ထောင်ထဲက ဇနီး ၊ ခင်ပွန်း ၊ သားသမီးလေးတွေမှာ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ရှိနေမှာပါ။ ရှုပ်ထွေးသယောင်ရှိတဲ့ အချစ်ရေးထက် အတွင်းကျကျ ပိုရှုပ်ထွေးတာ အိမ်ထောင်ရေးပါပဲ။ အိမ်ထောင်သက်ကြာလာလေလေ ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်တွေ တိုးပွားလာလေလေ တာဝန်တွေများလာလေလေပဲ။
စားဝတ်နေရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ သားသမီးရဲ့ပညာရေး စတာတွေက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရပ်တည်နေသမျှ လင်မယားနှစ်ဦးအကြားက အချစ်ရေးဟာ တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာပါတော့တယ်။ တာဝန်တွေပိလာတော့ မကျေနိုင်တဲ့တာဝန်တွေအကြားမှာ တာဝန်ကျေဖို့နေ့နေ့ညည ကြိုးစားရင်း ကိုယ်တွေနှစ်ဦးအကြားက အချစ်ရေးဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ တဖြည်းဖြည့် မှိန်ဖျော့ လာတာပါ။ ဒီကြားတဲ့ မကျေနိုင်တဲ့တာဝန်တွေဟာ သူ့ကြောင့် ကိုယ့်ကြောင့်လို့ အပြစ်ဖို့စိတ်ကလေးများ ဝင်လာရင်ဖြင့် ရန်ပွဲတွေလည်း စလာပါပြီ။ ဒီအခါ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအကြား မေတ္တာပျက်လာတော့မှာပေါ့။ ဒီကြားထဲ သွေးထိုးစကားတွေကဝင် ၊ အနှောင့်တွေကဝင် ၊ နီးတဲ့သူနဲ့သာ ငြိကြမယ်ဆိုရင် သိပ်မကြာခင် ဒီအိမ်ထောင်ထဲက မိသားစုဝင်တွေဟာ စိတ်ဒဏ်ရာကိုယ်စီနဲ့ အိမ်ထောင်ကွဲရင်ကွဲ ၊ မကွဲရင် စိတ်ဝမ်းကွဲပြီး သူစိမ်းထက်ပိုစိမ်း ၊ ရန်သူထက်ပိုမုန်းကြတော့မယ်။
တခြားသူတွေဟာ မြင်တွေ့ကြုံဆုံနေရတဲ့ ဒီအိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာတွေ ကိုယ့်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါတွေမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမယ် ၊ ကိုယ်တွေနှစ်ဦး ဘယ်လိုတိုင်ပင် လုပ်ဆောင်သွားမယ် စသဖြင့်ကို အစကတည်းက သူနဲ့ကိုယ် စိတ်သဘောထားချင်း ၊ တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်မှုချင်း ၊ အရည်အချင်းတွေ ၊ မိသားစုတွေပေါင်းစပ်သွားကြဖို့ စသဖြင့်ကို အိမ်ထောင်မပြုခင်ကတည်းက နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် မစဉ်းစား ၊ မတွေးခေါ်ခဲ့တာ ကိုယ့်အပြစ်ပါ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းရရင်ပြီးရောစိတ်ထားခဲ့မိတာ ကိုယ့်အားနည်းချက်ပါ။ နေ့ရက်တွေ ၊ အချိန်တွေနဲ့အမျှ လူ့စိတ်ဆိုတာဟာလည်း အခြေအနေအပေါ်မူတည်လို့ ခံစားချက်တွေ ပြောင်းလဲတတ်ကြတာ မမေ့ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။
ဥပမာ(၃)။ ။ သူများသားသမီးတွေ မိဘကို ငယ်ငယ်လေးနဲ့သိတတ် ၊ တော်လိုက်ကြတာ။ ကိုယ့်သားသမီးများ ဆိုဆုံးမလို့မရ ၊ ပြောစကားနားမထောင် ၊ မသိတတ် ၊ မိဘနဲ့ ကန့်လန့်လုပ်လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိလို့ မိဘဖြစ်တဲ့ကိုယ့်မှာ သားသမီးကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတာ သားသမီးကံမကောင်းလို့လား။
ကလေးကိုယ့်ကို တွယ်တာချစ်ခင်စေချင်ရင် ကလေးကို ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်အချိန်ကတည်းက သူ့အတွက်လိုအပ်မယ့် ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ ငွေကြေးအခြေအနေတောင့်တင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ ကလေးမွေးပြီးမှ သူ့အလိုလိုဖြည့်တင်းပေးသွားမယ်လို့တွေးနေတဲ့ ယခုလုံးလည်ချာလည် ရရစားစား ဘဝမျိုးမှာဆို ကလေးကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့အချိန် ရှားနေပါပြီ။ ကလေးအတွက် လိုအပ်တာတွေဟာ ကလေးမွေးပြီးချိန်ကစလို့ ကလေးအရွယ်ရလာလေလေ စားဝတ်နေရေး ၊ ပညာရေးစတာတွေမှာ ငွေပိုလိုအပ်လာတော့ လိုနေတဲ့ဒီငွေတွေ အပိုရှာဖို့ ကလေးကို အဓိကအုပ်ထိန်းရမယ့်မိခင်ဟာ ကလေးနားမနေနိုင်ဘဲ ငွေရှာနေရပြီလေ။
ကလေးအနားနေရမယ့်အချိန် ကလေးအနားမနေနိုင်ကတည်းက ကလေးနဲ့ ကိုယ့်အကြားမှာ စိတ်ချင်းဝေးနေပါပြီ။ မိဘနဲ့သားသမီးအကြား စိတ်ချင်းဝေးနေရင် ကလေးဟာ မိဘအပေါ် သွေးသားဆက်စပ်မှုအရသာ အဖေ ၊ အမေ ခေါ်နေရပေမယ့် စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်ခင်တွယ်တာတာမျိုး ပါးလျနေပါတယ်။ ဒီကြားထဲ မိဘက လုံလောက်စွာမပံ့ပိုးပေးနိုင်ဘူး ၊ တွေ့ရင် အချစ်ခံရတာထက် အဆူခံအရိုက်ခံရတာတွေလည်း များနေမယ် ၊ သားသမီးလုပ်ချင်တာထက် မိဘလုပ်စေချင်တာကိုပဲ ဖိအားပေး လုပ်နေရမယ်ဆိုရင် ကလေးဟာ အရွယ်ရလာလေလေ ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ မိဘနဲ့အစေးမကပ်ဖြစ်နေမှာပါ။
ဆိုဆုံးမလို့မရတဲ့ သားသမီးကို ရနေတာဟာ နည်းမှန်လမ်းမှန် ဆိုဆုံးမမှုတွေ မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲ။ ကိုယ့်လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ ကလေးအရွယ်မှာတောင် ကိုယ့်စကားနားမထောင် ကလန်ကဆန်ကလေးဖြစ်နေရင် ကိုယ့်လက်အောက်ကလွတ်သွားတဲ့အရွယ် (ကိုယ်အိုမင်းသွားတဲ့အရွယ်)မှာ သားသမီးဖြစ်သူဆီက ယုယကြင်နာမှုတွေ ၊ သိတတ်မှုတွေဆိုတာ ကိုယ်ခံစားရနိုင်ပါ့မလား။ ကိုယ့်အမွေတွေယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်မစွန့်ပစ်ရင် အတော်ကံကောင်းတယ်လို့များ ဆိုရလေမလား။ ခုနောက်ပိုင်း စွန့်ပစ်ခံဘိုးဘွားတွေ များလာလို့ ဒီလိုရေးရတာပါ။ နောင်နှစ်နှစ်ဆယ်ဆို ဒီ့ထက်များ ပိုဆိုးရွားလာလေမလားလို့ …. အဲဒီစွန့်ပစ်ခံ ဘိုးဘွားတွေထဲ ကိုယ်မပါချင်ရင် ကလေးငယ်စဉ် ကလေးငယ်ကို အချိန်ပေးပါ ၊ မေတ္တာပေးပါ ၊ ဂရုစိုက်ပေးပါ ၊ ကြင်နာမှုတွေပေးပါ ၊ အစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးပေးပါ။ မေတ္တာပေးမှ မေတ္တာရတာပါ။
ဥပမာ (၄)။ ။ ကိုယ့်ကလေးဟာ တခြားကလေးတွေနဲ့တန်းတူ ဥာဏ်ရည်လည်းမီတယ် ၊ သူများတန်းတူလည်း ကလေးကို ပံ့ပိုးသင်ယူခွင့်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ရလဒ်မှာ သူများကလေးတွေလောက်မကောင်းဘူး။ ဒီလိုရလဒ်ကို မြင်ပြီဆိုတာနဲ့ လူကြီးမိဘတွေဟာ ကလေးကို တန်းပြီးဆူပူကြိမ်းမောင်း ရိုက်နှက်တာမျိုးအထိ လုပ်တတ်ကြတယ်။ ၁၀၀% ကလေးအပြစ်လား ….. အရွယ်ရောက်ပြီး လူကြီးမိဘနဲ့အတူနေတဲ့သားသမီးတွေတောင် မိဘရဲ့ လမ်းပြထိန်းကျောင်းမှုမျိုးမရှိရင် ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ ပျော်သလို လုပ်နေတတ်ကြတာမဟုတ်လား။ ကျောင်းနေတဲ့ ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေဟာ ကျောင်းပို့ရင် ကျောင်းသွားမယ် ၊ ကျူရှင်ပို့ရင် ကျူရှင်သွားမယ်။ စာကြည့်ခိုင်းရင်ကြည့်မယ်။ စာမကြည့်ခိုင်းရင် တီဗွီ ၊ ဂိမ်း ၊ သူငယ်ချင်း ၊ ကစားစရာ စတာတွေကို အဖော်ပြုကြမှာပါ။ ဒီလို အချိန်တန်ဖိုးချပုံချင်း မတူညီတဲ့အလျောက် ရလဒ်တွေဟာ ကွာသွားမှာပါ။
ကျောင်းနဲ့ကျူရှင်က သင်လိုက်တာတွေကို နှစ်ရက် သုံးရက်တခါ ၊ တပတ်တခါ မိဘက ပြန်မနွေးပေးရင် သင်ပြီးသားဟာတွေ မေ့သွားတတ်တာ သဘာဝပါ။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း မေ့ခဲ့ဖူးမယ်။ ဒီကလေးငယ်ငယ်ဟာလည်း မေ့ကောင်းမေ့သွားမှာပါ။ တအားကြာသွားမှ ပြန်ခေါ်နွေးမယ်ဆို အစက ပြန်သင်ရသလို ခက်ခဲကြန့်ကြာနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင်ပြီးသားစာတွေကို မိဘက ပြန်ဆိုခိုင်း ၊ ပြန်နွေးခိုင်းတာမျိုးတွေ အိမ်မှာအချိန်ပေးမလုပ်ရင် ကျောင်းနဲ့ကျူရှင်က သင်လိုက်တဲ့စာတွေဟာ တကယ့်စာမေးပွဲနားနီးရင် လပေါင်းများစွာ စာကြွေးတင်သမျှ စာပိတော့တာပါပဲ။ စာမေးပွဲနီးမှာ စာအတင်းကျက်ခိုင်းတော့ ကလေးဟာ သူမှတ်နိုင်သမျှလေးနဲ့ပဲ ဖြေခဲ့မှာပါ။ ဒီတော့ တူတူချင်းတက်ပေမယ့် ရလဒ်ကွာသွားတာမျိုးဖြစ်တာပါ။ ဒါဟာ ကလေးအပြစ်ချည်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးကို အချိန်ပေးပြီး အိမ်မှာစာလုပ်ဖို့ ကြပ်မတ်မှုမျိုးမပေးနိုင်တဲ့ ကိုယ့်အားနည်းချက်လည်း ပါဝင်တာနေလို့ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ ရလဒ်ကောင်းမျိုး မရရှိတာပါ။
အခုဆိုရင် အဘက်ဘက်သောရှုထောင့်က သုံးသပ်ပြထားတဲ့ မမြင်နိုင်သော အားနည်းချက်များ၏နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေနိုင်သလဲဆိုတာကို စာဖတ်သူတွေ ကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်ရင်း ဆောင်သင့်တာတွေဆောင် ၊ ရှောင်သင့်တာတွေရှောင်လို့ ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုဘဝ ၊ ချစ်သူဘဝမှာ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြစေဖို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/feed/0က္ကုတ္ထိယစိတ်ဟူသည် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%81%a0%e1%80%b3%e1%80%90%e1%81%b3%e1%80%ad%e1%80%9a%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%81%a0%e1%80%b3%e1%80%90%e1%81%b3%e1%80%ad%e1%80%9a%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9/#respond Fri, 05 May 2017 12:26:09 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74311
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%81%a0%e1%80%b3%e1%80%90%e1%81%b3%e1%80%ad%e1%80%9a%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9/feed/0သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9/#respond Fri, 28 Apr 2017 02:57:15 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74283
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%9c%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%b9/feed/0သူများပြောရင်ယုံမှာလား http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/#respond Mon, 20 Mar 2017 02:13:31 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74079
သူများပြောတိုင်းယုံမှာလားဆိုတာ သူများတွေရဲ့ ပြောစကားတွေတိုင်း ယုံတတ်သူတွေကိုပါ။ ဘာကြောင့် သူတို့တွေဟာ သူများပြောတိုင်း ယုံတတ်ကြသလဲဆို ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ အပြောခံရသူရဲ့ အကြောင်းတွေဟာ သူတို့အတွက် ယုံချင်စရာကောင်းနေလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သူတို့ဟာ အပြောခံရတဲ့ တဘက်သားအပေါ် ယုံကြည်ချက် လုံးဝမထားနိုင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ဟာ တကယ့်ကို ဆင်ခြင်ဥာဏ်နည်းပါးလွန်းကြတဲ့အတွက် ၊ သုံးသပ်နိုင်စွမ်းလည်း နည်းပါးလွန်းကြတဲ့အတွက် သူများပြောသမျှ ယုံနေကြတာပါ။
သူများပြောတိုင်း ယုံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူများပြောစကားတွေဟာ အပြောခံရတဲ့သူနဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြန်သုံးသပ်စရာမလိုအောင် ကိုယ့်အတွက် ယုံချင်စဖွယ်ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူက ပြောလာရင် ၊ ခင်မင်လွန်းတဲ့သူက ပြောလာရင်၊ အကြီးအကဲတွေက ပြောလာရင် မှန်တယ် ၊ မှားတယ် သုံးသပ်အားနည်းပြီး ပစ်ယုံမိတတ်ကြတာများတယ်။ ဒါဟာမှားသလား။
ကျွန်မကိုမေးလာရင်ဖြင့် မှားတယ်လို့ဖြေမှာပါ။ ဘယ်သူမဆို ပြောမှား ၊ အထင်မှား ၊ အမြင်မှား နဲ့ အလုပ်မှားတွေ ဘဝမှာ ကြုံဖူးကြတယ်။ ဒါကိုလက်ခံရင်ဖြင့် ကိုယ့်ကိုလာပြောတဲ့သူဟာလည်း မမှားနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ သံသယကိုလက်ကိုင်ထားလို့ အကောင်းဆုံးစကားလုံးရွေးချယ်ပြီး ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်သုံးသပ်မိမှာပါ။ အထူးသဖြင့် မှားတယ်လို့ အပြောခံရတဲ့ တဘက်သားကို ငဲ့ညှာစာနာစိတ်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူ့ဘက်က မသိမသာရပ်တည်လို့ အခြေအနေကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် သုံးသပ်မိမှာပါ။
ဆက်ဆံရေးအများစုမှာ တတိယယူ (ကြားလူ)တွေကြောင့် ကမောက်ကမ ဖြစ်ရတာတွေဟာ ပိုများတယ်လို့ လက်ခံကြလေမလား။ ဒါကို လက်ခံကြရင်ဖြင့် ကြားလူနဲ့ကြားစကားဆိုတာကို ယုံသင့် ၊ မယုံသင့် ချင့်ချိန်မှာပါ။ ပစ်ယုံပြီး အပြောခံရသူအပေါ် တဘက်နားနဲ့ အပြစ်တွေ တင်နေတာမျိုးလည်း ရှောင်မိမှာပါ။ အမှန်ဖြစ်သင့်တာက တခြားသူတွေ ပြောတာကိုလည်း နားထောင်ရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ကဘာမှ စလမ်းကြောင်းလုပ် အပြစ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမှားလုပ်သူလို့ စွပ်စွဲခံရသူရဲ့ စကားကိုလည်း အဆုံးအထိ သည်းခံနားထောင်ပေးသင့်တာပါ။ နားဟာ နှစ်ဖက်ရှိတာမို့ တဖက်တည်းရဲ့ အပြောစကားတွေကိုချည်း နားမယောင်သင့်ဘူးလေ။
တခါမှား ၊ နှစ်ခါမှား ၊ အခါခါမှားဖူးပေမယ့် ဒီတခါ သူမမှားတာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေမှန်ကို သိဖို့ ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် မှားခဲ့ဖူးသူကိုလည်း ပြောဆိုခွင့် (နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဖြစ်) ပေးလိုက်ပါ။ သူ့စကားတွေ နားထောင်ချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အထင်အမြင်တွေကို ဘေးချိတ်ပြီးမှ နားထောင်ပါ။ ပြီးရင် အခြေအနေမှန်ကို ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ပြီးမှ ဆက်ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ မမှားသင့်ဘဲ မှားသွားတဲ့ အမှားတွေထဲမှာ အထင်လွဲ ၊ အမြင်လွဲနဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အမှားတွေက အဆိုးဆုံးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ငါဆုံးဖြတ်တာ မှားသွားပြီလို့ သိသွားတဲ့တနေ့မှာ နောင်တနဲ့ နှစ်ခါ ပူလောင်ရလို့ပါပဲ။
ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း လတ်တလောကို မကြည့်ဘဲ ရေရှည်စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောကိုသာ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရင် လတ်တလောပဲ တခဏတာ ပြေလည်သွားမှာပါ။ တခဏတာပဲ ရှင်းလင်းသွားမှာပါ။ ခဏနေ ပြန်ရှုပ်မှာပဲလေ။ ကိုယ်က အရှည်ကိုကြည့်ပြီးမှ မရှင်းခဲ့ဘဲ။ ဆိုလိုတာက ဒီလူနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဟာ ကာလရှည်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ဖြေရှင်းမှု ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တဒင်္ဂလေးအတွက် မစဉ်းစား ၊ မဆုံးဖြတ်သင့်ဘူး။ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်လို့ပါ။
ဥပမာ …. ကိုယ့်ကလေးကို ဆရာမက သူများပစ္စည်းခိုးတယ်လို့ မိဘကို ပြောဆိုလာတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ ဆရာမဆိုတော့ ယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့သူ အခြေအနေမှာရှိတယ်။ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာလည်း ကျောင်းခန်းထဲမှာ (ကိုယ့်မမြင်ကွယ်ရာမှာ) ဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်ရပ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ မိဘအများစုက ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
သူများပြောတိုင်းယုံတတ်တဲ့မိဘ (ကလေးအပေါ်ယုံကြည်ချက်မထားနိုင်တဲ့မိဘ)က ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ ၊ နောင်ဒီလိုမလုပ်အောင် ကျွန်မကောင်းကောင်း ဆုံးမပါ့မယ်လို့ ဆရာမကို ကတိပေးမယ်။ ကလေးကို ဆရာမရှေ့ ဒီလိုလုပ်ရကောင်းလား ဆူပူကြိမ်းမောင်းရိုက်နှက်နိုင်သလို လမ်းတလျှောက်နဲ့ အိမ်မှာလည်း ကလေးဟာ အဆူခံ၊ အရိုက်ခံ ၊ ဒဏ်ပေးခံရနိုင်တယ်။ ဒီလိုသွန်သင်ဆုံးမခံရတဲ့ကလေးဟာ ဒီတကြိမ်မှာ သူမခိုးဦးတော့ နောင်အကြိမ်တွေမှာ သူခိုးတော့မယ်။ မလုပ်လည်း အဆူခံ ၊ အရိုက်ခံ ၊ ဒဏ်ပေးခံရမယ့်အတူတူ တန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့် ကလေးဟာ ကိုယ်ဆုံးမသွန်သင်မှုမတတ်လို့ ဆိုးတဲ့ဘက် ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
သူများပြောရင်ယုံတတ်တဲ့မိဘ (ကလေးအပေါ်သူလုပ်လေမလား သံသယရှိတဲ့မိဘ)က ဆရာမဟာ လိမ်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကလေးမှားတာပဲဖြစ်မှာပါလို့ ကလေးအပေါ် အပြစ်ပုံချလိုက်တတ်တယ်။ သူတို့ဟာ ကလေးအပေါ် နောင်ဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲဆုံးမမယ် ၊ နောင်ဒီလိုအသံမျိုး ထပ်ကြားရရင် ၊ ထပ်တိုင်ခံထိရင် ဒီ့ထက်ပိုဆိုးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ကလေးကို ခြိမ်းခြောက်ဆုံးမမယ်။ ဆူကောင်းဆူ ၊ ရိုက်ကောင်းရိုက် ၊ ဒဏ်ပေးကောင်း ပေးမယ်။ တကယ်လို့များ ကလေးဟာ ဒီအမှားကို မလုပ်ခဲ့ရင် ပြောခဲ့တဲ့ဆရာမနဲ့ ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ဒဏ်ပေးတဲ့ မိဘအပေါ် မကျေနပ်စိတ်တွေဝင်သွားမယ်။ ကောင်းဖို့ထက် ဆိုးဖို့ပိုအားသာသွားနိုင်တယ်။
မိမိကလေးအပေါ်နဲ့ မိမိရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှုမှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့မိဘကို ဒီလိုမျိုး ဆရာမပြောလာရင် ဒီလိုမိဘမျိုးတွေက ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် ဆရာမဟာ ဘယ်လောက်သေချာမှုရှိသလဲ ၊ ကလေးခိုးတာကို ဆရာမမျက်မြင်တွေ့ခဲ့တာလား ၊ တခြားလူပြောလို့သိတာလားဆိုတာကို အရင်မေးမြန်းမှာပါ။ ဆရာမက မျက်စိနဲ့တပ်အပ်တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ပြောရင်တောင် အိမ်ရောက်ရင် ကလေးကို ကျွန်မပြန်မေးပြီး နောင်ဒီလိုမလုပ်ဖို့ ဆုံးမပါ့မယ်။ အရင်ကလည်း ဒီလိုမလုပ်ဖို့ ဆုံးမထားတာမို့ ဒီလိုလုပ်ကျင့် ကလေးမှာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ ကျွန်မအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ ကလေးဘက်က ကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်မှ ကလေးကို သေချာမေးပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောဆိုဆုံးမတာမျိုး လုပ်မှာပါ။
ဆရာမအပြောလည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သံသယ ၊ ကလေးဟာလည်း မှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နှစ်ဘက်မျှတ မှန်ကန်တဲ့ သဘောထားကို ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို နှစ်ဘက်စကား သေချာနားထောင်ပြီးမှ ကိုယ့်ကလေးကို ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ကိုယ့်ဆိုဆုံးမမှုနဲ့သူ့စာရိတ္တ မြဲမြံနေအောင် အားပေးရင်း၊ ထောက်ခံရင်း မကောင်းတာတွေ မလုပ်မိဖို့ ပညာရှိရှိ ဆုံးမသွားမှာပါ။
တခြားသူအပြောကြောင့် ဆရာမက ကိုယ့်ကလေးခိုးတယ်လို့ စွပ်စွဲလာခဲ့တာမျိုးဆိုရင် ကြားလူက နှစ်ယောက်တောင် ဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီတခြားသူဆိုတာ ကိုယ့်ကလေးကို ချောက်တွန်းလိုစိတ်ရှိသူလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ၊ ဆရာမလည်းမှားနိုင်တယ် ၊ ကိုယ့်ကလေးဟာလည်း မှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကလေးနဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို သေချာနားထောင် သုံးသပ်ပြီးမှ အရင်အဖြစ်တွေ ၊ကိုယ့်ဆိုဆုံးမမှုတွေနဲ့ ကလေးရဲ့ ပင်ကိုယ်စာရိတ္တအခံကိုကြည့် ဆုံးဖြတ်ဆုံးမရမှာပါ။
သားသမီးယုံလို့ စုံလုံးကန်းဆိုတဲ့ စကားလည်းရှိသလို ကိုယ့်သားသမီးကို အုပ်ထိန်းသူမိဘ အထူးသဖြင့် မိခင်ထက် ဘယ်သူက ပိုသိနားလည်နိုင်မလဲနော်။ ကိုယ့်သားသမီးကိုတောင် ကိုယ်ကယုံကြည်မှု မပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူက ယုံကြည်ပေးမှာလဲ။ ဒါကြောင့် မှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာ အသာထားလို့ အားနည်းတဲ့ ကိုယ့်သားသမီးကို လူအများရှေ့ အရှက်ရအောင် ပြောဆို ၊ ဆူပူ ၊ ရိုက်နှက်ဆုံးမတာမျိုးတွေကို မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေက ရှောင်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ အမှားလုပ်တယ်လို့ အပြောခံရတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ချစ်သူ ၊ အိမ်ထောင်ဘက် ၊ မိဘမောင်နှမနဲ့ အရင်းအချာလို ယုံကြည်ချစ်ခင်ရသူတွေ ဖြစ်နေရင်ရော ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ။ လူတွေ၊ အခြေအနေတွေ ကွာခြားနေပေမယ့် မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းရမယ့် နည်းနာကတော့ ရိုးရှင်းစွာတနည်းပဲရှိပါတယ်။
နားနှစ်ဖက်ရှိတာမို့ ကိုယ့်ခံစားမှုတွေ ၊ အတွေးတွေ ၊ အထင်တွေ အသာထားပြီး နှစ်ဘက်စကားကို နှစ်ဘက်နားနဲ့ စိတ်အေးအေးထားပြီး နားထောင်ပါ။ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေ ၊ ဖြစ်နေတာတွေ ၊ ဖြစ်နိုင်တာတွေကို မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောပါ။ ရေရှည်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်တာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ လက်သည်းပိုးကိုက်တာလေးကို လက်တဘက်လုံးဖြတ်ပစ်စရာမလိုတဲ့ အခြေအနေဆိုတာ မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ပါမှ လက်တစ်ဘက်ကို တသက်တာ မဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/feed/0ကိုယ့်ကိုမှ ပိုချစ်လေမလားလို့ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%9c/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%9c/#respond Sun, 05 Mar 2017 02:14:11 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73987
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%95%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%9c/feed/0အပြင်လူ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%b0/ Wed, 15 Feb 2017 11:29:58 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73862
ချစ်သူတွေ တစိမ်းကဲ့သို့ အပြင်လူဖြစ်သွားတဲ့အခါ ၊ တမိုးအောက် အတူနေခဲ့ဖူးသူတွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် တစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ၊ အနီးစပ်ဆုံး ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသူတွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အပြင်လူတစ်ယောက်လို ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ခံစားချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။
အချစ်ဆုံးချစ်ခဲ့ကြတယ်။ တဘဝလုံးရည်ရွယ်လို့ တွဲခဲ့ကြတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကွဲခဲ့ကြတယ်။ မပတ်သက်ကြတဲ့ အပြင်လူတွေ ဖြစ်သွားရုံနဲ့ ဒီလူတွေရင်ထဲ ဘာမှ မခံစားရတော့ဘူးတဲ့လား။ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တွယ်တာမိလေ ခံစားချက်တွေ အထိနာလေမို့ မတွဲဖြစ်ကြရုံနဲ့ ဘာမှ မခံစားရတော့ဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူးလေ။
တချို့တွေက မပြောဘူး။ ဆက်ချစ်တုန်းပဲ။ တချို့တွေက မပြဘူး ကြိတ်ခံစားနေရတာကို။ တချို့တွေက အပြုံးတွေနှုတ်ခမ်းပေါ် တန်ဆာဆင်ထားပေမယ့် ရင်ထဲမှာငိုနေတုန်းပဲ။ တချို့တွေက စိတ်နာနာနဲ့ အရွဲ့တိုက်ကြတယ်။ တချို့တွေက စိတ်နာနာနဲ့ ကြိုးစားလိုက်ကြတယ်။ တချို့တွေက အမုန်းတွေနဲ့ အငြှိုးထားတယ်။ တချို့တွေက သူပျော်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်။ သူ့အကြောင်းနဲ့ သူပေါ့လေ။
အချိန်တွေက ခင်မင်မှုတွေ ၊ အချစ်တွေကို ပြောင်းလဲတတ်ပါသလား။ အရင်က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ၊ အခင်ဆုံးတွဲခဲ့ကြသူတွေ ခုများမှာ ခေါ်ချင်သလို ၊ မခေါ်ချင်သလို တခုခုကြီး ခြားထားသလို ခံစားဖူးကြသလား။ ဘာတွေက အရောင်ဆိုးခဲ့ကြပါသလဲ။ ပကာသနလား။ ဂုဏ်ရှိန်ဝါတွေလား။ ဟန်ကိုယ့်မှုတွေလား ။ သိမ်ငယ်မှုတွေလား။ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိကြမှာဖြစ်ပေမယ့် အဖြူစင်ဆုံးခင်မင်မှုတွေကို အချိန်တွေက အရောင်ဆိုးလိုက်တာနဲ့အမျှ ပြန်ရဖို့ ခက်ခဲသွားပြီ။ တကယ်ဆို လူတွေက အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲသွားကြတာပါ။
တမိုးအောက်မှာ ဝေမျှနေထိုင်ခဲ့သူတွေ မရှိအတူတူ ၊ ရှိအတူတူ ဘာမှမဟုတ်ခင်က အားလုံးအဆင်ပြေပါရက် တဦးတယောက်များ တော်တော်လေး အလုပ်ဖြစ် အဆင်ပြေလာပြီဆို ဝင်နှောက်လာတဲ့ စိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေက အချင်းချင်းအကြား နားလည်မှုတွေ အတော်များများကို ရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ကြတာ များတယ်။ တစ်ယောက်က မနာလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ တစ်ယောက်ကနှိမ်တယ်လို့ထင်တယ်။ သိမ်ငယ်စိတ်တွေရယ် ၊ အားပေးချင်စိတ်တွေရယ် ရောပြွန်းသွားတဲ့အခါ စေတနာအမှန်တောင်မှ စော်ကားခံရတတ်တယ်။
ဘဝနှစ်ခုကို တသက်တာ မျှဝေခံစားရင်း ပျော်လည်းအတူ ၊ ဝမ်းနည်းလည်းအတူ ၊ ဒို့သားသမီးတွေနဲ့ အေးအတူ ပူအမျှ လက်တွဲသွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပေါင်းသင်းခဲ့ကြသူနှစ်ဦး ကွဲလွဲလာတဲ့ ခံယူချက်တွေရယ် ၊ လိုအပ်ချက်တွေရယ် ၊ ဆန္ဓတွေရယ်အောက်မှာ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဘူးရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြစ်တွေဖို့ကြမယ်။ ဒီကတဆင့် နစ်နာစေမယ့်စကားတွေ ပြောမယ်။ စိန်ခေါ်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ မခံစားနိုင်တဲ့အဆုံး နင့်လမ်းနင်သွား ၊ ငါ့လမ်းငါသွားလို့ လမ်းခွဲကြတဲ့အခါ ပြတ်သွားတဲ့ချည်မျှင်တခုလို ဘဝတခုဟာ ဆက်ထုံးလေးတော့ ကျန်ခဲ့မှာပေါ့။ ခံစားချက်တွေ စင်းလုံးချော မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ။
လုပ်သွားခဲ့သူက နောင်တရကောင်းရမယ် ၊ ပြင်ကောင်းပြင်မယ် ၊ ဆက်လုပ်ကောင်းလုပ်မယ် ၊ သူ့အနာဂါတ် သူဆက်ဖန်တီးမှာပါ။ အရင်းနှီးဆုံး ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့အနာဂါတ်ထဲမှာ ကိုယ်ဟာ အပြင်လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆို သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတိတ်က ကိုယ့်ကို စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေချည်းပေးခဲ့ရင် ဝဋ်ကြွေးကျေပြီလို့ မှတ်လိုက်မယ်။
အရင်းနှီးဆုံး ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ့အနာဂါတ်ထဲမှာ ကိုယ်ဟာ အပြင်လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆို သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတိတ်က ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ရရှိစေခဲ့မယ်ဆို တိုက်ဆိုင်တိုင်း ဖျတ်ခနဲဖြစ်ဖြစ် သတိရမိတတ်တယ်။ ခံစားချက်တွေ ပိုလေးနက်တဲ့အခါ အတွေးဆက်လို့ တခါတလေ အလွမ်းပိုလာတတ်တယ်။
ချစ်နေလျက်ကနေ သူ့အနာဂါတ်ထဲ ကိုယ်မပါတော့ဘူးရယ်လို့ ကျင့်ကြံနေထိုင်ရမယ်ဆို သိပ်ရင်နာစရာကောင်းမှာပဲ။ သူ့ဘဝမှာ ကိုယ်ဟာ အပြင်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ။ သူ့အနာဂါတ် ကိုယ်ပါဝင်ခွင့်မရတော့သလို ကိုယ့်အနာဂါတ်ထဲလည်း သူမပါဝင်လာတော့ဘူးလို့ ချစ်လျက်နဲ့ မိမိစိတ်ကိုလေ့ကျင့် နေထိုင်သွားရမယ်ဆို ဟက်တက်ကွဲနေတဲ့ဒဏ်ရာ ကိုယ်တိုင် အံကြိတ်ဆေးထည့်နေသလိုပါပဲ။ တချိန်ချိန်တော့ ဒီဒဏ်ရာ အသားနုတက်ပြီး ကျက်သွားမှာပါ။ နောင်တချိန်မှာ အဆင်ပြေသွားမှာပါပေါ့။
အချိန်က ကုစားသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ တကယ်ကုစားနိုင်သလား ။ မေ့နိုင်သူတွေက ဟုတ်တယ်ဖြေကြတယ်။ မမေ့နိုင်သူတွေက မဟုတ်ဘူးဖြေကြတယ်။ အစွဲလမ်းကြီးသူတွေကတော့ အလကားပါကွာတဲ့။ လွမ်းတာကို နာတာနဲ့ဖြေပါဆိုလည်း နာစရာရယ်လို့ မမှတ်ယူသူတွေက ဘာနဲ့ဖြေရမှာလဲ။ တချို့က မျက်ရည်နဲ့ဖြေကြတယ်။ တချို့က အစားထိုးဖြေကြတယ်။ တချို့က အမြင့်တက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း တမင်ကိုမေ့ထားဖို့ကြိုးစားတယ်။
အပြင်လူတဲ့ …. စကားလုံးက ရိုးသလိုလိုနဲ့ ခံစားချက်တွေက တဘဝစာပါလောက်တယ်။ အပြင်လူတစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို ဆက်နေနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ လမ်းကြုံ တွေ့တဲ့အခါ မျက်နှာလွှဲသွားမလား ၊ ပြေးရိုက်ချင်စိတ်တွေဖြစ်နေမလား ၊ တမင်ရှောင်သွားမလား ၊ နောက်ကျောကိုငေးကြည့်ကျန်မလား ၊ မျက်ရည်ကျနေမလား။ ဒါက ကိုယ့်ခံစားမှုနဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပါ။ တစိမ်းဆိုလည်းဟုတ် အပြင်လူလည်းဟုတ် ဘာမှမဟုတ်တော့တဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ချစ်မေတ္တာလေးများ ကြွင်းကျန်ရင် တဖက်သား ပျော်ပါစေလို့ ရည်စူးမိမှာပဲ။
]]> တာဝန်ယူတဲ့သူနဲ့ တာဝန်မယူတဲ့သူ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%9a/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%9a/#respond Wed, 08 Feb 2017 06:46:32 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73614
လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေလို့ ပြောစမှတ်ရှိသလို ပုရိသအမျိုးသားတွေကိုလည်း အမျိုးမျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြမှာပါ။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ ယောက်ျားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ယောက်ျားရယ်လို့ပဲ ခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို မပြောခင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို အရင်ပြောရမှာပါ။ ချစ်ကြိုက်ပြီး အချစ်ခရီးလွန်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေထဲမှာ ရရှိလာတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲလို့ ကာယကံရှင်နှစ်ဦး ခေါင်းချင်းဆိုင် အဖြေရှာကြတယ်။ ကောင်မလေးအများစုက လက်ထပ်ပြီး လွယ်ထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို မွေးချင်တယ်။ တချို့အမျိုးသားတွေ(အများစု)က အချိန်မတန်သေးဘူး ဘာ ညာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြလို့ ဒီကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ တချို့ကတော့ ကိုယ်ဝန်ကို တာဝန်ယူလိုစိတ် (မိမိချစ်သူကိုငဲ့ညှာစိတ်)နဲ့ တာဝန်ယူလက်ထပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ် သုံးသပ်ရင် တာဝန်ယူတဲ့သူနဲ့ တာဝန်မယူတဲ့သူ ကွဲပြားသွားတာပါပဲ။ အဆိုးဆုံးသောအခြေအနေမှာ ခေါင်းရှောင်သွားတဲ့ အမျိုးသားကြောင့် အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ့်ဘာသာဖြေရှင်းလိုက်ရတာပါပဲ။ အချိန်မတန်သေးဘူးဆိုတာ အစကတည်းက ကြိုမတွေးခဲ့သင့်ဘူးလား။ မိန်းကလေးအများစုဟာ ဒီလိင်ကိစ္စ ၊ သန္ဓေတားတဲ့ကိစ္စတွေမှာ […]]]>
လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေလို့ ပြောစမှတ်ရှိသလို ပုရိသအမျိုးသားတွေကိုလည်း အမျိုးမျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြမှာပါ။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ ယောက်ျားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ယောက်ျားရယ်လို့ပဲ ခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို မပြောခင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို အရင်ပြောရမှာပါ။
ချစ်ကြိုက်ပြီး အချစ်ခရီးလွန်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေထဲမှာ ရရှိလာတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲလို့ ကာယကံရှင်နှစ်ဦး ခေါင်းချင်းဆိုင် အဖြေရှာကြတယ်။ ကောင်မလေးအများစုက လက်ထပ်ပြီး လွယ်ထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ကို မွေးချင်တယ်။ တချို့အမျိုးသားတွေ(အများစု)က အချိန်မတန်သေးဘူး ဘာ ညာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြလို့ ဒီကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ တချို့ကတော့ ကိုယ်ဝန်ကို တာဝန်ယူလိုစိတ် (မိမိချစ်သူကိုငဲ့ညှာစိတ်)နဲ့ တာဝန်ယူလက်ထပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ် သုံးသပ်ရင် တာဝန်ယူတဲ့သူနဲ့ တာဝန်မယူတဲ့သူ ကွဲပြားသွားတာပါပဲ။ အဆိုးဆုံးသောအခြေအနေမှာ ခေါင်းရှောင်သွားတဲ့ အမျိုးသားကြောင့် အမျိုးသမီးဟာ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ့်ဘာသာဖြေရှင်းလိုက်ရတာပါပဲ။
အချိန်မတန်သေးဘူးဆိုတာ အစကတည်းက ကြိုမတွေးခဲ့သင့်ဘူးလား။ မိန်းကလေးအများစုဟာ ဒီလိင်ကိစ္စ ၊ သန္ဓေတားတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အပျိုစစ်လေ ဗဟုသုတနည်းလေပါ။ ပြီးတယ်ဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိဘဲ ဆက်ဆံပြီးသွားတဲ့ တုံးနန မိန်းကလေးတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေကြတယ်လို့ ကျွန်မပြောရင် သိပ်ဒဲ့ကျသွားလေမလား။ သေချာတာကတော့ ဒီကိစ္စမှာ ဗဟုသုတရှိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရှာရှာဖွေဖွေ လေ့လာဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကလွဲရင် (အထူးသဖြင့် အပျိုလေးတွေ)ဟာ ရည်းစားဆန္ဒကို လိုက်လျောရင်းနဲ့သာ အတူနေဖြစ်သွားကြတာပါ။ ပြီးတယ်ဆိုတာဘာမှန်းမသိသလို ၊ သုတ်ရည်ဆိုတာလည်း မမြင်ဖူး ၊ အဲဒီသက်ရောက်မှုဟာ ဘယ်လောက်အထိ တာသွားသလဲဆိုတာ နိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာတဲ့သူရှားတယ်။
မ ဟာ မ သဘာဝရှိတယ် ။ ကျားဟာ ကျားသဘာဝရှိတယ်။ မ သဘာဝကို ကျားကနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်သလို ကျား သဘာဝကိုလည်း မ ဟာ နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောရရင် အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးသမီးတိုင်း ဓမ္မတာသွေးဆင်းတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာသွေးဆင်းလေ့ရှိပြီး ဘယ်နှစ်ရက်ကြာတယ် ၊ ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ အမျိုးသားတွေနားလည်ခံစားသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ သူ့သဘာဝမဟုတ်လို့ပါ။
ဒီအတိုင်းပဲ အရွယ်ရောက်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ စိတ်ဆန္ဒပြင်းနေချိန် သုတ်ရေကြည်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြီးသွားရင် သုတ်ရည်ထွက်တယ်ဆိုတာကို အမျိုးသားတွေပဲသိတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာပြီးခါနီးနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာထွက်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသားတွေပဲ သိနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ဒီသုတ်ရည်ဟာ အရည်ကြည်ထဲမှာကတည်းက သုတ်ကောင်တွေ ပါဝင်ပြီး မအင်္ဂါထဲ ရောက်သွားရင် မမျိုးဥနဲ့ ပေါင်းစပ်လို့ ကိုယ်ဝန် (ကလေး)ရသွားနိုင်တယ်။ အမျိုးသားစိတ်ဆန္ဒပြီးသွားရင် ထွက်တဲ့သုတ်ထဲမှာ သုတ်ကောင်တွေ ပါဝင်ပြီး မအင်္ဂါထဲ ရောက်သွားရင် မမျိုးဥနဲ့ ပေါင်းစပ်လို့ ကိုယ်ဝန် (ကလေး)ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဆန္ဒနောက် လိုက်ပါ စပ်ယှက်မိကြတဲ့ အမျိုးသားကော ၊ အမျိုးသမီးကော ဗဟုသုရှိမှု ရာခိုင်နှုန်းနည်းကြတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျွန်မကို စာရေးမေးမြန်းကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကြောင့် သူတို့ဟာ သုတ်အပြင်ထုတ်လွှတ်ရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ မှတ်ယူနေကြတယ်။ လိင်တံထိပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ကတဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မဆက်ဆံခင် အင်္ဂါချင်း ထိတွေ့နေတုန်း ၊ ဆက်ဆံနေတုန်းမှာ ဝင်သွားနိုင်တဲ့ သုတ်ကောင်တွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေရှိတာကို သူတို့မသိကြဘူး။
တချို့အမျိုးသားတွေက သိပေမယ့် ရလာလည်း ကိုယ့်တာဝန်မဟုတ်ဘူးလို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ဆန္ဒရှေ့တန်းတင်ပြီး မကာမကွယ် စပ်ယှက်ကြတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကျတော့ ဗဟုသုတရှိပေမယ့် ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် မလွန်ဆန်ရဲဘူး။ ဟင့်အင်းလို့ အတင်း မငြင်းချင်ဘဲ တခဏတာ လိုက်လျောလိုစိတ် ကြီးစိုးသွားလို့ ဒုက္ခများသွားတာတွေလည်း ရှိတယ်။
ဆန္ဒနောက် အလိုတူအလိုပါ လိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလည်း ဒီနှစ်ယောက် ၊ ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုလည်း အတူတကွ ဖြေရှင်းသင့်တာ ဒီနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါလုပ်ရင် ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံ ဗဟုသုတလေးတော့ အမျိုးသားရော ၊ အမျိုးသမီးတွေမှာပါရှိတယ်။ တာဝန်ရှိသူချင်းအတူတူထဲမှာမှ ဒီလိုဆက်ဆံဖို့ အခြေအနေ ဖန်တီးတောင်းဆိုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ပိုပြီးတာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျွန်မပြောရင် မလွန်ပါဘူးနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကြက်မ တွန်လို့ မိုးမလင်းပါဘူး။ အမျိုးသားရဲ့အင်္ဂါသာ မတောင့်တင်းခဲ့ပါရင် ၊ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မတောင်းဆိုဖြစ်ခဲ့ရင် ၊ ကြိုတင် ကာကာကွယ်ကွယ် ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင် သန္ဓေမအောင်နိုင်ဘူးလေ။
ဆက်ဆံနည်းပညာတွေကိုသာ ဆည်းပူးခဲ့ပြီး ကာကွယ်နည်းတွေကို မဆည်းပူးမလေ့လာခဲ့တာ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ ပထမအမှားပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ်မှားရင် ကိုယ်တာဝန်ယူရဲရမှာပေ့ါ။ ကိုယ်က မြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးလား။ စိတ်ယုတ်မာမထားသင့်ဘူးလေ။ စိတ်လာလို့ အတူနေဖို့တောင်းဆိုတယ် ၊ မွှန်နေတာပဲသိ ဘာမှမသိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နှစ်ယောက်အတူနေဖြစ်တဲ့ရလဒ် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ တဖက်မိန်းကလေးကို ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး ၊ ငါတာဝန်ယူစရာမလိုဘူးလို့ ခေါင်းရှောင်တာ ယုတ်မာတာပဲပေါ့။ တချို့ကျတော့ အတင်းဖျက်ချခိုင်းတယ်။
မိန်းကလေးဆိုတာ နာဘက်ကပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ခုခေတ်အမျိုးသမီးလေးတွေ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်စေချင်လိုက်တာ။ ကိုယ့်ချစ်သူကို လိုက်လျောပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတာဝန်မယူရင် ကိုယ့်ဗိုက်ထဲကတာဝန် ကိုယ့်ဘာသာယူရလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကြိုတွေးထားရင်ကောင်းမယ်။ ဒါကိုကြိုတွေးမိရင် ကြိုပြင်ဆင်ဖြစ်တာပေါ့။ မကာကွယ်ရင် နောင်မှာ ကိုယ်အရင်အရှက်ကွဲမှာ။ တားဆေးတွေသောက် ၊ သုံးပြန်တော့လည်း ကိုယ်တွေမိန်းကလေးတွေပဲ ဒုက္ခခံရတာပါ။ ဘာဒုက္ခလဲဆို အတိုင်းအဆလွန် သုံးခဲ့တဲ့ဆေးတွေကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကိုယ်ပဲခံစားရတာလေ။
ဒီခေတ်မှာ ကိစ္စပြီး အမျိုးသားလေးတွေ တာဝန်ယူမှုအများဆုံးက တခါသုံးဆေး မိန်းကလေးကို တိုက်ကျွေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒါဟာ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူလိုက်တယ်လို့ သူတို့ထင်နေတယ်။ အဲဒီဆေးတွေက အလွန့်အလွန် ဖြစ်ခဲတဲ့ မုဒိမ်းမှုတွေမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးကလေး မိအေးနှစ်ခါနာ မဖြစ်ရအောင် (ကိုယ်ဝန်မဖြစ်ပေါ်လာအောင်) ဆေးပညာရှင်တွေက တိုက်ကျွေးတဲ့ဆေးတွေပါ။
သူ့ရဲ့အာနိသင်ဟာ ဟော်မုန်းတွေကို ကပြောင်းကပြန်ဖြစ်သွားအောင်ထိ ပြင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သောက်သုံးသူ အမျိုးသမီးလေးဟာ တသက်မှာ တခါလို အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာမျိုးဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ သန္ဓေသားကို တားဆီးဖို့ ဟော်မုန်းတွေ ကပြောင်းကပြန် ပြောင်းလဲဖြစ်တာ တသက်မှာတကြိမ်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတဲ့ ဒီဆေးကိုသောက်သုံးလို့ ရရှိလာမယ့်ဆိုးကျိုးကို တွက်ဆဖို့ထက် မုဒိမ်းကောင်ရဲ့သန္ဓေသားကို မလွယ်ရဖို့ မိန်းကလေးအတွက် ပိုအရေးပါနေတာမို့ ဒီဆေးကို ဆေးပညာရှင်တွေက သုံးလိုက်တာ။ အဆိုးထဲကအကောင်းတွက်ဆလို့ တကြိမ်တခါ သုံးစေတာပါ။
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အဲဒီတခါသုံးဆေးဆိုတဲ့ (Emergency Pills)ကို သုံးလိုတဲ့သူတွေဟာ ဆရာဝန်ကို အရင်ဆွေးနွေးပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရပါမှ ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်ခွင့်ရတာ ၊ ဆရာဝန်က ဆေးပေးလိုက်တာမျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို လမ်းထောင့်ဆေးဆိုင်တိုင်းမှာ လိုသလို (လိုသလောက်) ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာ သိစေချင်လိုက်တာ။ ဘာလို့ဒီလိုခက်ခဲအောင် လုပ်ထားတာလဲဆိုရင် အဲဒီဆေးဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အလွန်များလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသလဲဆို နို့တိုက်မိခင်ဟာ အဲဒီဆေးသောက်ဖို့လိုအပ်လာရင် ကလေးကို သုံးရက်တိတိ (မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံး ၂၄နာရီတိတိ) နို့တိုက်ကျွေးမှု မပြုရပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဆေးရဲ့အာနိသင်ဟာ တိုက်ကျွေးတဲ့နို့ရည်ကတဆင့် နုနယ်တဲ့ ကလေးဆီကို ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိ ပြင်းလို့ပါ။ ဘယ်လောက်အထိ ကလေးဟာ ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်သလဲဆို ကလေးဟာ မြုံသွားတဲ့အထိ (နို့စို့ချိန်မှာ နို့ထဲဝင်လာတဲ့ အဲဒီဆေးအာနိသင်ကြောင့် အကျိုးဆက်အဖြစ် မြုံသွားလို့ ကြီးလာရင် မျိုးဆက်ပြတ်သွားတဲ့အထိ) ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ဒါတွေကို သိစေချင်လိုက်တာ။ ဒီတခါသုံး အရေးပေါ်ဆေးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလောက်ထိ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတဲ့ဆေးပါလို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သိစေချင်လိုက်တာ။
ချစ်သူကို အကောင်းဆုံးပေးသင့်တဲ့ ချစ်သက်လက်ဆောင်က ကိုယ်ချင်းနီးစပ်မှုလို့ တွေးခေါ်နေကြတာ ၊ အဲဒီနောက်မှာ မတားခဲ့သူတွေက အရေးပေါ်ဆေးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်သလို ၊ နောင်ဖြစ်မှနောင်ရှင်း နေဖြစ်သွားတဲ့စုံတွဲတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တာဝန်ယူတတ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ အမျိုးသားဆိုပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့တာပဲ။
တခါတလေမှာ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ အမျိုးသားဆိုတာ ကာလနဲ့ တွဲတဲ့အမျိုးသမီးအပေါ် ကွာခြားလို့ ဒီအမျိုးသားတစ်ဦးတည်းက အခြေအနေနှစ်မျိုးကို ဖန်တီးတတ်ကြတယ်။ အဲဒီအမျိုးသားဟာ အိမ်ထောင့်တာဝန်မထမ်းနိုင်သေးလို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင့်တာဝန် မထမ်းချင်သေးလို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် တဖက်မိန်းကလေးကို အတည်မရည်ရွယ်ခဲ့ဘဲ အတူနေရုံသဘောထားခဲ့လို့ စသဖြင့်သော အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးရဲ့တာဝန်ကို မယူဘဲဖျက်ချခိုင်းတာ ၊ ခေါင်းရှောင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီအမျိုးသားကပဲ အိမ်ထောင့်တာဝန်ထမ်းနိုင်တဲ့အခါ ၊ တဖက်မိန်းကလေးကို တကယ်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ငဲ့ညှာစိတ်ဝင်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ် ကြီးစိုးသွားတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်အပြော ၊ ဘယ်သူတွေဘာထင်ထင် ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ ဦးဆောင်တာဝန်ယူ လက်ထပ်ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုမတူတဲ့ အခြေအနေ နှစ်မျိုးစလုံးကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတွေကို တကယ့်လက်တွေ့ ကျွန်မမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ အတူနေလိုက် ၊ ဖျက်ချခိုင်းလိုက် ၊ ခေါင်းရှောင်လိုက်လိုက် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ကပဲ လက်မထပ်ခင်ရတဲ့ကလေးကို တာဝန်ယူလို့ အိမ်ထောင်ထူထောင်သွားကြတာကိုပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူက တာဝန်မယူတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုတာ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှ မသိချင်ပါနဲ့ မိန်းကလေးတို့ …. နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94-%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%9d%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%9a/feed/0ငဲ့ညှာပါ … မောင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%84%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%8a%e1%82%87%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%ab-%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%84%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%8a%e1%82%87%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%ab-%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/#respond Fri, 27 Jan 2017 14:02:53 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73537
မောင်ရေ … မောင်ဖြစ်စေချင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်မကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်မဆန္ဒတွေကို ဖိနှိမ်ရင်း ၊ တခါတရံ ကျွန်မစိတ်ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့ပေါ့။ ကျွန်မဆန္ဒထက် မောင့်ဆန္ဒက ကျွန်မအတွက် ပိုအရေးကြီးတယ်လေ။
စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တိုင်း မျက်နှာညို ၊ စိတ်မတိုပါနဲ့မောင်။ ရင့်သီးတဲ့မောင့်စကားလုံးတွေက ကျွန်မနားဝကတဆင့် နှလုံးသားထိစီးဆင်းလို့ နာကျင်ရတယ်။
ခွန်းတုန့်ပြန်ပြောမိပေမယ့် ကျွန်မပါးကမျက်ရည်တွေကို မောင်သိတာလည်းရှိ ၊ မောင်မသိတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာ မောင်ယုံလိုက်ပါ။ မောင့်ကွယ်ရာမှာ ကျိတ်ငိုရတဲ့အကြိမ်ရေ နည်းမှမနည်းဘဲလေ။
ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာပေါ့ မောင့်အလိုဆန္ဒတိုင်း …. ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ဆန္ဒတွေတောင် ကျွန်မ မဖြည့်ပေးနိုင်ဘူးရယ် ။ မောင့်စိတ်တိုင်းကျ ကျွန်မ မဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အခါတွေကို မောင်နားလည်ပေးနော် ။ မောင်ပျော်တာ ကျွန်မတကယ်မြင်ချင်တာပါ။
ကျွန်မဆန္ဒတိုင်း မောင်ဖြည့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ကျွန်မဆန္ဒတွေဖြည့်ပေးဖို့ မောင့်ကို ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ။ မောင့်ဖြစ်တည်နေမှုလေးကို ချစ်ခဲ့တာ။ အဲဒီထဲမှာ မောင့်ရုပ်သွင်နဲ့ မောင့်စိတ်ဓါတ်လေးလည်း ပါတယ်။
တကယ်ဆို ကျွန်မတို့ လက်တွဲသွားရမယ့်ခရီးလမ်းက တဘဝစာအရှည်ကြီးလေ။ ကျွန်မတို့ရဲ့အချစ်ခရီးဟာ ခုမှအစရှိသေးတယ်။ ကျွန်မတို့လက်တွဲ မြဲမြံလေ ကျွန်မတို့ ငဲ့ညှာရမယ့်သူတွေ တိုးလာလေမဟုတ်လား။
မောင့်ကိုချစ်လို့ မောင့်မိဘကိုလည်း ကျွန်မချစ်ပါ့မယ်။ သူတို့မရှိဘဲ မောင်ဆိုတာ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလေ။ မောင့်ဆွေမျိုးတွေကိုလည်း ဂါရဝတရားနဲ့ လေးစားဦးမှာပါ။ သူတို့နဲ့မောင်ဟာ မခေါ်လို့သာရမယ် ၊ မတော်လို့မှမရဘဲ။ မောင့်မွေးချင်းဆိုတာရယ် ၊ မောင့်အသိုင်းအဝန်းဆိုတာရယ် ၊ မောင့်အပေါင်းအသင်းဆိုတာတွေနဲ့ ကျွန်မသဟဇာတရှိပါမှ မောင်ဂုဏ်တက်မှာ ကျွန်မသိပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံသူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှမရှိတာမို့ အမှားကလေးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က တစိမ်းတွေ အတူနေကြမှာမဟုတ်လား။ ကိုယ့်သွေးသားရင်းတွေတောင် စိတ်အခန့်မသင့်တဲ့အချိန်တွေ ရှိနေတာမို့ တစိမ်းတွေဆက်ဆံတဲ့အခါ မောင့်မျက်နှာနဲ့ ကျွန်မစိတ်တွေ နှိမ်ချထားပါ့မယ်။ မောင်ရော ကျွန်မလို ကျိုးနွံဆက်ဆံသွားမယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်မမိဘဆွေမျိုးနဲ့ အသိုင်းအဝန်းဆိုတာကိုလေ …
တချိန်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်သွေးလေးတွေလည်း ကျွန်မတို့မျိုးဆက်အဖြစ် ရှိလာဦးမယ်။ သူတို့အတွက်စံပြအဖြစ် ကျွန်မတို့နေပြရအောင်။ ဒီမိသားစုထဲ လူဖြစ်လာတာ ကံကောင်းလှချည်ရဲ့လို့ သူတို့ကို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေချင်တာ။ မောင်နဲ့တူတဲ့ ရင်သွေးလေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ၊ ကျွန်မနဲ့တူတဲ့ ရင်သွေးလေးတွေလည်း ရနိုင်တယ်။ ရင်ခုန်စရာကောင်းလိုက်တာ …
ဘဝမှာ ဘယ်လောက်မောပန်းနွမ်းနယ်ပစေ … သူတို့အတွက်ရည်စူးလို့ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။ သူတို့ခြေထောက်ပေါ် သူတို့မရပ်တည်နိုင်သရွေ့ သူတို့ရှေ့က ဖေးမရည်တည်ပေးသွားဖို့ ကျွန်မတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်မောင်။ ဒီတာဝန်က နက်နဲတယ် ၊ ကြီးလေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ကျေအောင်ထမ်းရမယ်။ ကျွန်မကတော့ မေတ္တာတရားနဲ့ ထမ်းပိုးမယ်မောင်။
မောင်နဲ့လက်တွဲသွားမယ့် ဘဝခရီးရှည်ကြီးမယ် ကျွန်မရည်ရွယ်မျှော်တွေးထားတာက ဒီမှာတင်မပြီးဘူးမောင်။ အသိုက်ကိုစွန့် သူ့လမ်းသူလျှောက်သွားတဲ့ သားသမီးတွေကြောင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့မယ်ဆို အရေပြားလျော့တွဲတွဲဖြစ်နေတဲ့ တစ်ဦးလက်တစ်ဦး အပြန်အလှန်မြဲမြဲတွဲလို့ ဘဝမှာပင်ပန်းခဲ့သမျှ အတူစိတ်အပန်းဖြေချင်တယ်မောင်။
အိမ်ထောင်ဦးအစ ငွေကြေးမနိုင်လို့သော်လည်းကောင်း ၊ အိမ်ထောင့်တာဝန်နဲ့ မအားလပ်လို့သော်လည်းကောင်း ၊ သားသမီးတွေကိုငဲ့ညှာပြီး မသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရီးတွေ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် လည်ပတ်သွားရအောင်နော်။ တောင်မတက်နိုင်တော့ပေမယ့် ကမ်းစပ်မှာ ကျွန်မတို့နှစ်ဦး လေညှင်းခံနိုင်သေးတယ်။ အမောအပန်းမခံနိုင်တော့ပေမယ့် ဘုရားသွားကျောင်းတက်အတူ လိုတဲ့နေရာလေးတွေ လှူနိုင်သေးတယ်။ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ရုပ်သွင်တွေကို အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုလို့ ဇရာနဲ့ မရဏကို စိန်ခေါ်လိုက်ရအောင်နော်။ ဒို့နှစ်ဦး တက်ညီလက်ညီရှိပါတယ်လို့ …
မောင်ပဲအရင်ခွဲခွဲ ၊ ကျွန်မပဲအရင်ခွဲခွဲ ဦးဆုံးစွန့်သူ နောက်ဆံမငင်အောင် အားတင်းထားမယ်။ သေအတူရှင်မကွဲ ကတိပေးခဲ့ဖူးပေမယ့် တကယ့်တကယ်မှာ သွေကွဲ ၊ ရှင်ကွဲရယ်လို့ ရှိသေးတာပဲ။ သဘာဝတရားကို သဘာဝကျကျ လက်ခံရင်း ရှိုက်သံမထွက်စေရဘူးမောင်။ ကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကို လက်နဲ့မသိမ်းဘဲ ရင်ထဲထိ သိမ်းထားကြရအောင် … သေတဲ့အထိ သစ္စာရှိပြမယ်လို့။
ကျွန်မကတော့လေ နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိ သစ္စာရှိပါ့မယ်မောင် ။ မောင်ကလွဲလို့ ဘယ်သူ့မှ မချစ်နိုင်တော့ဘူး။ စွယ်တော်ရွက်ကလေး တဘက်လပ်သွားရင်တောင် ကော်နဲ့ပြန်ကပ်လို့မရပဲလေ …. ကျွန်မရဲ့အသည်းတခြမ်း တဘက်လပ်သွားခဲ့ရင် သေတဲ့အထိ သိမ်းထားပါ့မယ်။ မောင့်လွမ်းဆွတ်တိုင်း ထုတ်ကြည့်ဖို့လေ …
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%84%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%8a%e1%82%87%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%ab-%e1%80%b1%e1%80%99%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/feed/0စစ်မှန်သော အဖော်မွန်ဟူသည် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e/#respond Mon, 16 Jan 2017 11:53:04 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73482
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဘဝတသက်လုံးစာ လက်တွဲသွားဖို့ စစ်မှန်တဲ့အဖော်မွန်အဖြစ်နဲ့ ချစ်ချင်ကြတာပါ။ ဘယ်သူမှ လမ်းခွဲဖို့ ပေါင်းစပ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ အဖော်စစ်နဲ့ တွေ့ပြီးပေါင်းစပ်ချင်ပေမယ့် အဖော်စစ်ဟာ ဘယ်လိုလူလဲလို့မသိရင် စိန်ကောင်း ၊ ကျောက်ကောင်း လိုချင်ပေမယ့် စိန်ကောင်း ၊ ကျောက်ကောင်းရဲ့အရည်အသွေးတွေဟာ ဘာမှန်းမသိသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင် သူများပြောတာယုံနေတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ကံကိုပဲပုံချနေတာမျိုး ဖြစ်နေမပေါ့။
စိန်ကောင်း ၊ ကျောက်ကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်လိုရင် သူ့ရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကိုတော့ သိထားဖို့လိုတာပေါ့။ ဒါမှ ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတာ စိန်ကောင်း ၊ ကျောက်ကောင်း မို့ ပိုတန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိမှာပါ။ အဖော်မွန်အစစ်ကို ရရှိထားရက်နဲ့ တန်ဖိုးမသိဘဲ ပစ်ပယ်ထားမိမယ်ဆို ကိုယ့်လောက်မိုက်မဲတဲ့သူ ရှိပါဦးမလား။
အဖော်မွန်ကောင်းဆိုတာ တဘဝလုံးစာ ကိုယ့်နဘေးမှာ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ရှိပေးနေမယ့်သူ ၊ ကိုယ့်နဲ့အတူ ဘဝတိုက်ပွဲ အတူဝင်နွှဲမယ့်သူ ၊ ကိုယ်အားနည်းရင် ကိုယ့်ကူပြီး သူအားနည်းရင် ကိုယ်စိတ်ပူမစိုးလို့ အခြေအနေဆိုးတွေမှာ တောင့်ခံပြီး ကိုယ့်ကိုအားပေးတတ်သူ ၊ သူ့အပူ ကိုယ့်အပူခွဲမနေဘဲ အတူမျှဝေယူတတ်သူ ၊ တဘဝစာလက်တွဲဖို့ ရည်ရွယ်လက်တွဲခဲ့တာမို့ အချိန်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ချစ်စိတ်က ပြောင်းမသွားတတ်သူ ၊ အိုလာတာလည်းလက်ခံ ၊ နာလာတာလည်းလက်ခံလို့ ကိုယ့်လက်ကို မြဲမြဲတွဲထားသူပါ။
ရှင်းကာမှရှုပ်သွားပြီနဲ့တူတယ်။ အဖော်မွန်ကောင်းရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ကို လိုရှင်းတိုရှင်းနဲ့ အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မခင်ပွန်း ကျွန်မနဲ့ စချစ်ကြိုက်စဉ်အခါက ပြောခဲ့တဲ့စကားကို ငှါးယူရမှာပဲ။ တဘဝစာရည်စူးခဲ့တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲမမြဲခဲ့တာ ငါမှားခဲ့လို့များလားလို့ သံသယနဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ကျွန်မမှာရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မခင်ပွန်းဖြစ်လာမယ့်သူ့ကို ကျွန်မက ငါ့မှာဘာတွေပြင်စရာရှိနေသလဲ ၊ ငါ့မှာနင်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိနေရင်ပြောနော်။ ငါပြင်ပါ့မယ်လို့ ရည်းစားဘဝမှာ ဆိုခဲ့တုန်းက “JUST BE YOURSELF” လို့ သူဆိုခဲ့ဖူးတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ “နင့်ပုံစံအတိုင်းနင်နေပါ” လို့ အလွယ်ဘာသာပြန်ရမယ်ထင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလိုပြောတာလဲလို့ပြန်မေးခဲ့တော့ သူက ကျွန်မကိုစချစ်ခဲ့ကတည်းက ကျွန်မရဲ့ပုံစံကို လက်ခံပြီးချစ်ခဲ့တာမို့ သူလိုတဲ့ပုံစံကို ကျွန်မပြောင်းလိုက်ရင် ကျွန်မရဲ့ နဂိုမူရင်းပုံစံတွေ ပျောက်ပျက်သွားမှာ သူစိုးတာမို့ စားစား ၊ သွားသွား ၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျွန်မရဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်း လုပ်ကိုင်နေထိုင်ပါလို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ချစ်သက် (၁၀)နှစ်ကျော် အိမ်ထောင်သက်(၁၀)နှစ်နီးပါးရှိနေတဲ့ ယခုအချိန်ထိ ကျွန်မရင်ထဲစွဲနေတဲ့ သူ့စကားဟာ “Being yourself is my Love” ပါ။ ကျွန်မစိတ်သဘောအတိုင်းနေထိုင်တာကို သူချစ်တာတဲ့။ လေးလေးနက်နက်ဆိုခဲ့တဲ့ သူ့မျက်လုံးနဲ့ သူ့စကားလုံးတွေကြောင့် အဲဒီအချိန်ကတည်းက သူဟာ ကျွန်မရဲ့ အဖော်မွန်ကောင်းလို့ ကျွန်မတဝက်သတ်မှတ်ခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်းမှာ အပြောနဲ့အလုပ် တကယ် ညီ ၊ မညီဆိုတာ နည်းနည်းတော့ စောင့်ကြည့်စမ်းသပ်ခဲ့သေးတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ဟာ နှစ်တွေအကြာကြီးမတွဲဘဲ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နားလည်သထက်နားလည်လာတဲ့အချိန်မှာ လက်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။
ကျွန်မတို့ တကယ်လိုအပ်တာက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကို တသက်တာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူပါ။ ကိုယ့်ဘာပဲဖြစ်သွားသွား ၊ ဘယ်လိုပဲယိုယွင်းနေနေ ၊ ကိုယ့်ကို ချစ်မယ့်သူ ၊ နားလည်ပေးမယ့်သူ ၊ အားပေးမယ့်သူ ၊ ဖေးမမယ့်သူ ၊ ကိုယ့်လက်တဖက်ကို သေတပန်သက်တဆုံး လက်တွဲသွားမယ့်သူပါ။ ကိုယ်က ဒီလိုချစ်မယ့် အဖော်ကောင်းလိုချင်တယ်ဆို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုချစ်တတ်တဲ့ အဖော်ကောင်း သူ့အတွက် ဖြစ်ပေးသင့်တာပေါ့။ ရယူလိုမှုချည်းပဲ ရှေ့တန်းတင်လွန်းတဲ့အခါ တဖက်သတ်ဆန်သွားတာမို့ တဘက်လူက တသက်တာ ပေးဆပ်ချစ်သွားနိုင်ရင် ကိုယ်ကံကောင်းတာပေါ့။ ဘယ်အရာမဆိုတော့ အသွားအပြန်တော့ ရှိသင့်တယ်လေ။
ဘက်ညီတဲ့အဖော်ကောင်းတွေကမှ တက်ညီလက်ညီရှိကြတာပါ။ ဘက်မညီတဲ့အခါ တက်မညီတာမို့ ရှေ့ရောက်သင့်ပေမယ့် လှော်နေရင်းရှေ့မရောက်ဘဲ တဝဲလည်လည်နဲ့ အဆုံးစွန်မှာ ဘဝလှေကလေး မြုပ်သွားနိုင်တယ်လေ။ အဖော်ကောင်းတွေဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တက်ညီလက်ညီ ရှိရမယ်။ သူကတနေရာကိုဦးတည် ၊ ကိုယ်က အခြားတနေရာကို ဦးတည်သွားချင်လို့မရဘူး။ ဘဝလှေဟာ ဘယ်ကိုပဲလှော်လှော် ဦးတည်ရာဟာ အရပ်တမျက်နှာတည်းကိုပဲရှေးရှုလို့ တက်ညီလက်ညီ လှော်ခပ်သင့်တာ ။ တက်ကျိုးရင် လက်နဲ့လှော်မယ်လို့တောင် စကားရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ ဘာကြောင့်ပဲ အခြေအနေတွေ ပျက်ယွင်းပစေ။ ဒီဘဝလှေပေါ်က ကိုယ်တွေနှစ်ဦးလုံး စိတ်ဓါတ်တွေ မပျက်ယွင်းဖို့ပဲလိုတာ ၊ အချစ်တွေမပျက်ယွင်းဖို့ပဲလိုတာ ၊ ဆန္ဒနဲ့ဦးတည်ရာတွေ ထပ်တူကျနေဖို့ပဲလိုတာပါ။ ဒီလိုဆို လိုရာခရီးကို အနှေးနဲ့အမြန် နှစ်ဦးအတူ အရောက် လှမ်းနိုင်မှာပါ။
သူကသူ့ဦးတည်ချက်နဲ့ သူ့ဘာသာထင်ရာစိုင်းမယ် ၊ ကိုယ်က ကိုယ့်ဦးတည်ချက်နဲ့ ကိုယ်ဘာသာထင်ရာစိုင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တွေနှစ်ဦးဟာ ဘဝအဖော်မွန်တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ မဖြစ်လို့သာ ပေါင်းနေရတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးထဲက လူစိမ်းနှစ်ယောက် တမိုးအောက် အတူနေ (တခါတလေခွဲနေ)တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုမမြင်ရလေ ၊ သူ့အနားမရှိလေ ပိုလွတ်လပ်လေလို့ ထင်လာပြီဆိုကတည်းက ဒီအိမ်ထောင်ရေးဟာ ပျော်စရာမကောင်းလို့ပဲ။ တနည်းအားဖြင့် ဒီအိမ်ထောင်ရေးမှာ ကိုယ်မပျော်ရွှင်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုရင် ကိုယ်တွေနှစ်ဦးဟာ ဘဝအဖော်အစစ်တွေမဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။ ဘဝအဖော်စစ်တွေ မဟုတ်ခဲ့လို့ ဒီအိမ်ထောင်ကရုန်းထွက်ရင် ကောင်းမလားလို့ အတွေးမဝင်ပါနဲ့။ သူ့ရွေးချယ်မှုပဲမှားမှား ၊ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲမှားမှား တည်ထောင်ပြီးသားအိမ်ထောင်တခုဟာ ကိုယ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆို ဒီအိမ်ထောင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တည်မြဲအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကချစ်လို့ ပေါင်းခဲ့သူနဲ့ ဒီအိမ်ထောင်မြဲမြံပျော်ရွှင်အောင် ကိုယ့်ဘက်က အကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက်ပါ။ သည်းခံနိုင်တာထက် ပိုသည်းခံလို့ လိုက်လျောနိုင်တာထက် ပိုလိုက်လျောလို့မှ ရှေ့ဆက်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ၊ မနက်ဖန်တွေကို သူနဲ့ရှေ့ဆက်ရမှာ ကြောက်နေပြီဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာရင် မနက်ဖန်တွေမှာပျော်ရွှင်ဖို့ ဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားရတော့မှာပေါ့။
ကျွန်မ ဒီလိုစာတွေ ရေးနေရတာ အပျို ၊ လူပျိုတွေကို စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဖူးစာဆုံစေချင်တယ်။ တဘဝလုံးအရေးမှာ အရွေးမမှားစေချင်ဘူး။ အရွေးမှားသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း တည်ပြီးသားအိမ်ထောင်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိနှိုင်းလို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ခိုင်မြဲလာအောင် နှစ်ေယောက်လုံးကြိုးစားစေချင်တယ် ၊ တာဝန်သိပြီးတာဝန်ယူတဲ့မိဘတွေကောင်းတွေ ဖြစ်စေချင်တယ်။ အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ အနာဂါတ်မှာ အစွန့်ပစ်ခံကလေးတွေ ၊ အဖျက်ချခံကလေးတွေ ၊ စိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကလေးတွေ နည်းသမျှ နည်းစေချင်တဲ့စေတနာပါ။ သူတို့အစား ကျွန်မဝင်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာ ကျွန်မသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းလေ စုံတွဲတိုင်းကို ပျော်ရွှင်စေချင်ပြီး မိသားစုတိုင်းကိုလည်း ပျော်ရွှင်စေချင်တာ ကျွန်မစေတနာပါ။ ကလေးတိုင်း မိဘစုံညီနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းခွင့် ရကြပါစေ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9f%e1%80%b0%e1%80%9e/feed/0ရင်ထဲကဆူး http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%91%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%86%e1%80%b0%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%91%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%86%e1%80%b0%e1%80%b8/#respond Tue, 03 Jan 2017 05:40:11 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73397
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%91%e1%80%b2%e1%80%80%e1%80%86%e1%80%b0%e1%80%b8/feed/0ကိုယ့်ရှိတာကို တန်ဖိုးထားလိုက်ပါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%91/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%91/#respond Fri, 30 Dec 2016 04:03:34 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73367
ကျွန်မတို့မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ တိုးသထက် တိုးလာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတချက်က ကိုယ့်မရှိတဲ့အရာကို ပူလောင်တကြီး ရယူလိုတာပါပဲ။ လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကြီးလာလေလေ ပူလောင်မှုတွေ တိုးလာလေလေပါ။
ကိုယ့်မှာမရှိတာကိုပဲ လိုချင်စိတ်ပျင်းပြနေတော့ ကိုယ့်မှာရရှိနေတဲ့အရာကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိတော့ဘူး။ ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာ ရနေတာကို မလိုချင်တဲ့စိတ်တွေ ဝင်လာပြီး ရှိထားတာကို တန်ဖိုးထားရမယ့်အစား မလိုချင်စိတ်တွေနဲ့ ငြိုငြင်စိတ်တွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ရတာမလို လိုတာမရဆိုတာ ဒါပေါ့။
ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးဟာ ဟောင်းနေဦးတော့ … ဒါဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းမို့ အဟောင်းလည်း အဟောင်းအလျောက် တန်ဖိုးထားပါ။ ဝင်လာတဲ့ အသစ်ကိုလည်း အသစ်အလျောက် တန်ဖိုးထားပါ။
ရှိတာကို တန်ဖိုးထားတတ်တော့ မရတာအတွက် သိပ်ပြီး မပူလောင်တော့ဘူး။ လိုချင်တဲ့စိတ်ပျင်းပြရင် ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိအောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အများစုက ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေ သူများအိမ်ဘက်ကြည့်ပြီး သူ့မြက်ခင်းက ပိုစိမ်းနေတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ သူ့အပင်က ပိုသန်တယ် ၊ သူ့ရှိတာက ပိုကောင်းတယ် ၊ သူရထားတွေကမှ ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ထင်မြင်ယုံကြည်ပြီး ကိုယ့်ဝန်းကိုယ့်အိမ် ၊ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ်ရရှိထားတာတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ မေ့လျော့နေကြတာပါ။
ကိုယ်နဲ့တွဲနေတဲ့ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားစိတ်ကလေး ဝင်လာဖို့ဆိုတာ သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကို မြင်အောင်ကြည့်ရမှာပါ။ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်း နားလည်ဖြည့်တွေးပြီး ကောင်းတာလေးတွေနဲ့ ဖာသင့်ရင်ဖာ ၊ ခွင့်လွှတ်ပေးသင့်ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး ၊ လျစ်လျူရှုပေးသင့်တာတွေကိုလည်း လျစ်လျူရှုပေးရမှာပါ။ သူဟာ ကိုယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ထားတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ သူ့အတွေး ၊ သူ့ခံယူချက် ၊ သူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ မကိုက်ညီရင် ညှိသင့်တာတွေညှိပြီး ညှိမရရင်တော့ နောင်အရှည်ဆိုတာကို မျှော်တွေးကြည့်ရမှာပါ။
ကိုယ့်ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားဖို့ မသိတဲ့အခါ တခြားသူတွေက ကိုယ့်လူထက် သာတယ်ဆိုတဲ့စိတ် ဝင်လာရင် ရှိရင်းစွဲအချစ်တွေ လျော့ပါးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါ နားလည်ပေးဖို့မတွေးဘဲ အပြစ်မြင်စိတ်တွေနဲ့ အပြစ်တင်တာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်တွေနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာ သာယာနာပျော်ဖွယ် မကောင်းတော့ဘူး။ ဒီအခါ ဒီလူနဲ့ကိုယ် အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီး ကောင်းမယ်ထင်ရာ နောက်လူနဲ့တွဲ ၊ နောက်လူနဲ့လည်း အဆင်မပြေ ။
ကိုယ့်အနားက လူတွေသာ ပြောင်းသွားတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ရေရှည် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တဲ့အထိ မတည်ဆောက်နိုင်ရင် ကိုယ့်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ဟာကွက်တွေရှိနေပါပြီ။ ဒါကို ပြင်နိုင်မှဖြစ်မယ်။
သူငယ်ချင်း အယောက်ရာထောင်ချီပြီး ရှိနေဖို့မလိုပါဘူး။ ရှိနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် တန်ဖိုးထားဆက်ဆံပြီး ရေရှည်ခင်မင်မှုဆိုတာ တည်ဆောက်ရမှာပါ။ အရေအတွက်ဟာ အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ အရည်အသွေးကမှ အဓိက ကျတာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်လောက်များများ ကိုယ့်အခက်အခဲတွေကို ယုံကြည်စွာ ရင်ဖွင့်ပြောဆို တိုင်ပင်လို့ရမယ့်လူ တစ်ယောက်မှ ရှိမနေဘူးဆိုရင် ကိုယ့်မှာ သူငယ်ချင်းကောင်း မရှိဘူး ၊ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်မှုမှာ အပေါ်ယံတွေများနေပြီး လေးနက်စွာ မတည်ဆောက်နိုင်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
အိမ်ကဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းဟာ ကိုယ်မေတ္တာရှိလို့ ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းခဲ့တာဆို အဲဒီရှိရင်းစွဲမေတ္တာတွေ တိုးပွားလာအောင် မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ လျော့ပါးမသွားအောင်တော့ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ ကိုယ့်ဇနီးကလွဲရင် တခြားမိန်းမတွေက ပိုလှ ၊ ပိုတော် ၊ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာရင် ၊ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ အမျိုးသားကလွဲရင် တခြားအမျိုးသားတွေ ၊ တခြားအိမ်ထောင်ဦးစီးတွေက ပိုအရည်အချင်းရှိပြီး ပိုတော်တယ်လို့ အထင်ကြီးနေရင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ် အထင်သေးစိတ်တွေ တိုးပွားလာဖို့ပဲ ရှိတာပါ။
ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို မမြင်နိုင်ဘဲ အထင်သေးစိတ်တွေ ကြီးစိုးနေမယ် ၊ မကျေနပ်စိတ်တွေ ကြီးစိုးနေမယ်ဆိုရင် သူ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ် စိတ်တိုင်းမကျတော့ဘူး။ သူ့ဟာကွက်တွေကို အသားပေးမြင်လာပြီး အပြစ်တွေမြင်လာမယ်။ အပြစ်တွေတင်လာမယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းဘဲမြင် ၊ မကောင်းဘဲပြောနေပြီး အပြစ်တွေပဲ တင်နေတတ်တဲ့သူဆိုရင် ကိုယ်က ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။
သူ့နေရာကို ဝင်ခံစားပြီး သူ့ခံစားချက်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆို ကိုယ်ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပြောနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို သူ့နေရာက ဝင်မခံစားပေးသရွေ့ ကိုယ်ဟာ သူ့ခံစားချက်ကို ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့တဘက်သတ်အမြင်တွေပဲ ကြီးစိုးနေမှာပါ။
ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာ တိုးပွားလာတဲ့ သားသမီးတွေကို ရတနာလို့ တန်ဖိုးထားပြီး တသသ မလုပ်ရင်တောင်မှ အမှိုက်လို့ သဘောမထားသင့်ပါဘူး။ အမှိုက်တခုလို ၊ အရှုပ်တခုလို ၊ အသုံးမဝင်တဲ့အရာအဖြစ် မြင်နေမယ်ဆိုရင် တန်ဖိုးထားဖို့ထက် ပစ်ပယ်ထားဖို့ များနေပါတယ်။ အဆုံးစွန်မှာ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကလေးတွေဟာ မိဘတွေဆွဲခေါ်လို့ လူ့လောကထဲ ရောက်လာကြတာပါ။ မိဘတွေသာ နည်းစနစ်ကျကျ သန္ဓေတားခဲ့မယ်ဆို ကလေးဟာ လူ့လောကထဲ မရောက်လာနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်ခေါ်လို့ရောက်လာတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ ၊ နားလည်တတ်ဖို့ ၊ မေတ္တာပေးဖို့ ၊ နည်းမှန်လမ်းမှန် ဆုံးမပဲ့ပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ ၊ မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ ၊ သူ့ခြေထောက်ပေါ် ရပ်တည်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ တာဝန်တွေကို ကိုယ်ကျေပါမှ သားသမီးဟာလည်း မိဘတွေအပေါ် ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်တုန့်ပြန်မှာပါ။
ဘာတွေ ဘယ်လောက်လုပ်ပေးပေး မေတ္တာထည့်မပေးထားဘူးဆိုရင် ၊ ကိုယ်ထားတဲ့ မေတ္တာ ၊ စေတနာတွေကို သားသမီးတွေနားလည်အောင် မဖော်ပြတတ်ရင် သားသမီးတွေဟာ မိဘတွေဆီက မေတ္တာမခံစားရတဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မေတ္တာပြန်မပေးတတ်ကြတော့ဘူး။
စိမ်းသက်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ မိသားစုထဲမှာ ၊ အိမ်ထောင်စုအတွင်းမှာ ရှိနေရင် ကိုယ်တွေဟာ အတူနေတဲ့ အရင်းနှီးဆုံးတစိမ်းတွေ ၊ သွေးသားတော်စပ်ပြီး စိမ်းသက်နေသူတွေ ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါဟာ အချင်းချင်း နွေးထွေးမှုမရှိလို့ ၊ နားလည်မှုမပေးလို့ ၊ မေတ္တာစေတနာတွေ မပေါ်လွင်ကြလို့ ၊ နာစရာတွေဝင်လာလို့ စသဖြင့်သော အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာဆက်ဆံရေး တည်ထောင်သွားချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ဘက်က ဘယ်လိုရှိရှိ ကိုယ့်ဘက်က မေတ္တာ စပေးပါ ၊ နွေးထွေးမှုတွေပေးပါ ၊ နားလည်မှုတွေပေးပါ ၊ ဂရုစိုက်မှုတွေပေးပါ ၊ မအားတဲ့ကြားကပဲ အချိန်ပေးပါ ၊ ကြင်နာယုယမှုတွေပေးပါ ၊ အနစ်နာခံပေးပါ။ ဒီလိုဆိုရင် တဖက်သားက ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားနဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကို သတိထားမိလာပြီး ကိုယ့်အပေါ် အနှေးနဲ့အမြန် တူညီတဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြန်ပေးလာမှာပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလောက် အရသာရှိတဲ့ခံစားချက် လောကမှာ မပေါ်သေးဘူးလေ။ မေတ္တာပေးမှ မေတ္တာရတာပါ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%91/feed/0တောင်ပေါ်ကမြင်ကွင်း တောင်ခြေကလူ ခံစားသိနိုင်ပါ့မလား http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84/#respond Thu, 29 Dec 2016 10:29:03 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73340
“တောင်ပေါ်ကမြင်ကွင်း တောင်ခြေကလူ ခံစားသိနိုင်ပါ့မလား” ဆိုတာ အခြေအနေတခု ရောက်ရှိခံစားနေသူကို တောင်ထိပ်ပေါ် ရောက်နေသူတစ်ဦးအနေနဲ့ ခိုင်နှိုင်းပြီး ဒါတွေကို သိရှိခံစား သိမြင်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့သူတွေကို တောင်ခြေကလူတွေလို့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်တာပါ။ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့သူ ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့သူ ၊ အခြွေအရံပေါများပြီး အာဏာပါဝါရှိတဲ့သူတွေကို တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေသူတွေလို့ ခိုင်းနှိုင်းထားတာမျိုးဖြစ်သလို စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိနေသူတွေ ၊ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိနေသူတွေ ၊ ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေသူတွေ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချမ်းသာနေသူတွေကိုလည်း တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေသူတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကလူတွေ ခံစားသိရှိနေရတာတွေကို တောင်ခြေကလူတွေ မှန်းဆရုံ ၊ မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံကြည့်ရင်ခုန်ရုံ ၊ မြင်ကွင်းဗွီဒီယိုကြည့် ပုံဖော်ခံစားရုံပဲ တတ်နိုင်ကြတာပါ။ တောင်ထိပ်ပေါ် မရပ်နိုင်မချင်း တောင်ထိပ်ပေါ် ရောက်နေသူတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ။ တောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အမြင့်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြပါတယ်။ ဒီတောင်ထိပ်အရောက်တက်ဖူးပေမယ့် ဒီ့ထက်မြင့်တဲ့တောင်ကို တက်လိုသူတွေ ၊ အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်အရောက် ခြေချလိုသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း လိုလားသူရဲ့ ဆန္ဒအပေါ်မူတည်လို့ အောင်မြင်မှုရေချိန် အမျိုးမျိုး ကွာခြားသွားကြပါတယ်။ ဒီတောင်ထိပ်ပေါ် အရောက်တက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီ့ထက်မြင့်တဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ် ခြေချဖူးချင်တဲ့သူတွေရှိနေလို့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်ကို သက်စွန့်ဆံဖျား တက်ရောက်ကြတဲ့သူတွေ ရှိလာတာလေ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာမှာလည်း ဒီမြို့ ၊ ဒီနယ်မှာ အောင်မြင်တဲ့သူ ၊ လူသိများတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် တိုင်း ၊ နိုင်ငံကျော်တဲ့အထိ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားချင်တဲ့သူတွေရှိသလို တခြားတိုင်းနိုင်ငံထိ ပေါက်ရောက်အောင်မြင်လိုသူတွေလည်းရှိတယ်။
ဖြစ်လိုမှုများလေ ကြိုးစားအားထုတ်ရလေပါ။ ဆက်တိုက်မြင့်တက်ချင်တဲ့လူက ဆက်တိုက် အားထုတ်ရတယ်။ သူများထက်ပိုသာချင်တဲ့သူက သူများထက် ပိုအားထုတ်ရသလို သူများတွေထက် မိမိအချိန်ကို ပိုအသုံးချရတယ်။ သူများတွေက ပြောကြတယ်။ အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့။ ကျွန်မအမြင်ကတော့ နည်းမှန်လမ်းမှန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့သူတိုင်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက မခက်ခဲပါဘူး။ ဒီလမ်းသွားရင် ဒီရောက်မှာပဲ။ တကယ်ခက်တာက အောင်မြင်ထားတဲ့အတိုင်းအတာကို ကျမသွားအောင် ထိန်းသိမ်းရတာနဲ့ ၊ ဆက်လက် အောင်မြင်သထက်အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားသွားရတာပါပဲ။
ဘယ်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ဖြစ်ဖြစ် တောင်ကြီးဖဝါးအောက်ပါ။ မှန်ကန်စွာ ကြိုးစားအားထုတ်သွားမယ်ဆို တနေ့မှာ ထိပ်ဆုံးရောက်လာမှာပါ။ အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကို ရောက်လာပါပြီတဲ့ … အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ထပ်တက်စရာမရှိတော့ဘူးလေ။ ရိက္ခာပြတ်လပ်လို့ အစာငတ်ပြီး အားမပြတ်ခင် တောင်အောက်ပြန်ဆင်းရပေဦးမယ်။ မဆင်းချင်ရင် တောင်ပေါ်မှာ အငတ်ခံသေလိုက်ရုံရှိတာပေါ့။ ဒီလိုတော့ တော်ရုံမလုပ်ကြတာမို့ တောင်ထိပ်ရောက်ပြီးတဲ့သူအများစုဟာ တောင်အောက်ပြန်ဆင်းကြပါတယ်။ ဒါဟာ တက်ပြီးဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဘယ်လောက်ထိပဲအောင်မြင်ခဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ ကိုယ်ဆက်တက်ချင်ပေမယ့်လည်း အချိန်ကစကားပြောလာတဲ့အခါ အရွယ်ကကျလာမယ် ။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေလည်း ယုတ်လျော့လာနိုင်တယ်။ ဒီအခါ အောင်မြင်မှုရေချိန်ဟာ လျော့ကျလာမှာပါ။ တခါတလေ ကိုယ်က ဟိုတချိန်ကထက် ပိုကြိုးစားပေမယ့် ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူပေါ်လာလို့ ကိုယ့်ထက်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေလည်း ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ တနေရာရာမှာ ကိုယ့်ထက်သာနေလို့ ကိုယ့်ထက် သူအောင်မြင်နေတာလို့ လက်မခံနိုင်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပိုလာဖို့ပဲရှိတယ်။ အမြဲတမ်း ဆက်တက်နေလို့ မဖြစ်နိုင်တာမို့ တက်ပြီးရင် ဆင်းရမယ့်သဘောအတိုင်း ကိုယ့်နေရာဝင်လာသူတွေ ၊ ကိုယ့်ထက်ကျော်သွားသူတွေကို နေရာဖယ်ပေးဖို့ဆိုတာလည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်။
မအောင်မမြင်သေးတဲ့သူတွေက အောင်မြင်တဲ့သူရရှိနေတဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုတာပဲမြင်တယ် ။ သူတို့ ဘာတွေပေးဆပ်ခဲ့လို့ ဒီနေရာရောက်လာတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူ နည်းတယ်။ မပြည့်စုံသူတွေက ပြည့်စုံသူတွေကို အားကျတယ်။ သူတို့မှာ ဘာတွေ လစ်ဟာနေလို့ ဘယ်လို မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူရှားတယ်။ တော်တဲ့သူတွေရဲ့ ဥာဏ်ပညာကိုပဲ အားကျနေတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒီနေရာရောက်ဖို့ သူတို့အချိန်တွေ ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ် ၊ ဘယ်လောက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တဲ့သူများတယ်။
တောင်ခြေကလူတွေဟာ တောင်ခြေက အတွေးတွေနဲ့ အမြင်တွေ ၊ ခံစားချက်တွေကိုပဲ အမှန်လို့ လက်ကိုင်ထားတဲ့သူများတယ်။ တောင်ပေါ်ကလူတွေကလည်း သူတို့အတွေး ၊ အမြင်နဲ့ သူတို့ခံစားချက်ဆိုတာပဲ ရှေ့တန်းတင်နေရင် တောင်ပေါ်တောင်အောက် အတွေး ၊ အမြင် ၊ ခံစားချက်တွေ တအားကွာခြားသွားနိုင်တယ်။ တောင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့သူကလည်း တောင်အောက်မှာ သူတွေးမြင်ခဲ့တဲ့ အတွေး ၊ အမြင်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို မေ့ပျောက်မသွားဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ တောင်ခြေကလူတွေ ဘာတွေတွေးပြီး ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာကို နားလည်ပေးနိုင်မယ်။ လိုအပ်ရင်ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးနိုင်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အမြင့်ကလူတွေနဲ့ အနိမ့်ကလူတွေအကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေ ၊ အတွေး ၊ အမြင်တွေ ၊ ခံစားမှုတွေ ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ကွားခြားသထက် ကွာခြားလာမှာဖြစ်တယ်။
ဒီအတိုင်းလိုပါပဲ။ အိမ်ထောင်သည်တွေ မြင်တွေ့သိရှိခံစားနေရတာတွေကို အပျို ၊ လူပျိုတွေက အတွင်းကျကျ ဘယ်ခံစားသိရှိနိုင်ပါ့မလဲနော်။ လက်မလွတ်သေးတဲ့ ကလေးကို ဘယ်လို ပဲ့ပြင်ထိန်းသိမ်းလို့ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဆုံးမရမလဲဆိုတာ ၊ အိမ်ထောင့်သုခ ဒုက္ခတွေဆိုတာကို အပျို ၊ လူပျိုတွေက ဘယ်သိနိုင်ဦးမလဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အိမ်ထောင်သည်တွေကို တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ရှိနေသူတွေအမြင်နဲ့ ကြည့်မြင်ခံစားနိုင်ပြီး အပျို ၊ လူပျိုတွေကို တောင်ခြေက လူတွေအဖြစ် ကြည့်မြင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။
အပျို ၊ လူပျိုတွေရဲ့ အမြင်ကတမျိုး ၊ လက်ထပ်ပြီးစလူတွေ မြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုး ၊ ကလေးရခါစ ဇနီးမောင်နှံတွေမြင်တဲ့ အမြင်ကတစ်မျိုး ၊ ကလေးလက်မလွတ်သေးတဲ့သူတွေမြင်တဲ့ အမြင်ကတမျိုး ၊ ကလေးလက်လွတ်သွားတဲ့သူတွေမြင်တဲ့ အမြင်ကတမျိုး ၊ သက်ကြီးစုံတွဲတွေမြင်တဲ့ အမြင်ကတမျိုး စသဖြင့် ဒီအမြင်အမျိုးမျိုးထဲကမှ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေရင် ခံစားချက်တွေ ၊ အတွေးအမြင်တွေ တမျိုးပြောင်းသွားပြီး အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေရင် တမျိုးဖြစ်ပြန်ရော။
အချစ်ရေးအဆင်မပြေသူတွေရဲ့ အတွေး ၊ အမြင်တွေဟာ သူတို့အတွေ့အကြုံ ၊ သူတို့ခံစားမှု ၊ သူတို့သုံးသပ်ချက်တွေအရ သူတို့အတွက် မှန်ရင်မှန်နေမှာပါ။ လူတိုင်းအတွက်တော့ မမှန်နိုင်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေသူတွေ အိမ်ထောင်တခုအပေါ် သုံးသပ်ချက်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေ အိမ်ထောင်တခုအပေါ် သုံးသပ်ချက်ဟာလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ သူတို့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေ ကွဲပြားနေတာနဲ့အမျှ ခံယူချက်တွေ ၊ သုံးသပ်မှုတွေဟာလည်း ကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေကို အငြင်းပွားနေစရာမလိုဘူး။ နားလည်ပေးဖို့ပဲလိုတာ။
သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ သူ့အမြင်တွေဟာ ကိုယ့်အတွက် မမှန်ပေမယ့် သူ့အတွက်မှန်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ တောင်ပေါ်ကအမြင်နဲ့ တောင်လယ်ကအမြင် ၊ တောင်ခြေကအမြင် စသဖြင့် အမြင်ချင်းမတူနိုင်တာကို လက်ခံပေးလိုက်ရုံပါ။
တခါတလေ ထမင်းတဝိုင်းတည်း စားသောက်နေပေမယ့် အစပ်ကြိုက်သူက အစပ်ကဲမယ်၊ အစပ်မကြိုက်ပေမယ့် ငရုပ်သီးကိုက်မိသူလည်း ရှိမှာပဲ။ ဒီထဲကမှ အချဉ်ညှစ်စားသူလည်းရှိမယ် ။ အဆိမ့်ကိုမှ အရသာတခုလို့ မက်မောသူလည်းရှိနိုင်တယ်။ အခါးကိုမှ မက်မက်မောမော တို့မြုပ်စားတဲ့သူလည်း ရှိနိုင်တယ်။ အချစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်သွားတာတွေရှိသလို ၊ မိမိရွေးချယ်တဲ့အရသာကို မိမိခံစားရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုလို့ လက်ခံလိုက်ရုံပါ။
ကျွန်မသဘောနဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မက တက်ပြီးရင်ဆင်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကို လက်ခံထားသူပါ။ ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းကောင်း နှလုံးသွင်းထားသူမို့ အောင်မြင်မှုဆိုတာကို အထူးအာသာငမ်းငမ်း လိုက်မဖမ်းတဲ့အထဲ ပါပါတယ်။ မှန်မှန်လေးလှမ်းနေရင် ခရီးပန်းတိုင်ဆိုတာ ရောက်မယ်လို့ လက်ခံထားသူမို့ မှန်မှန်လေးလှမ်းနေသူပါ။
ကိုယ့်ကျော်တက်သွားသူကိုလည်း သူ့ကြိုးစားမှုအတွက် လက်ခုပ်တီးပေးမယ့်သူပါ။ ကိုယ့်တွန်းတိုက်သွားမယ့်သူတွေကိုလည်း သတိထားသူပါ။ လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ကိုယ့်ဘာသာသိနေပြီး ရောက်တဲ့နေရာရဲ့ မြင်ကွင်းဆိုတာကို တန်ဖိုးထားသူပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ၊ ဘယ်အခြေအနေကြုံကြုံ ရင့်ကျက်စွာရင်ဆိုင်ပြီး ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး အဖြေရှာလုပ်ကိုင်မလဲလို့ပဲ ဦးစားပေးတွေးသူပါ။
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ပြီး မှန်မှန်လှမ်းတက်သွားဖို့ပဲလိုတာပါ။ သူများကိုခြေထိုးတွန်းတိုက်လိုက်မှ ကိုယ်က အောင်နိုင်သူဖြစ်မယ်လို့ စိတ်ထားရှိသူဟာ ကိုယ့်ကိုခြေထိုးတွန်းတိုက်မယ့်သူနဲ့ တနေ့ကြုံရဦးမှာပါ။ အမြင့်ရောက်လေ အကျနာလေဆိုတာကို သိထားရင် အကျမနာအောင် ကျသွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုစိတ်ထားလေးနဲ့ ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာ ကြိုတွေးပြင်ဆင်ထားရုံရှိတာပါ။
တကယ်တော့လေ ဘယ်ခြေလှမ်းလှမ်း ကိုယ့်ခြေလှမ်းအပေါ်မှာ စိတ်သန့်သန့် ၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ၊ မြင်ကွင်းတွေကို တန်ဖိုးထားပြီး အကောင်းဆုံးလုပ်တတ်မယ်ဆို ဘာလုပ်လုပ် ၊ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နဲ့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်အပေါ် အမြဲကျေနပ်နေတတ်တဲ့သူ ဖြစ်နေမှာပါ။ မိမိရဲ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကို သူများက လုပ်ယူဖန်တီးပေးရင်တောင် အမြဲမထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဘူး။ တကယ်က မိမိစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရတာပါ။ ဒီလိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးကို လူတိုင်းမရဘူးလေ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84/feed/0ကျန်ရစ်ခဲ့သူမဖြစ်လိုပါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/#respond Wed, 28 Dec 2016 06:17:34 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71083
ချစ်တဲ့သူတိုင်းဟာ ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုတဲ့ “Happy Ending” နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ချင်ကြတာပါ။ ချစ်တဲ့သူတိုင်းဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်မက်လှလှလေးတခုပါ။ စိတ်ကူးထဲမှာ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဘဝကိုဘယ်လိုတည်ထောင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိုယ်တွေမျိုးဆက်လေးတွေနဲ့ ဘဝကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားကြမယ်လို့ စိတ်ကူးလှလှလေး ယဉ်ထားကြတာ။ ဘယ်သူမှ ချစ်တဲ့သူနဲ့ မကွဲချင်သလို ကျန်ရစ်ခဲ့ရသူလည်း မဖြစ်လိုကြပါ။
ပေါ့ပေါ့တန်တန် ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ အနာဂါတ်တွေ ၊ ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးတွေ မရှိကြတဲ့အတွက် သူဘာလုပ်လုပ် ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် ဘာမှ သိပ်အရေးမပါသလိုပဲ အရမ်းကြီးမခံစားကြဘူး။ အပျော်ပေါ့ပေါ့လေး တွဲနေတာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း သူနဲ့တွေ့ချိန်တိုင်း ပျော်ပျော်လေး ၊ ပေါ့ပေါ့လေး ဖြတ်သန်းချင်ကြတယ်။ တွဲနေတဲ့အချိန် ပျော်စရာတွေကိုပဲ နှစ်ဦးအတူ ရွေးလုပ်ကိုင်ပြီး ပျော်စရာတွေရှာကြမယ်လို့ပဲ တွေးကြတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက ပျော်ရုံတွဲတာကိုး။
ပျော်ရုံတွဲတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ စုံတွဲတွေမှာတော့ လေးနက်တဲ့ခံစားချက်တွေ ၊ တွယ်တာမှုတွေ ၊ ချစ်ခင်မှုတွေ တဘက်လူအပေါ် ပျော်ဝင်နေပါတယ်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ရေရှည်လက်တွဲသွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားလို့ပါ။ ရေရှည် ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ခဏတွေ့ရုံလေး သူတို့မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဒီလူနဲ့လက်တွဲရင် ရေရှည်မြဲအောင် ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေထဲက သူ ဘာတွေ ပြင်သင့်သလဲ ၊ ကိုယ်ဘာတွေ ပြင်ရမလဲဆိုတာကို နှစ်ယောက်ညှိယူကြရပြီ။ တစိမ်းတွေကနေ ချစ်သူဖြစ်လာကြတဲ့ ဆက်ဆံရေးမို့ မတူတဲ့မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မတူညီတဲ့ ခံယူချက်တွေ ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ ၊ သဘာဝဓလေ့တွေဆိုတာကို နှစ်ဦးမြဲဖို့ ညှိယူကြရပါတယ်။
ဒီလိုညှိယူနေဆဲကာလမှာ နှစ်ယောက် ခဏ ခဏ ငြိကြ ၊ စိတ်ဆိုးကြ ၊ စိတ်ကောက်ကြ ၊ ပြန်ချော့ကြနဲ့ တခါတခါ ပျော်စရာကောင်းသလိုလိုနဲ့ တခါတခါ စိတ်ညစ်စရာ ၊ စိတ်တိုစရာ ၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ ၊ လွမ်းဆွေးစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို ခဏ ခဏ ညှိရင်းငြိနေကြတဲ့ အချိန်တွေမှာ ခွင့်လွှတ်တတ်သူနဲ့ လိုက်လျောတတ်သူ ကာရံညီသွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်မကြိုက်တာ တစ်ယောက်မလုပ်မိကြဖို့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို မျှော်တွေးပြီး အချစ်တွေနဲ့ လက်တွဲမြဲမြံသွားကြတယ်။ ဒါဟာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးက တကယ်နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မိကြတဲ့အတွက် သူမကြိုက်တာ ကိုယ်မလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်ရင်း ၊ ရှောင်ကြဉ်ရင်းက လက်တွဲမြဲလာကြတာပါ။
လက်တွဲမြဲအောင် ညှိယူကြတဲ့နေရာမှာ မာန်ကလေးတွေ ၊ မာနကလေးတွေ ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေ ၊ အတ္တတွေဆိုတာကို ကိုယ်စီ လျှော့ချသွားကြဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ပဲအမြဲလိုက်လျောရမယ် သူ့တော့ လိုက်လျောစရာမလိုဘူးဆိုတာတွေ ၊ ကိုယ့်ဘက်ပဲ အမြဲကြည့်တတ်ပြီး သူ့ဘက်တွေးကြည့်ပေးဖို့ မေ့လျော့တတ်သူတွေ ၊ သူများအချိန်ပေးဖို့ တွန့်တိုပြီး အကျင့်ပါသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၊ နှစ်ဦးအကြားက မေတ္တာတရားခိုင်မာဖို့ထက် ကိုယ်စိတ်သန်ရာဘက် ဦးစားပေးနေသူတွေ ၊ သစ္စာမစောင့်သိတတ်သူတွေက ညှိယူနေတဲ့ကာလမှာတင် သူတင်း ၊ ကိုယ်တင်းနဲ့ ပြတ်သွားကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မမြဲလို့ပြတ်မယ့်အတူတူ ငါကသူ့ကျောအောင် ဖြတ်မယ် ၊ မဖြတ်ခင် ငါစိတ်ဆင်းရဲသလို သူစိတ်ဆင်းရဲစေရမယ် ၊ သူဖောက်ပြန်သလို ငါလည်းတွဲပြမယ်စတဲ့ မခံချင်စိတ်တွေကို တလွဲရှေ့တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ကျန်ရစ်ခဲ့ရသူတော့ မဖြစ်လိုဘူး။ မမြဲလို့ကွဲကြေးဆို ကိုယ်က ချန်ထားရစ်တဲ့သူပဲ ဖြစ်လိုတယ်။ သူချန်ရစ်လို့ ကိုယ်ကျန်ရစ်ခဲ့ရတာထက် ကိုယ်ချန်ရစ်လို့ သူကျန်ရစ်ဖြစ်ရမှာကိုပဲ ပိုလိုလားတယ်။ အသည်းကွဲတာချင်းအတူတူ ကိုယ်ထားခဲ့လို့ ကွဲတဲ့အသဲက ပိုသာနေသလိုပဲ။ ဒါကြောင့် ကျန်ရစ်မဖြစ်ချင်ကြဘူးလို့ ကျွန်မဆိုလိုတာပါ။
သမီးရည်းစားဘဝမှာ လက်တွဲမြဲသွားလို့ ရှေ့တလှမ်းတိုးမယ်ဆို သူနဲ့တအိမ်ထောင် ထူထောင်မှာပေါ့။ သူနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ အချစ်ရဲ့ပန်းတိုင် ၊ ကိုယ်တွေချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်ခရီးပန်းတိုင်လို့ ချစ်သူအများစုက ထင်ထားကြတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ အချစ်ခရီးအလယ် ဘဝခရီးအစပဲ။ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်ပါမှ တူနှစ်ကိုယ် ဘဝထဲကို လက်တွေ့ကျကျ တိုးဝင်လိုက်တာ။ အဲဒီမှ စတွေ့တာပဲလေ။ ချစ်လို့ ပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွဲနဲ့ ကြိုပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ထားခဲ့ကြတဲ့အတွဲ အဲဒီမှာ စတင်ပြီး ကွာခြားလာကြတယ်။
ချစ်လို့ပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွဲက လက်ထပ်ပြီးရင် ဘာတွေ ရင်ဆိုင်ရလာနိုင်တယ် ၊ အဲဒီအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားကြရမယ်ဆိုတာကို ကြိုမတွေးခဲ့ကြဘူး။ သူတို့အတွက် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာ ချိုမြတဲ့သစ်သီးတစ်လုံးကို နှစ်ယောက်အတူ တချိန်တည်း စားသုံးလိုက်ကြတာ ၊ လေထဲ အချစ်အိမ်အတူဆောက်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။ တကယ့်ဘဝအရသာဆိုတာ အချိုတခုတည်းမှ မဟုတ်တာ။ အချိုရှိသလို အချဉ်လည်းရှိ ၊ အဆိမ့်လည်းရှိ ၊ ဖန်တန်တန်အရသာလည်းရှိ ၊ ခါးသီးတဲ့နေ့တွေလည်း ရှိတယ်လေ။ အချိုချည်းပဲ ခံစားရမယ်လို့ မျှော်ကိုးလက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့တာမျိုးဆို ဖန်လာတဲ့နေ့တွေ ၊ ချဉ်လာတဲ့နေ့တွေ ၊ အီဆိမ့်နေတဲ့နေ့တွေနဲ့ ခါးသီးတဲ့နေ့တွေကို နှစ်ယောက်အတူ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ။ ဘယ်လိုလက်တွဲမြဲနေနိုင်ပါ့မလဲ။
အိမ်ထောင်သက်တလျောက် အချစ်မပျက် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်တခုကို တည်ထောင်လိုတယ်ဆို ချိုမြိန်တဲ့နေ့ရက်တွေကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသွားမလဲ ၊ ဖန်လာတဲ့နေ့တွေကို ဘယ်လိုအတူပြင်ဆင်ကြမလဲ ၊ ချဉ်လာတဲ့နေ့တွေကို ဘယ်လိုမေ့ဖျောက်ပြီး ပြန်ချိုလာအောင် လုပ်ယူမလဲ ၊ အီဆိမ့်နေတဲ့နေ့တွေမှာ အပြုံးမပျက် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဘယ်လို အတူကျင့်ယူသွားကြမလဲ ၊ ခါးသီးတဲ့နေ့တွေမှာလည်း နှစ်ယောက်လက်တွဲမပျက် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားကြမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်တွေးခေါ်လို့ အိမ်ထောင်တခုမထူထောင်မီကတည်းက လေ့ကျင့်ထားခဲ့ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်တွေအမြင်မှာ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်က နှစ်မိသားစုပေါင်းဖက်လိုက်တာ ၊ နှစ်ဘက်အသိုင်းအဝန်းပေါင်းဖက်လိုက်တာပါ။ မတူတဲ့ကွဲပြားမှုအသီးသီးတွေကို ဘယ်လို ချိန်ခွင်လျှာထိုး ညှိယူသွားကြမလဲဆိုတာ မယူခင်ကတည်းက ညှိထားခဲ့နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။
အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ကြိုတင်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ပြီး လေ့ကျင့်ယူလာခဲ့တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ယူပြီးလို့ သားတွေ ၊ သမီးတွေရလာတဲ့အချိန် အလှကိုယ်စီ ပျက်ပြယ်လို့ အိမ်ထောင်သက်တွေကြာလာတဲ့အချိန် အချစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မေတ္တာတွေ ၊ သံယောဇဉ်တွေ ၊ စောင့်ထိန်းရမယ့် သစ္စာတွေ အစားထိုးနေရာယူပြီး အသိတရားနဲ့ ဒီအိမ်ထောင် ပျော်ရွှင်မြဲမြံအောင် ၊ ဒီသားသမီးတွေနဲ့ ဒီမိသားစု မတောင့်မတ ၊ မကြောင့်မကျ နေနိုင်အောင် ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေဖြည့်ဆည်းလို့ ထိန်းသိမ်းပဲ့ပြင်သွားမလဲဆိုတာ တကယ့်ကို အနုစိတ်ပြီး ရသမြောက်တဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်းကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီခရီးကရှည်ပြီး မေတ္တာတရားနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ နက်နဲတယ်လေ။ သမီးရည်းစားတုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ရိုးမြေကျ ပေါင်းဖက်သွားမယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ။
တကယ်က ရိုးမြေကျ ပေါင်းဖက်သွားဖို့ဆိုတာ ဝေးသေးတယ်။ အိုတဲ့အထိ ၊ နာတဲ့အထိ မေတ္တာမပျက် ပေါင်းဖက်ချစ်သွားဖို့ဆိုတာ တော်ရုံချစ်ခင်ကြင်နာရုံနဲ့တော့ မရဘူး။ အရမ်းချစ်လို့ ပေါင်းသင်းခဲ့ကြပြီး သားသမီးတွေ ၊ မြေးတွေရနေတဲ့ မတောင့်မတအခြေအနေရှိ အဘိုးအဘွားတွေကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့တွေထဲက အများစုက သားသမီးမျက်နှာ ၊ အသိုင်းအဝန်းမျက်နှာတွေကြောင့် ဇနီးမောင်နှံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆက်လျှောက်နေကြတဲ့သူတွေ များပါတယ်။
ဒီလိုကာလကြာရှည် ပေါင်းသင်းနေတဲ့စုံတွဲတွေထဲက အချို့က တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မျက်ကြောမတည့်တဲ့ ဘိုးဘွားစုံတွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ရယ်စရာ နဲ့ အံ့သြစရာ စကားပြောခဲ့တဲ့ အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို ကျွန်မကြုံဖူးတယ်။ သူမခင်ပွန်းနဲ့အတူ ကန်တော့ခံရင်း ကျွန်မကို ဒီလင် ဒီမယား အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေဆိုတဲ့ဆု သူမပေးချင်ပါဘူးတဲ့။ သူတောင် ခုအရွယ်အထိ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသွားရတာကို စိတ်ပျက်လှပြီမို့ တပါးသူကိုလည်း သူ့လိုမသေမချင်း ပေါင်းနေရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ပါတဲ့။ သူတို့စုံတွဲကြည့်တော့ စကားများရန်ဖြစ်တာမျိုးမရှိတဲ့ အေးဆေးတဲ့ဘိုးဘွားစုံတွဲပါ။ ဒါပေမယ့် မေတ္တာတရားတွေ ဆက်လက်မရှင်သန်နေရင် မသေမချင်း ပေါင်းဖက်နေရတာကို ဝဋ်တစ်မျိုးလို့ မှတ်ယူလိုက်ကြတာမျိုးလေ။
တချို့တွေကျတော့ ချစ်လို့ ပေါင်းသင်းပြီးကာမှ မအိုခင် ၊ မနာခင်မှာတင် စိတ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ၊ ရှေ့ဆက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်လျှောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ မူလပကတိအတိုင်း အပျို ၊ လူပျိုပြန်မဖြစ်သော်ငြား သားသမီးတွေမရှိရင် လူလွတ်တစ်ယောက်လို ဘာမှမဖြစ်သလို ပြန်နေကောင်း နေလို့ရပေမယ့် စိတ်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေလည်းရှိတယ်။ သားသမီးတွေရှိရင် သားသမီးတွေပါ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရကုန်ကြတယ်။
စိတ်ဒဏ်ရာတွေပေးပြီး ချန်ရစ်သွားခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကြောင့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ဘဝခရီးဆက်နေကြရတဲ့ ဇနီးတွေ ၊ ခင်ပွန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိဘတွေကြောင့် တဘဝစာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီလူတွေလည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ရသူတွေ ဘယ်ဖြစ်ချင်ပါ့မလဲ။ မဖြစ်လို့သာ ကျန်ရစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဘယ်သူမှတော့ တည်ထောင်ပြီးသားအိမ်ထောင် မပြိုပျက်ချင်ကြဘူး။ ဒါဆိုဘာကြောင့် ကျန်ရစ်ဖြစ်ကြရသလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
ကိုယ်ကသူ့ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး သူ့ဘာသာဂရုစိုက်နိုင်တယ်လို့ သဘောထားခဲ့လေသလား ။
ချစ်ခဲ့ ၊ ကြင်နာခဲ့ဖူးတာပဲ။ ချစ်ပြ ၊ ကြင်နာနေပြဖို့ မလိုပါလို့ လတွေ ၊ နှစ်တွေ ကြာရှည် နေမိခဲ့လေသလား။
သူ့ထက် ပိုစွဲဆောင်နိုင်တဲ့သူ ကိုယ့်မှာရှိနေပြီမို့ သူ့အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုတွေ လျော့ကျလာပြီလား။
အိမ်ထောင့်တာဝန်ကျေရင် ၊ မိဘတာဝန်ကျေရင် ဒီအိမ်ထောင်မြဲမြံသင့်တယ်လို့ မှတ်ယူပြီး မပြင်မဆင် သူ့အပေါ် ပေါ့လျော့နေမိခဲ့လေသလား။
သူ့ခံစားချက်တွေ နားလည်အောင် ကြည့်ပေးဖို့ထက် ကိုယ့်ခံစားချက်ချည်း ရှေ့တန်းတင်နေမိလေသလား။
ဖြစ်သင့်တာကို နှစ်ဦးသဘောတူ ညှိနှိုင်းယူဖို့ထက် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုချည်း လုပ်ယူနေမိပါသလား။
ကိုယ်တွေနှစ်ဦးအကြားမှာ တပါးသူတွေ ၊ တခြားအခြင်းအရာတွေကြောင့် နှစ်ဦးအကြားသွေးကွဲပြီး စိတ်တွေနာကျင်နေကြရပါသလား။
သူဟာ ကိုယ့်ကိုနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ သူ့ကြောင့် ကိုယ့်စိတ်တွေ ၊ ခံစားချက်တွေ နာကျင်နေရပါသလား။
နှစ်ဦးဆုံရင် ကြည်နူးရတဲ့အချိန်တွေ မရှိသလောက် ရှားပါးလာပြီး ဂျင်းစိမ်းနဲ့မိတ်သလင် သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင်လို့ ခံယူထားပါသလား။
မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ အငြှိုးတွေ ၊ အမုန်းတွေ ကိုယ်တွေနှစ်ဦးကြား ဝင်လာခဲ့ပြီလား။
ဒီလိုတွေ ခံစားနေကြရပြီဆိုရင်ဖြင့် တဘက်လူက ကိုယ့်ကို ချန်ရစ်သွားနိုင်သလို ကိုယ်ကလည်း သူ့ကို ချန်ထားရစ်ချင်နေပြီလေ။ သေချာတာကတော့ ကိုယ်တွေနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာ သာယာနာပျော်ဖွယ်အချိန်တွေ ရှားပါးလာတာပါပဲ။ အချိန်ကိုက်ဗုံးတစ်ခုလို ဘယ်အချိန်ထပေါက်ကွဲမလဲသာမသိတာ …. တချိန်ချိန် ထပေါက်ကွဲပြီး ကိုယ်တွေနှစ်ဦးဆက်ဆံရေး ပြိုကွဲသွားနိုင်တာ သူလည်းသိ … ကိုယ်လည်း သိနေပြီဆို ကိုယ်ကကျန်ရစ်ခဲ့သူ မဖြစ်လိုပါပေါ့။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9c%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/feed/0မယူဘူး တွဲကြည့်ရုံပါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%98%e1%80%b0%e1%80%b8-%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%82%90%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%98%e1%80%b0%e1%80%b8-%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%82%90%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/#respond Wed, 21 Dec 2016 08:15:56 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73304
ခုခေတ် အရွယ်ရောက်လို့ ရည်းစားသနာထားတဲ့သူတွေ အများစု ဆိုတဲ့စကားက “တွဲကြည့်ရုံ”ဆိုတာ အပြောများလာတယ်။ ဒီ့ထက် ပေါ့တန်တဲ့စိတ်ထားရှိသူတွေက “မယူဘူး …. တွဲကြည့်ရုံ” လို့ ပြောကြပြန်တယ်။ တချို့ကျတော့ အဖော်ရရုံ အပျော်တွဲကြတယ်။ တချို့တွေက ထည်လဲတွဲကြတယ်။ ဒီလို ပေါ့ပေါ့တန်တန်စိတ်ထားတွေကို မြို့ကြီးပြကြီးမှာ တော်တော်တွေ့လာတယ်။ ခေတ်မီလေ စိတ်ဓါတ်တွေပျက်ပြားလာလေလား မပြောတတ်တော့ပါဘူး။ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ စိတ်ဓါတ်တွေ ထိုးကျသွားလေသလား။
ကျွန်မတို့ခေတ်တုန်းက ချစ်သူရည်းစားရှိသူအများစုဟာ ကိုယ်တွဲတဲ့သူကို အနာဂါတ်မှာ ရည်ရွယ်လက်တွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လေးလေးနက်နက် တွဲကြတာပါ။ တွဲရင်းနဲ့မှ စိတ်သဘောထားချင်း ၊ ခံယူချက်ချင်း မတိုက်ဆိုင်တာ ၊ ညှိလို့မရတာတွေ များသထက်များလာတော့မှ လမ်းခွဲကြတာပါ။ တွဲကြည့်ရုံပဲဆိုတဲ့စိတ်ထားကို ကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေ အဲဒီခေတ်က မထားခဲ့ကြဘူး။ ဒီစိတ်ထားနဲ့ ရည်းစားများခဲ့တဲ့သူတွေ အဲဒီခေတ်ထဲ ရှိကောင်းရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းမှာပါ။
အခုတော့ အမျိုးသမီးကလေးတွေကလည်း တွဲကြည့်ရုံဆိုတာကို ပြောလာသလို အမျိုးသားလေးတွေကလည်း တွဲကြည့်ရုံဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့လေးပြောလာတယ်။ ခုခေတ်ကြီးက ခြေမြန်လက်မြန်ခေတ်ကြီးဆိုတော့ အဲဒီတွဲကြည့်ရုံဆိုတဲ့စကားဟာ ကြောက်စရာကောင်းနေသလိုပဲ။ အမျိုးသမီးကလေးတွေဟာ သူတို့တွဲတဲ့သူဦးရေများလေ သူတို့ရဲ့ အပျိုရည်ဂုဏ်သိက္ခာ ပွန်းပဲ့လေဆိုတာ မသိလေရော့သလား။
ချစ်သူများနေ့ဆို တွဲကြည့်ရုံဆိုတဲ့စုံတွဲလေးတွေ ၊ သင်္ကြန်ဆို တွဲကြည့်ရုံဆိုတဲ့ စုံတွဲလေးတွေ ဘယ်ခရီးရောက်လေမလဲ။ စိတ်မထိန်းနိုင်ရင် မထိန်းနိုင်သလောက် လွန်ကျူးမိကြတဲ့အခါ တွဲကြည့်ရုံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုယ်ဖဲ့ချနေသလိုပါပဲ။ တွဲတာများလေ အပျိုဂုဏ်သိက္ခာ ပဲ့ကျလေပါပဲ။ ခုခေတ်ကြီးထဲမှာ ရည်းစားသနာ အတွဲများလွန်း ၊ ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးကလေးကို အပျိုစစ်စစ်ပါလို့ အမျိုးကောင်းသားတွေက မယုံတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကျိန်ပြောလည်း ခေတ်ကြီးကို မြင်တွေ့လက်ခံနေကြတဲ့ သူတို့တွေက ဘယ်လောက်ကျိန်ပြောပြော မယုံတော့ဘူး။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ အပျိုစစ် မစစ် အရေးမပါတော့ဘူးလို့ လက်ခံထားကြတဲ့သူတွေရှိသလို ကိုယ့်ဇနီးမယား သူတပါးနဲ့အတူအိပ်ဖူးတာ လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ အမျိုးသားတွေလည်းရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံး အရင်ရည်းစားနဲ့ အတူအိပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားကို ချစ်လျက်နဲ့ မယုံရဲတော့လို့ ပြတ်စဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်း သူတို့လုပ်ရပ် မှန် ၊ မမှန် ကျွန်မကို အကြံဥာဏ် တောင်းခံနေတုန်းပဲ။
ကျွန်မအကြံပြုနိုင်တာကတော့ အတိတ်ဟာ အနာဂါတ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့မဆုံမီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သူ့အတိတ်မှာ ကိုယ်မပါဝင်သေးတာမို့ ဒီကိစ္စရပ်ကြီးဟာ သူကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာ ၊ သူ့စိတ်ထား ၊ သူ့အချစ်နဲ့ သူ့အပြုအမူတွေကိုသာ အနာဂါတ်မှာ သူနဲ့လက်တွဲသွားဖို့ သင့်မသင့် ပြန်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။
အတိတ်ကို ကျွန်မတို့ပြင်လို့မရဘူး။ သင်ခန်းစာယူလို့ပဲရတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ကျွန်မတို့ အကောင်းဆုံးလုပ်ကိုင်နိုင်သေးတယ်။ နေ့စဉ်ဒီလိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့အနာဂါတ်ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာပဲ။ အတိတ်ကိုပဲ ပြန်တူးဆွရန်လုပ်နေလို့ ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း မပျော်နိုင် ၊ အနာဂါတ်မှာလည်း စိတ်မချမ်းသာနိုင်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ချစ်သူရည်းစားထားတဲ့အခါ တကယ်ချစ်လို့ ၊ သူနဲ့လက်တွဲချင်လို့ သူ့ကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်တာမျိုးဖြစ်သင့်တယ်။ ချစ်သူတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကိုယ်မပါဝင်ခဲ့သေးတဲ့ သူ့အတိတ်ကို သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ မေ့ပစ်ထားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ့ကို အကောင်းဆုံးနားလည်မှုပေးလို့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါ။ အတိတ်မှာလည်းမကောင်းခဲ့ ၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း မကောင်းနိုင်တဲ့သူကို ကိုယ့်အနာဂါတ်ထဲ ဆွဲခေါ်မလာပါနဲ့။ ဒီလိုလူကို ကိုယ့်အနာဂါတ်ထဲဆွဲခေါ်လာရင် လာမယ့်နှစ် ၊ လ ၊ ရက်တွေထဲ ကိုယ်ဟာ စိတ်ဆင်းရဲနေရမှာပါ။
လက်ရှိမှာမကောင်းတဲ့သူဟာ အနာဂါတ်မှာ ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်အရာက အာမခံပေးနိုင်မလဲ။ ပစ္စုပ္ပန်ဟာ သုံးသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကောင်းနေမှ အနာဂါတ်မှာ ကောင်းမယ်လို့ ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်တာပါ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ မကောင်းရင် အနာဂါတ်မှာ ကောင်းလာလိမ့်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးဟာ မရေရာဘူးလေ။ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ လောင်းကြေးထပ်ပြီး ကံမစမ်းချင်ပါနဲ့။ ကံဆိုးရင် တခုလပ် ၊ တလင်ကွာဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဘဝခရီးဆက်ရမှာ။ ဒီ့ထက်ပိုကံဆိုးရင် ကိုယ့်သားသမီးတွေပါ မိတကွဲ ၊ ဖတကွဲ ၊ အိမ်ထောင်ကွဲနေရနိုင်တယ်။
ကိုယ့်မနက်ဖန်တွေကို အလေးထားရင် လက်ရှိမှာလည်း ကိုယ့်ပစ္စုပ္ပန်ကို အလေးထားပါ။ ပေါ့တန်တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ အပျော်တွဲကြည့်ရုံဆိုတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ တွဲရင်း ကွဲရင်း အတွဲများလာရင် ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အချစ်ကို မယုံကြည်တဲ့ အနေအထား ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသလိုဖြစ်နေမယ်။ သူမယုံကြည်တာ သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘဲ သူယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာက ကိုယ့်အပြစ်ဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်က လေးနက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ ချစ်တတ်မယ်ဆိုရင် ရည်းစားများစရာမလိုသလို ချစ်တဲ့သူကလည်း သံသယပွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ချစ်တဲ့သူတိုင်းညားပြီး ညားတဲ့သူတိုင်းလည်း ချစ်စေချင်တယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ရေး ၊ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်နဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေချင်တယ်။ မိဘတွေပျော်ရွှင်နေမှ သားသမီးတွေ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာပါ။ အနာဂါတ်ကို အရှည်ကြီးမျှော်တွေးမယ်ဆို အပျော်တွဲရုံ တွဲကြည့်တာဆိုတဲ့ စိတ်ထားတွေ ပါးလျလာပြီး လေးနက်တဲ့မေတ္တာတရားကို ယုံကြည်လာမှာပါ။ လေးနက်စွာချစ်ပြီး လေးနက်စွာခံစားလို့ လေးနက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ထူထောင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်ပါ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%9a%e1%80%b0%e1%80%98%e1%80%b0%e1%80%b8-%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%b2%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%82%90%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ab/feed/0အချစ်ရယ် ….. ခေတ်တွေပြောင်းပြီပေါ့ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/#respond Sun, 06 Nov 2016 07:18:03 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71281
ယောကျာ်းတွေ အများကြီးထဲမှာ ယောကျာ်းကောင်းတွေရှားသလို မိန်းမတွေအများကြီးထဲမှာ မိန်းမကောင်းတွေလည်း ရှားနေပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်း ၊ မိန်းမကောင်းတွေရှားနေတယ်ပြောလို့ ယောကျာ်းပျက် ၊ မိန်းမပျက်တွေများနေတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်များနေတာက ဘဝရေစီးမှာ အလိုက်သင့်မျောနေတဲ့သူတွေ များနေကြတာပါ။ သူတို့တွေက အဆင်ပြေသလို နေထိုင်သွားလာ လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်စည်း ၊ သူ့စည်းရယ်လို့ စောင့်ထိန်းမှုတွေမရှိဘဲ အခွင့်သာရင် အချောင်ပဲနှိုက်ရရ ၊ ဖြတ်ပဲခုတ်ရရ ၊ ချောက်ပဲတွန်းရရ ၊ ခြေပဲထိုးရရ ၊ ဘယ်လို သူများကို နင်းပြီးတက်ရမလဲဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကြောင့် အဘက်ဘက်မှာ စည်းတွေပျက်လာတာပါ။ ခုဆို လူမှုရေးတွေမှာလည်း စည်းပျက်နေကြပြီလေ။
ကျွန်မတို့ခေတ်တုန်းက ရည်းစားရှိလျက်နဲ့ ကိုယ့်လာကြူ ရင် စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားတဲ့သူလို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဒီလိုလူကို တဏှာရူးလို့သတ်မှတ်ပြီး သူ့အကြောင်းသိတဲ့ ၊ ကြားတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ရှောင်ကြတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ သူရည်းစားရှိရုံမကလို့ အိမ်ထောင်ပဲရှိရှိ ၊ သားသမီးတွေ ရှိနေပစေဦး ကိုယ့်လူ ကိုယ်နိုင်အောင်ထိန်းဆိုတဲ့စကားနဲ့ သူများလူကို အမျိုးသမီးတန်မဲ့ မရှက်မကြောက် ကြာခိုနေကြတယ်။ ဒီလူများ ကိုယ့်ဘက်ပါလာပြီဆိုရင် တိုက်ပွဲတရာ အနိုင်ရနေတဲ့ အောင်နိုင်သူကြီးလို မောလို့ကြွားလို့။ တကယ်ဆို သူများအိမ်ထောင်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ သူယုတ်မာစိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့လူ ၊ သူများအချစ်ရေး ကိုယ့်ကြောင့် ပျက်စီးစေတာ အောင်ပွဲခံတဲ့အထိ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားနေတဲ့သူ ၊ တကယ်ကို အောက်တန်းကျတဲ့သူဆိုတာ မေ့နေလောက်အောင် မိန်းမကောင်းတွေ ရှားလာတာပါ။
သူများလူကိုယူမှ ယောကျာ်းရမယ်ဆို အပျိုကြီးအဖြစ်ပဲ အရိုးထုတ်တော့မယ် ၊ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာတော့ အထိပါးမခံတော့ဘူးဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကောင်း စိတ်ဓါတ်တွေ ဒီခေတ်ထဲမှာ ရှားလာပြီ။ သူ့မိသားစုကို ကိုယ့်မိသားစုလို သဘောထားပြီး ကိုယ့်ကြောင့် အသိုက်အမြုံလေးပျက်စီးသွားမယ်။ သူအိမ်ထောင်ရှိတာ မသိခဲ့လို့ ငြိတွယ်ခဲ့မိတဲ့နောက် ဘယ်လောက်ပဲချစ်မိပစေ ကိုယ်က တကိုယ်ရည်မို့ အနစ်နာခံပြီး နောက်ဆုတ်လိုက်မယ်။ မိန်းကလေးတို့အရှက်တရား ဦးထိပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ ရှားလာပြီ။
သူများမျက်ရည်တွေနဲ့တော့ ထမင်းမစားဘူး ။ ဆားနဲ့ပဲစားရ ၊ စားရ ကိုယ့်စိတ်လုံအောင် နေထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတွေ ရှားလာပြီ။ ကျွန်မတွေးမိတယ်။ တကယ်လို့များသာ အမျိုးသမီးထုအားလုံးက ကျွန်မတို့ခေတ်တုန်းကလို ၊ ကျွန်မတို့ မိဘနဲ့ ဘိုးဘွားခေတ်တုန်းကလို အရှက်တရားကိုကာကွယ်ပြီး စိတ်ဓါတ် နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အကောင်းဆုံး စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် ဖောက်ပြန်လိုတဲ့ယောကျာ်းတွေလည်း ဖောက်ပြန်ခွင့်မသာတော့ဘူး။ သူတို့နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး လိုက်ဖောက်ပြန်မယ့် မိန်းမမှမရှိတာကိုး ။ သူတို့မနေနိုင်လှ ငွေပေးအိပ်လို့ရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားရမှာ။ ခုခေတ်မှာတော့ မိန်းမပျက်စိတ်ဓါတ်တွေများလာလို့ သူများရည်းစား ၊ သူများလင်ကို ကိုယ့်ရည်းစား ၊ ကိုယ့်လင်အဖြစ် လုယူသိမ်းပိုက်ပြီး အဲဒီလို သိမ်းပိုက်နိုင်တာကို ကိုယ့်အစွမ်းအစအဖြစ် တလွဲဂုဏ်ယူနေကြတာ ရှက်စရာ။
ကြုံတုန်း ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ဖောက်သည်ချရဦးမယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက သူ့ဘာသာရပ်တည်နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်လေးနဲ့ အခြေကျနေပြီး ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိနေပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ရိုးသားတဲ့သူမို့ သူ့ကို တသက်တာ သစ္စာရှိရှိ ပေါင်းဖက်သွားပြီး တိုးပွားလာမယ့် သားသမီးတွေကို ငဲ့ညှာမယ့်သူကိုပဲ အလိုရှိခဲ့တာ။ ဒီဆန္ဒကြောင့်ပဲ မိဘမဲ့မပြည့်စုံတဲ့ ဈေးဗန်းလွယ်ပြီး ပစ္စည်းအတိုအထွာလေးတွေလိုက်ရောင်းတဲ့ ရွယ်တူကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်မိတယ်။ သူ့အထင်ကတော့ ဒီကောင်လေးဟာ မိဘမဲ့မို့ ဒီဝမ်းနည်းမှုကို ခံစားခဲ့ရပြီးသား ၊ သူ့သားသမီးတွေကိုတော့ ဖခင်မဲ့အဖြစ် ကြီးပြင်းစေမှာမဟုတ်ဘူး။ ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေခဲ့ရလို့ ဘဝနာပြီး ပိုကြိုးစားမယ် ၊ မိသားစုကို ပိုတန်ဖိုးထားမယ်လို့ ထင်ခဲ့တာပါ။
ယူပြီးသိပ်မကြာ စုမိဆောင်းမိလေးနဲ့ အဆက်အသွယ်လေးကောင်းပြီး စိးပွားရေးကောင်းလာတော့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ငွေတွေနဲ့ တိုးတက်ချမ်းသာလာခဲ့တယ်။ ဒီ့မတိုင်မီ ကျွန်မသူငယ်ချင်း မျှော်လင့်တွက်ချက်ထားတာတွေ မှန်ပါတယ်။ ငွေရှိလာတော့ မမှန်တော့ဘူး။ သူ့အမျိုးသားအနားမှာ အမျိုးသမီးတွေ အတင်းကပ်တော့တာပဲ။ မိန်းမနဲ့သားသမီးတွေ ရှိနေမှန်းသိရက်နဲ့ ကပ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မစောင့်ထိန်းတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေပဲ။ မရှက်မကြောက် သူများအိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲပြီးမှ ကိုယ့်အိမ်ထောင် ထူထောင်လိုကြသူတွေပါ။ ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေထဲကမှ အဆိုးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကျွန်မကြားသိခဲ့ရတယ်။
သူမကတော့ ကလေးနှစ်ယောက်အမေပါ။ သူ့ယောကျာ်းကလည်း သူ့ကိုထားခဲ့ပြီး ဖောက်ပြန်သွားခဲ့တာပါ။ ကိုယ်တိုင် ဒီခံစားမှုကို ရင်စီးခံခဲ့ရလို့ တဖက်သား ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်ရက်နဲ့ အဆုံးစွန်အထိ စိတ်ယုတ်မာရှိတဲ့သူပေါ့။ ကျွန်မတဖက်သားကို ဒီလောက်အထိ မပြောတတ်ဘူး။ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဆိုတာ ဆက်ပြောပါမယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးက ဒီအမျိုးသားနဲ့ရည်းစားဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဈေးဗန်းရွက်တဲ့ကောင်လေးကိုပစ်လို့ အိမ်ကသဘောတူလို့ပါဆိုပြီး ပိုသာတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့သူပါ။ သူမအိမ်ထောင်ပျက်ခဲ့ပြီး ငွေရှိလာတဲ့ရည်းစားဟောင်းကို အတင်းပြန်ပတ်သက် ၊ အိမ်ထောင်နဲ့ကလေးတွေရှိမှန်းသိလည်း အတင်းဝင်ရော ၊ နောက်ဆုံးမတော့ သူများယောက်ျားကို သူ့ယောက်ျားလုပ်တော့တာပါပဲ။
ငွေရှိတော့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ အသက်မဝင်ခင်ကာလကတည်းက လက်ထပ်ထားတယ်လုပ်လိုလုပ် ၊ မိန်းမနဲ့ ဇနီးဆီ ပြန်ကြည့်တဲ့သူများခင်ပွန်း (မကွာရသေးတာ)ကို တားလိုတား ၊ နောက်ဆုံးမှာ မယားကြီးနဲ့သားသမီးတွေကို ပုံမှန်ထောက်ပံ့ငွေပေးတာကို ထောက်ပံ့စရာမလိုဘူးဆိုပြီး သွေးထိုး ၊ တဏှာနဲ့ညု ၊ အီစီကလီတွေလုပ်ပြတော့ ကျန်နဲ့မယားကြီးနဲ့ကလေးတွေမှာ ဖခင်ကိုတမျှော်မျှော် …. မျှော်ပေမယ့်လည်း ပေါ်မလာတော့ဘူးလေ။
ဒီအမျိုးသမီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာ နာစရာအကောင်းဆုံးက မယားကြီးကမွေးထားတဲ့ကလေးကမှ ဒီအမျိုးသားရဲ့ကလေးမဟုတ်ဘဲ တခြားမိန်းမတွေနဲ့ မွေးရင်လည်း သူ့ကလေးပါ။ သူမကိုယ်တိုင် မွေးပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေလေရဲ့။ သူပိုင်းထားတဲ့ ယောကျာ်းကိုတော့ ဟိုမယားကြီးဆီ မသွားခိုင်းတော့ဘူးလေ။ ဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုး ဒီခေတ်ထဲမှာ ရှိနေပါလားလို့ ကျွန်မသြချမိပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်တွေ အောက်တန်းကျလိုက်တာ။
ခုမယားကြီးမှာ တရားစွဲဖို့လည်း ငွေမနိုင် ၊ အမှုတွေချိန်းခဲ့ရင် ကလေးတဖက် စားသောက်ဖို့လုပ်ကိုင်ရတာတဖက်နဲ့ လူသွားနိုင်မှာမဟုတ်တာတွေကြောင့် တရားမစွဲဖြစ်ဘူး။ ကွာရှင်းခွင့်တောင်းလာတဲ့ခင်ပွန်းဘက်က ဘယ်လိုစိတ်နာအောင်ပြောပြော ကလေးတွေမှာ တရားဝင်အဖေရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ မကွာပေးဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာရှာစားရင်း ကိုယ့်သားသမီးတွေကို တနိုင်အားလေးနဲ့ ပံ့ပိုးနေရတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ဖောက်ပြန်သွားတဲ့ယောကျာ်းက အပြစ်များသလား ၊ ခင်ပွန်းဖောက်ပြန်လောက်အောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ မယားကြီးက အပြစ်ရှိလေသလား ၊ သူများအိမ်ထောင်ဖြိုခွဲရုံမက သူများသားသမီးနဲ့ဖခင် ရှင်ကွဲ ကွဲအောင်ခွဲပြီး သူများယောကျာ်းကို ကိုယ့်ယောကျာ်းလုပ် ၊ သူများစီးပွားကို ကိုယ့်စီးပွားလုပ်သွားတဲ့သူက အမှားကြီးမှားလေသလား။
ကျွန်မကတော့ ဒီလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးသာမပေါ်ခဲ့ရင် ဖောက်ပြန်တဲ့ယောကျာ်းလည်း အပြင်မှာဖောက်ပြန်ပေမယ့် သည်းခံတဲ့မိန်းမဆီ ပြန်လာဦးမှာပဲ ၊ သူ့ကလေးတွေ ဖခင်မဲ့အဖြစ် မကြီးပြင်းစေဖို့ ရပ်တည်ပေးဦးမှာလို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ လက်ဝါးနှစ်ဖက်စလုံးရိုက်မှ အသံထွက်တယ်ဆိုပေမယ့် အတင်ပြေးလာရိုက်တဲ့လက်ဝါးကြောင့် မထင်မှတ်ဘဲ အိမ်ထောင်တခုပြိုကွဲရပြီ ။ ဒီမိသားစုထဲမှာ ခံစားရသူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ နာကျင်ကြရပြီ ။ ဒီဇနီးနဲ့ကလေးတွေမှာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရကုန်ကြပြီ။ ဖန်တီးလုပ်ကြံခဲ့သူတွေ ဘဝတသက်လုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းကိုယ်စား ကျွန်မ မေတ္တာပို့ပေးတယ်။ သူစိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားတိုင်း ကိုယ်စိတ်ဓါတ်မပျက်ပြားစေနဲ့လေ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%b1%e1%80%81%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9/feed/0ဘဝထဲခေါ်လာခဲ့သူများ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%91%e1%80%b2%e1%80%b1%e1%80%81%e1%81%9a%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%91%e1%80%b2%e1%80%b1%e1%80%81%e1%81%9a%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/#respond Tue, 04 Oct 2016 07:13:43 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71076
ဘဝထဲ အရေးအကြီးဆုံးသူတွေကို ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာလဲ။ ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်စေသူတွေလား ၊ ကိုယ့်ကို မျက်နှာသာပေးတဲ့သူတွေလား ၊ ကိုယ့်ကို အစစ အကူအညီပေးတတ်သူတွေလား ၊ ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေလား ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေလား ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလား ၊ ကိုယ့်အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေလား။
အရေးအကြီးဆုံးသူတွေဆိုတာ ကိုယ်ပတ်သက်ဆက်ဆံနေရတဲ့ လူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးဆိုတာကို ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ အမျိုးမျိုး သတ်မှတ်နေကြတာပါ။ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေ ၊ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသူတွေကို ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးသူတွေလို့ ကိုယ့်ဘာသာ သတ်မှတ်ထားပေမယ့်လည်း လူတိုင်းအတွက် ဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုယ့်ကိုဘဝထဲခေါ်လာခဲ့သူများနဲ့ ကိုယ်က ဘဝထဲခေါ်လာခဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။
ပိုရှင်းအောင်ပြောရရင် ကိုယ့်ကိုလူ့လောကထဲ အရောက်ခေါ်လာခဲ့တဲ့ ကိုယ့်မိဘပါပဲ။ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ ခံစားချက်တွေက ရှေ့မှာရှိနေနေ သူတို့သာကိုယ့်ကို လူ့လောကထဲ ဆွဲသွင်းမလာခဲ့ရင် ယနေ့မှာ ဒီအမည်နဲ့ ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုရယူထားတဲ့ကိုယ် ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့သွေးသားတော်စပ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ ကိုယ့်အတွက် ထာဝရအရေးအကြီးဆုံးသူများ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်က ဘဝထဲဆွဲခေါ်လာခဲ့သူတွေဟာလည်း ကိုယ့်ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသူများ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လက်ကျန်ဘဝခရီးအတူရှေ့ဆက်မယ်လို့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူတို့ကို ကိုယ့်ဘဝထဲဆွဲခေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်လား။ ကိုယ်က ကိုယ့်ဘဝထဲဆွဲခေါ်လာခဲ့တဲ့ အနီးစပ်ဆုံးသူတွေဟာ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ မိမိမိအိမ်ထောင်ဖက် ၊ မိမိရဲ့ရင်သွေးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လောကသဘာဝကိုက ပျော်ရွှင်မှုချည်းဘဲ မရနိုင်တာမို့ မိဘကပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ထဲက မိသားစုဝင်တွေက ကိုယ့်ကို ချိုတဲ့စကားကိုဆိုစေ ၊ ခါးတဲ့စကားကိုဆိုစေ ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုပေးသည်ဖြစ်စေ ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုပေးသည်ဖြစ်စေ ၊ စိတ်ပေ့ါပါးမှုကိုပေးသည်ဖြစ်စေ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုပေးသည်ဖြစ်စေ သူတို့ဟာ ပထမဦးစားပေးနေရာမှာ ရှိနေရမယ့်သူတွေပါ။
ဒီအခါ တချို့တွေကပြောကြတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ ကိုယ့်မိဘမတည့်လို့ ၊ ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြား ဗျာများရလို့ ၊ ဘယ်သူ့အပေါ် ပိုသွားမိလို့ဆိုတာတွေနဲ့ စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်။ ကြွေးဟောင်းလည်းဆပ်ပါ။ ကြွေးသစ်လည်းချပါ။ မိဘကိုလည်း တာဝန်ကျေပါစေ။ မိသားစုအပေါ်လည်း တာဝန်ကျေပါစေ။ ဒါမှ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ကျေနပ်စွာနေထိုင်ဖြစ်မှာပါ။
တချို့တွေက ကြွေးဟောင်းမဆပ်ရသေးဘူး ၊ ကြွေးသစ်ကို ကတိခပ်မြန်မြန်ပေးပြီး ယူလိုက်တာပဲ။ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ပိုလာသလဲ။ ပိုလာတဲ့တာဝန်တွေကို မသိဟန်ဆောင်ပြီး ဝန်ပိလာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ တကိုယ်တော်ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း နောက်ထပ်ကြွေးသစ်ထပ်ယူပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ ကြွေးတွေသာပိလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ယုံကြည်လေးစားမှု မရှိနိုင်တော့ဘူး ။ သူများတွေရဲ့ ယုံကြည်လေးစားမှုလည်း မရနိုင်တော့ဘူး။
မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်လစာလေးနဲ့မှ ခြိုးခြံမထောက်ပံ့နိုင်ခင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ တကြွကြွနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု ၊ သားသမီးယူ လုပ်ကြတယ်။ တအိမ်ထောင်တာဝန်ဆိုတာတွေကို ကျေပွန်စွာမထမ်းနိုင်တဲ့အချိန် သားသမီးတာဝန်တွေပါ ပိလာတော့ ဒီအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ဒီသားသမီးတွေအပေါ် ငြူစူအပြစ်ရှာရင်းက ကိုယ့်ဘာသာ တကိုယ်တော်စိတ်ဖြေရင်း နီးစပ်ရာနဲ့ငြိစွန်းသွားပြီး နောက်မီးလင်း ၊ နောက်အိမ်ထောင်ပြုကြတယ်။ အဲဒီအိမ်ထောင်အပေါ်မှာလည်း ပီပြင်စွာ တာဝန်မကျေနိုင်ပြန်တော့ တအိမ်ထောင်ပြီး တအိမ်ထောင်ပြောင်းရင်း အိမ်ထောင်များတဲ့သူအဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှုံ့ချ ၊ မိမိတန်ဖိုးလည်းကျ ဖြစ်ရတယ်။
တာဝန်ဆိုတာဘာလဲ။ ငွေပံ့ပိုးပေးနိုင်တာကိုပဲ တာဝန်လို့ခေါ်တယ်ထင်ရင်မှားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုတိုင်းဟာ ငွေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတာချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ မေတ္တာတရား အစစ်အမှန်ဟာ ငွေပုံပေါ်ကလာတာမဟုတ်ဘဲ ရင်ထဲကလာတာပါ။ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေကြောင့် ကြောင့်ကြခဲ့ရဖူးရင် မရရှိတဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် အထီးကျန်ခံစားကြရတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်သင့်ပါတယ်။
ဘဝထဲကိုယ်ဆွဲခေါ်လာခဲ့တဲ့ မိဘနဲ့ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေအပေါ် တာဝန်ကျေပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲ အရေးကြီးအခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ မိတ်ဆွေစစ် ၊ မိတ်ဆွေမှန် ၊ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေပေါ်မှာလည်း ကျွန်းကိုင်းမှီ ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ တာဝန်ကျေရဦးမယ်။ နိုင်သမျှ နှုတ်၏ဆောင်မခြင်း ၊ လက်၏ဆောင်မခြင်း လုပ်ပေးရဦးမယ်။ ကိုယ်တွေကြားရှိနေတဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ၊ ချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်း တိုးပွားအောင် အချိန်ပေးလုပ်ယူရဦးမယ်။
ခုခေတ် facebook ဆိုတာကြီးပေါ်လာတာ ရပ်ဝေးကသူငယ်ချင်းတွေကို အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိဖို့ ၊ ဝေးကွာသွားခဲ့တာကြာခဲ့သူတွေ ပြန်အဆက်အသွယ်ရဖို့ စတဲ့ အားသာချက်တွေရှိနေပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်အမြဲတွေ့နေရတာပဲလေ အပြင်မှာတွေ့စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေ ၊ နှုတ်ဆက်စကားတွေနဲ့ ချီးမြှင့်စကားတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပေးပို့ကွန်မန့်ပေးလိုက်ရုံပဲ အပြင်မှာ တွေ့ဆုံပြောနေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေ ၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တွေ့မှပြိုင်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြိုင်ဆိုင်နေလိုစိတ်တွေ စတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေလည်း အများကြီးရှိနေတယ်။
ကြားဝင်လာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ စိတ်ထွေသွားတော့ ဘယ်သူတွေဟာ ကိုယ့်ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးလည်းဆိုတာကို မေ့လျော့သွားတော့တယ်။ ဒါကိုမေ့လျော့ပြီဆိုမှတော့ ဒီလူတွေကို အလေးထားတဲ့စိတ်နဲ့ အလေးပေးဖို့အချိန်တွေ ဘယ်ရှိနိုင်တော့မလဲ။ အရေးမပါတဲ့အရာတွေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝတခုလုံးစာ အရေးမပါတဲ့လူတွေကို အရာပေးပြီး အရေးပါတဲ့သူတွေကို ဘေးဖယ်ထားမိပြီဆိုရင် ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်ဘဝထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးသူများဖြစ်တဲ့ ဘဝထဲခေါ်လာခဲ့သူများကို ပစ်ပယ်ထားခဲ့သူပါ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%91%e1%80%b2%e1%80%b1%e1%80%81%e1%81%9a%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8/feed/0ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးဆပ်နေခြင်းမဟုတ်ရပါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%80-%e1%80%98%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%95/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%80-%e1%80%98%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%95/#respond Sun, 25 Sep 2016 09:03:55 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=70929
အမျိုးသမီးတွေ အများစုက ပြောကြတယ်။ သူတို့တွေ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ကတည်းက သူတို့ခင်ပွန်းအတွက် သူတို့ကိုယ်ကို ပေးဆပ်လုပ်ကျွေးနေကြရတယ် ၊ ကျွန်တစ်ယောက်လိုပဲ လုပ်နေရတယ် ၊ တခါတလေ ကျွန်ထက်ဆိုးတဲ့ တဘဝစာ လစာမဲ့ပေးဆပ်ခြင်းအဖြစ် သတ်မှတ်နေကြတယ်။
တချို့အမျိုးသားတွေကျပြန်တော့ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင် နွားတစ်ကောင်လို ရုန်းရတယ် ၊ တအိမ်လုံးစာရှာကျွေးရတာ လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး ၊ အိမ်တွင်းကလုပ်ကိုင်စရာတွေဟာ ငါ့အလုပ်မဟုတ်သလို သားသမီးတွေရဲ့ ဝေယျားဝစ္စအလုပ်တွေက သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး ၊ တအိမ်လုံးစာ လူတန်းစေ့သို့မဟုတ် ဒီ့ထက်မြင့်အောင် ကြိုးစားရှာဖွေကျွေးနေရတာ ငါ့တာဝန်ကျေပြီလို့ သတ်မှတ်ကြပြန်တယ်။
ဒီလိုအတွေးအခေါ်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးတွေ မေ့နေတာတခုရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ မေတ္တတရားဖြင့် ဝေမျှခြင်းပါပဲ။ ဝေမျှခြင်းဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လိုဆို Sharing ပေါ့။ လူနှစ်ယောက် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဆိုကတည်းက တသက်တာ ၊ တဘဝစာ ဝေမျှနေထိုင်သွားကြမယ်လို့ သဘောတူပြီး အတူနေထိုင်ဖို့ လက်ထပ်စာချုပ်နဲ့ တရားဝင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်လိုက်တာပါ။
အဲဒီလို ပေါင်းသင်းလိုက်တဲ့နေ့ကစလို့ သူ့အလုပ်တွေကို ကိုယ်က မျှဝေလုပ်ပေးမယ် ၊ သူ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို ကိုယ်က ဝေမျှထမ်းပေးမယ် ၊ သူ့ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဝေမျှခံစားမယ် ၊ ရှေ့လျှောက် ကြုံလာမယ့် လောကဓံတွေ ၊ အခက်အခဲတွေ ၊ အဆင်မပြေသမျှတွေကို အတူတကွ မျှဝေဖြေရှင်းကြမယ်လို့ သဘောတူပြီး လက်ထပ်ပေါင်းသင်းလိုက်တာပါ။
သူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ တိုးပွားလာမယ့် ကိုယ်တွေရဲ့ရင်သွေးတာဝန်တွေကိုလည်း နှစ်ယောက်စလုံးမျှဝေထမ်းကြရမှာပါပဲ။ ခင်ပွန်းဟာငွေရှာပေးရုံနဲ့ အိမ်ထောင့်တာဝန်ကျေသွားတာမဟုတ်သလို ဇနီးမယားဟာလည်း အိမ်အလုပ်တွေ တကုပ်ကုပ်လုပ်နေရုံ ၊ သားသမီးတာဝန်တွေ ကျုံးလုပ်ရုံနဲ့လည်း တာဝန်ကျေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဦးမှာ ကျင့်သုံးဖို့ သဘောတူထားတဲ့ မျှဝေခြင်းဆိုတာကို ဒီအိမ်ထောင်ထဲ မေ့ပျောက်ထားသမျှ ၊ မကျင့်သုံးနေသရွေ့ ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာ တကယ့်အိမ်ထောင့်ရသဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင့်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဆိတ်သုဉ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငါဟာ သူ့ကိုပေးဆပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာ ငါဟာ မပျော်ပိုက်ဘူးဆိုတာ သေချာလာပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်မပျော်ပိုက်တဲ့ ဒီအိမ်ထောင်ရေးထဲမှာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ သူ့အလုပ်တွေ ၊ သူ့တာဝန်တွေ မျှဝေထမ်းနေရတာကို ပေးဆပ်နေရတာလို့ မြင်လာတာပါပဲ။
ပေးဆပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးခိုင်မာလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီအိမ်ထောင်အတွက် ၊ ဒီမိသားစုအတွက် ပေးဆပ်နေရတဲ့သူအဖြစ် ယုံကြည်လာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတော့ ကိုယ်ထမ်းရတဲ့ဝန်ဟာ အတော်ကြီးလေးတဲ့ဝန်လို့ မြင်လာတဲ့အတွက် ထမ်းနေကျတာဝန်ထက် ပိုမလုပ်လိုတော့ဘူး။ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးလာရင် ထမ်းနေကျတာဝန်တောင် မထမ်းချင်တော့ဘူး။ အဆိုးဆုံးမှာတော့ ဒီအိမ်ထောင်ထဲက လွတ်မြောက်လိုတာပါပဲ။ ဒီမိသားစုကြီးရဲ့အဝေး ထွက်သွားပြီး တကိုယ်ရည်တကာယ ပြန်နေချင်တာလိုမျိုး ၊ ဒီ့ထက်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ နောက်တယောက်နဲ့တွဲပြီး နောက်အိမ်ထောင် ထူထောင်လိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် ဒီမိသားစုထဲမှာ မေတ္တာတွေ ခမ်းလာလို့ပါ။ စေတနာတွေ ပါးလာလို့ပါ။ စာနာစိတ်တွေ လျော့လာလို့ပါ။ ကိုယ်ချင်းစာတရား မဲ့လာလို့ပါ။ ဝေမျှလိုစိတ် လုံးဝမရှိတော့လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်တော့ဘဲ မိမိလုပ်ချင်ရာကို ဇွတ်လုပ်သွားတော့တာပဲ။ ဒါတွေရဲ့တရားခံဟာ သူပဲလား။
လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ အသံမြည်လာတာပါ။ လူနှစ်ဦးပေါင်းသင်းလက်ထပ်ဖို့ဆိုတာ ဒီလူနှစ်ဦးမကြည်ဖြူဘဲ လရှည် ၊ နှစ်ရှည် လက်တွဲမမြဲနိုင်ပါဘူး။ ဒီလူနှစ်ဦးကွဲဖို့ဆိုပြန်ရင်လည်း အဆုံးကိုချည်းမကြည့်ဘဲ အစကနေအလယ် ၊ ပြီးရင် ဆုံးခါနီးအထိ ပြန်သုံးသပ်ရမှာပါ။ သူဒီလိုပြောင်းလဲသွားစေဖို့ တွန်းအားတွေကို ကိုယ်က ဖြစ်စေခဲ့လေသလားလို့ ပြန်တွေးရမှာပါ။
သူဒီလိုမိသားစုကို မစာနာနိုင်တော့တဲ့အထိ ပစ်ခွါချင်လောက်အောင် ကိုယ်က သူ့ဆန္ဒတွေ ၊ သူ့ခံစားမှုတွေ ၊ သူ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပစ်ပယ်ခဲ့မိလေသလားလို့ ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ တလင်တမယားစနစ်နဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေကို ထိန်းရမယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကျင့်ဝတ်ကို မကျေပွန်ဘဲ သူ့ကိုလျစ်လျူရှုမိခဲ့တာတွေ များလာမယ်ဆိုရင် သူကလည်း ကိုယ့်ကိုလျစ်လျူရှုချင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တိုင်က အမျိုးသမီးဖြစ်တာမို့ ဆန်ရင်းနာနာဖွပ်တဲ့အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုပဲ ကျွန်မဦးစားပေးပြောရမှာပါ။ ကျွန်မတို့ အမျိုးသမီးအများစုဟာ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုရင် အပျိုတုန်းကလို လှလှပပ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး အိမ်ထဲအိမ်ပြင်မှာ နေထိုင်သွားဖို့ အိမ်ထောင်သက်ကြာလာလေ မလိုတော့ဘူးထင်လေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးရသွားရင် အိမ်မှုကိစ္စ ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စ ၊ အလုပ်ကိစ္စ စသဖြင့်တွေနဲ့ မအားလပ်လေတော့ ကိုယ်တိုင်ပြင်ပြင်ဆင်ဆင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေထိုင်ပြီး ခင်ပွန်းကို ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ ၊ ယုယမှုလေးတွေ ၊ စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးဖို့တွေမှာ ပျက်ကွက်လာတတ်ကြတယ်။
အဲဒီကစတာပဲလို့ ပြောပါရစေ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ဒီအိမ်ထောင်နဲ့ ဒီခင်ပွန်းအပေါ် ပိုတွယ်တာလာတယ်။ ကလေးတွေရလာရင်တော့ ဒီအိမ်ထောင်ဟာ ပြည့်စုံခိုင်မြဲသွားပြီ ၊ ကိုယ်ကဇနီးဝတ်ကျေမယ် ၊ မိခင်ဝတ်ကျေမယ်ဆိုရင် ပြီးပြီလို့တွေးကြတယ်။ သူတို့အများစု ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ ဇနီးဝတ် ၊ မိခင်ဝတ်ဆိုတာ ခင်ပွန်းအဝတ်တွေ လျှော်ဖွပ်ပြီး သားသမီးအတွက် လိုအပ်တာတွေ ၊ ဒီအိမ်တွင်းမှာ လိုအပ်နေတာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးမယ် ၊ ဒါဟာ အိမ်ထောင်ရှင်မရဲ့တာဝန်တွေလို့ ယုံကြည်လက်ခံထားကြတာပါ။
စီးပွားလည်းရှာ ၊ အိမ်ထောင်ရှင်မလည်း ပီသအောင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဇနီးမယားတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလွန်းတော့ ခင်ပွန်းကို ယုယကြင်နာမှုတွေပေးဖို့ဆိုတာ ထူးပြီးမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ ထင်ကြတယ်။ သုံးဆယ်တော်တော်ကျော်လာတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေက ဒီလိုပိုပြီး ယုံကြည်လက်ခံလို့ ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတယ်။ ဒါဟာ မှားပါတယ်။ ဒီအိမ်ထောင်ပေါ်မှာ မေတ္တာ ၊ စေတနာတွေ ပါးလျလာတဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ဘယ်ကနေစလို့ ဒီဇနီးနဲ့ ဒီအိမ်ထောင်အပေါ် တွယ်တာမှု ကင်းလာသလဲဆိုရင် ဒီကနေ စတာပါပဲ။
ဇနီးကိုယ်တိုင်က ဝေမျှလိုမှုမှာ အိမ်ထောင်ဦးကလို တက်ကြွမှုမရှိတော့ဘူး။ ဘာဝေမျှလိုမှုလဲဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ဝေမျှလိုမှုပါ။ ဗိုက်ဆာရင် စားလိုက်မှ ဗိုက်ဝတဲ့ခံစားချက်လိုမျိုး ……. ဆန္ဒရှိနေချိန်မှာ ဇနီးက အလိုက်တသိ အတူနေပေးမယ် ၊ နှိုးဆွမှုတွေပေးမယ်ဆိုရင် ခင်ပွန်းဟာ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရမှာပါ။ ကိုယ်ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန် ကိုယ်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေ အလိုက်တသိပြင်ဆင်ပြီး စောင့်ကြိုနေတတ်တဲ့ ဇနီးကြောင့် ဆာဆာနဲ့ စားမြိန်လိုက်တဲ့ ခံစားမှုဟာ အဆာပြေရုံ ရှိတာလေးနဲ့ တင်းတိမ်လိုက်ရတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ အကွာကြီးကွာတယ်လေ။
ဘယ်အချိန်မဆို ခင်ပွန်းအပေါ် အလိုက်တသိ နားလည်လုပ်ကိုင်နေထိုင်ပေးတတ်တဲ့ ဇနီးမယားကြောင့် ဒီဇနီးမယားအပေါ်ချစ်စိတ်နဲ့ ဒီဇနီးမယားရှိနေတဲ့ ဒီအိမ်ထောင်အပေါ် အချိန်နဲ့အမျှ တွယ်တာရစ်နှောင်တဲ့ ခံစားချက်တွေဟာ ခင်ပွန်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ တာဝန်ကျေရုံ ၊ ခင်ပွန်းဆန္ဒပြည့်ရုံ မနေချင်နေချင် အတူနေတတ်တဲ့ ဇနီးမယားထက် ခန္ဓာချင်းဝေမျှမှုဟာ ခင်ပွန်းအပေါ် အမြဲလိုအလိုက်တသိ စွဲမက်မှုတွေ ပေးမြဲပေးတတ်တဲ့ ဇနီးမယားက ခင်ပွန်းကို ပိုစွဲမက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ဇနီးမယားက အခရာဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အမေပြောတလ မယားပြောတညဆိုတဲ့ စကားတွေ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။
မကိုခင်မှ ဥကိုမင်တာဆိုတဲ့စကားဟာလည်း အလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအလိုက်သိတဲ့ ဇနီးမယားအပေါ် ချစ်ခင်တွယ်တာမှုတွေ သက်ဝင်နေတော့ ဒီဇနီးမယားက မွေးလာတဲ့ ကိုယ့်သွေးသားတွေအပေါ်လည်း ချစ်ခင်တွယ်တာမှုတွေ ဖြစ်နေရော။ တချို့အမျိုးသားတွေကျတော့ တာဝန်သိတာရယ် ၊ သစ္စာရှိတာရယ် ၊ ကိုယ့်သွေးသားတွေ မျက်နှာမငယ်စေချင်တာရယ်ပေါင်းပြီး ဇနီးမယားနဲ့ အဆင်မပြေပေမယ့် ကလေးမျက်နှာငဲ့ပြီး ဒီလိုမပျော်တဲ့အိမ်ထောင်ထဲ ဆက်ပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇနီးမယားတွေကချည်း ကလေးမျက်နှာငဲ့ကြည့်ကြတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။
ခင်ပွန်းတွေ ဒီအိမ်ထောင်အတွက် ရှာဖွေကျွေးရတယ်ဆိုတာလည်း ပေးဆပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနေထိုင်လုပ်ကိုင်သွားချင်လို့ ဒီအိမ်ထောင်ကို ဒီဇနီးမယားနဲ့အတူ ထူထောင်ခဲ့တာပဲလေ။ ဒီအိမ်ထောင်တခု လူတန်းစေ့နေထိုင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အိမ်ထောင်ဦးစီးရဲ့ ရှာဖွေကျွေးမွေးနိုင်မှု အရည်အချင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မရဲ့အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအရည်အချင်းပေါ်မူတည်နေပါတယ်။
ဒီအိမ်ထောင်တခု ပျော်ရွှင်စွာမြဲမြံဖို့ဆိုတာကတော့ ဒီအိမ်ထောင်စုထဲမှာ အဓိကနေရာက ဦးဆောင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့ အိမ်ရှင်မနှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ကြိုးပမ်းစွမ်းဆောင်မှုအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးက ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာ ဘာလုပ်လုပ် တာဝန်ကျေရုံ လုပ်လိုက်တာထက် မေတ္တာ ၊ စေတနာလေး အရင်းခံပြီး လုပ်နေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီအိမ်ထောင်ဟာ ပျော်ရွှင်စွာမြဲမြံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိမ်ထောင်ထဲမှာ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးဆပ်နေခြင်းမဟုတ်ရပါ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%98%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%80-%e1%80%98%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%86%e1%80%95/feed/0တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးလည်း အစားထိုးလို့မရတဲ့အရာ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8-2/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8-2/#respond Tue, 19 Jul 2016 04:02:51 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=65813
တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးလည်း အစားထိုးလို့မရတာ အချိန်ရယ် ၊ အရွယ်ရယ် ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုတာရယ် ၊ ရှင်သန်ခွင့်ရရှိခြင်း စတာတွေအပြင် ရင်ထဲကလစ်ဟာသွားတဲ့နေရာပါ။ ရင်ထဲနက်နက်တနေရာမှာ နေရာပေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရရင် သူ့နေရာအစားထိုးဖို့ ကြိုးစားပါသော်လည်းမရ ၊ သူ့ကိုပြန်ရယူဖို့ကလည်း မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ ရင်နာရသူက ကိုယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ရင်တွင်းနက်နက်တနေရာမှာရှိနေတဲ့ ဒီနေရာကို ရယူသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တွေးကြည့်ကြရအောင်။ ပထမဆုံး မိဘသာ ဒီနေရာမှာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီမိဘကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဟာ အတော်ကြီးမားလှပါတယ်။ အားအကိုးရဆုံးဟာလည်းသူ ၊ အယုံကြည်ရဆုံးဟာလည်းသူဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ အမေဖြစ်ဖြစ် ၊ အဖေဖြစ်ဖြစ် ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆို အတော် အားပြတ်သွားမှာပဲ။
ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ဒီအမေ ၊ အဖေနေရာ အစားထိုးဝင်လာသူဟာ အမေ ၊ အဖေ နေရာဝင်ထိုင်ပေမယ့် အမေ ၊ အဖေဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မိထွေး ၊ ပထွေးပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။ တချို့သော သားသမီးတွေဟာ အမေ ၊ အဖေ မကောင်းမှန်းသိဦးတော့ ကိုယ့်မိရင်း ၊ ဖရင်းကိုပဲ အမေ ၊ အဖေလို့ ခေါ်ချင်တာပါ။ မိထွေး ၊ ပထွေး ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း စိတ်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ အမေ ၊ အဖေလို့ ပြောင်းခေါ်ရလောက်အောင် သွေးက လက်မခံနိုင်တာတွေရှိတယ်။
မသိ ၊ နားမလည်သေးတဲ့ ကလေးတွေက ဘာကြောင့် အဖေ ၊ အမေ သူတို့အနားမှာ ရှိမနေနိုင်တော့တာလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်သေးပါဘူး။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာက ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေ အဖေ ၊ အမေခေါ်ခွင့်ရချိန်မှာ ကိုယ်လည်း ခေါ်ခွင့်ရချင်တာပဲသိတယ်။ သူတို့ရင်ထဲက လစ်ဟာနေတဲ့ဒီကွက်လပ်ကို နောက်ဆုံးပေါ် ကစားစရာတွေနဲ့ အဝတ်အထည်အသုံးအဆောင်တွေက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ရင်တွင်းနက်နက်တနေရာက ဆုံးရှုံးလိုက်ရသူကို သားသမီးအဖြစ် တွေးကြည့်ရအောင်။ မိဘမေတ္တာကြီးမားသူတွေဟာ သားသမီးဆီ ဘယ်ဘေးအန္တရာယ်မှ မကျစေလိုပါ။ သားသမီးမွေးကင်းစအရွယ်မှာ ကလေးတခုခုများဖြစ်ရင် မိဘတွေ (အထူးသဖြင့်အနီးကပ်ဆုံးမိခင်)ဟာ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင် စိုးရိမ်ပျာယာခတ်နေတတ်တယ်။
သားဦးမိဘတွေလည်း သားဦးအလျောက် အတွေ့အကြုံမရှိ စိတ်ပူကြသလို အကြီးတွေမွေးထားပြီးပေမယ့်လည်း မွေးလာတဲ့အငယ်ကလေးဟာ သူတို့အတွက် မဖတ်ရသေးတဲ့ ဘဝ စာတမျက်နှာပါပဲ။ တချို့မိဘတွေက သားသမီးအချင်းချင်း ခွဲခြားစိတ်ထားပြီး ချစ်တာ ၊ ဂရုစိုက်တာမျိုးရှိတတ်ပေမယ့် အများစုသောမိဘတွေအတွက်ကတော့ သားဦးကလေးလည်း သားဦးမို့ချစ်တာပဲ ၊ အလတ်လည်းအလတ်မို့ ချစ်တာပဲ ၊ အငယ်လည်းအငယ်မို့ချစ်တာပါပဲ။
သားသမီးကိုရတနာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းကြတယ်ဆိုတာ စိန်တဆင်စာထပ်ဝယ်လာလို့ ရှိပြီးသား မြတဆင်စာကို လွှင့်ပစ်လိုက်တာမျိုး မလုပ်တတ်ကြလို့ပါ။ ရတနာဆိုတာ ကာလကြာလေ တန်ဖိုးကြီးလေလိုမျိုး သားသမီးဆိုတာကိုလည်း မိဘတွေက အချိန်နဲ့အမျှ ပိုပိုချစ်လာတတ်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ သားသမီးဖြစ်မယ့်အစား ကိုယ့်ပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ သားသမီးခံစားရမယ့်အစား ကိုယ်ပဲ ခံစားလိုက်ချင်တယ်။ သားသမီးမတောင်းခင် ဖြည့်ပေးချင်တယ်။ သားသမီးတောင့်တတိုင်းလည်း ပြည့်စေ့ချင်တယ်။ မိဘမေတ္တာဟာ အနန္တပါ။
ရင်တွင်းနက်နက်တနေရာမှာ နေရာယူထားတဲ့ သားသမီးကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် နောင်တသား ထပ်မွေးပြီးအစားထိုးဦးတော့ ဒီအဖေ ၊ ဒီအမေ ၊ ဒီသွေးသားကဆက်စပ် ပေါက်ဖွားလာသည့်တိုင် ဒီတစ်ယောက်ဟာ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ အသွင် ၊ ဗီဇ ၊ စရိုက်အပြုအမူတွေတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့တွေက နောက်ထပ်တယောက် ထပ်မယူချင်လောက်အောင် စိတ်ဓါတ်ကျသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်များ ကိုယ့်သားသမီး ချွတ်ချော်လွဲမှားသွားတာမျိုးဆိုရင် တသက်တာ ယူကျုံးမရပေါ့။ မပြောမယ့်သာ ဖွင့်ထုတ်မပြောတာ ၊ နောင်တတွေတလှေကြီးနဲ့လေ။
ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရချိန် ကိုယ့်ဘေးနားရှိသူတွေက နင်အသုံးမကျလို့ဖြစ်ရတာ ၊ နင့်ကြောင့် ၊ နင့်ကြောင့်လို့ ထပ်တလဲလဲစွပ်စွဲနေတဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ အမေ ၊ အဖေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ကျမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ သိပ်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမှာ နလန်မထူနိုင်တော့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်အကြီးအကျယ် ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ တချို့မိခင်တွေ ကလေးဆုံးလို့ ဖြေမဆည်နိုင်ဘဲ ရူးသွားကြတာအထိ မြင်ဖူးတယ်။
ရင်တွင်းနက်နက်တနေရာကလူကို ဇနီး ၊ ခင်ပွန်းအဖြစ် စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ သေတဲ့အထိ မေတ္တာမပျက်ချစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကို သတိရမိတယ်။ တချို့ဆို ကိုယ့်ဇနီး ၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းနဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သေကွဲ ၊ ရှင်ကွဲ ကွဲခဲ့ရတာတွေရှိပေမယ့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုတာမျိုးမရှိဘဲ သူ့နေရာကို အစားထိုးတာမျိုးမလုပ်ဘဲ သေတဲ့အထိ ချစ်သွားကြတာလည်းမြင်ဖူးတယ်။
မြန်မာလူမှုဝန်းကျင်မှာ ဖောက်ပြန်သူတွေများနေတယ်လို့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်နေတဲ့ အခုခေတ်ထဲ ကိုယ့်ဇနီး ၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမှာ စိုးသူတွေ ၊ တန်ဖိုးထားတတ်သူတွေ အများအပြားလည်းရှိပါသေးတယ်။ မေတ္တာစစ်နဲ့ချစ်ပြီး သစ္စာတရားကို စောင့်သိတန်ဖိုးထားတတ်သူတွေပေါ့။
ချစ်သူတွေအချင်းချင်းမှာလည်း တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် တန်ဖိုးထားချစ်သူတွေရှိတယ်။ ခက်တာက ဒီလိုတန်ဖိုးထားတတ်သူတွေဟာ သူတို့လိုတန်ဖိုးထားတတ်သူအချင်းချင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရပါမှ အချစ်ရေး ၊ အိမ်ထောင်ရေး မြဲမြံတာမျိုးပါ။ ချစ်သူရှိပေမယ့် လက်တွဲဖော်မရှိတဲ့သူလိုမျိုး ၊ အိမ်ထောင်ရှိပေမယ့် တိုင်ပင်ဖော်မရှိတဲ့သူလိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အခါ သူများတွေလို ရေလိုက်ငါးလိုက်စိတ်ထားမျိုးနဲ့ နေလိုက်မယ်လို့ စိတ်ပြောင်းလိုက်ရင် ငါးစိမ်းမြင် ငါးကင်ပစ်တဲ့ခေတ်ကြီးထဲ သူလည်း စိတ်ဓါတ်ပျက်လာတော့မှာပါ။
ရှိသမျှစည်းစိမ်ပုံပေးပြီး ပြန်ဝယ်လို့မရတဲ့ ရင်ထဲနက်နက်တနေရာကလူတွေကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးရမှာစိုးရင် ပထမဆုံး တန်ဖိုးထားပေးပါ။ ဂရုစိုက်မှုပေးပါ။ မိမိတတ်နိုင်တာထက် ပိုပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်ပါ။ အခါအားလျော်စွာ ပျော်ရွှင်စရာအထိမ်းအမှတ်တွေ လုပ်ပေးရင်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ အတူဖန်တီးပါ။ သူ့ခံစားမှုတွေနားထောင်ပြီး ကိုယ့်ခံစားမှုတွေလည်း ဝေမျှပါ။ သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားပါ။ ဘဝဟာတိုတောင်းလွန်းတယ်။ နေ့မြင်ညပျောက် အချိန်တိုင်းလည်း ဘာမဆိုဖြစ်ပျက်သွားနိုင်တယ်။ သေကွဲဆိုတာ မလွန်ဆန်နိုင်ပေမယ့် ရှင်ကွဲမကွဲအောင်တော့ ကိုယ်တွေဂရုစိုက်လို့ရတယ်။ နောင်တဆိုတာ ခံစားလို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%90%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8-2/feed/0ချစ်တာနဲ့အမျှမုန်းတတ်တယ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%99%e1%81%bd%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%99%e1%81%bd%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90/#comments Sat, 16 Jul 2016 02:24:07 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=64411
လောကထဲ လုပ်ယူလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေ ပြန်ယူလို့မရသလို နုပျိုမှုတွေကို အိုမင်းချိန်မှ ပြန်ရယူလိုလို့မရဘူး။ ဒီလိုလုပ်ယူလို့မရတဲ့ အရာတွေအများကြီးထဲမှာ အချစ်နဲ့အမုန်းလည်း ပါဝင်နေတယ်။ ချစ်စိတ်ဆိုတာ အတင်းလုပ်ယူချစ်ကြည့်လို့မရဘူး။ ခံစားချက်တွေကနေတဆင့် အချစ်ဟာ မွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ခံစားချက်တွေ ပျော်ဝင်မနေဘဲ အချစ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ယူလို့မရဘူး။
ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရတဲ့သူအပေါ် ချစ်ကြည့်ပါလား ၊ မရဘူးနော်။ လုံးဝမျက်နှာကြောမတည့်သူဆိုပေမယ့် တချိန်မှာ ချစ်ရင် ချစ်သွားတတ်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် အချစ်နဲ့အမုန်းဟာ ကျောချင်းကပ်အနေအထားမှာ ရှိနေသလိုပဲ။ အချစ်ကနေ အမုန်းကို ကူးပြောင်းသွားသွားနိုင်သလို အမုန်းကနေ အချစ်ကိုလည်း ကူးပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်နဲ့အမုန်းနှစ်ခုလုံးကို တမင်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူလို့တော့မရဘူး။ နှစ်ခုစလုံးက ခံစားချက်တွေကနေ မြစ်ဖျားခံ ဆင်းသက်လာကြတာတွေပါ။ ခံစားချက်တွေမရှိဘဲ အချစ်နဲ့အမုန်းဆိုတာ ဖြစ်မလာပါဘူး။
တခါတလေမှာ ချစ်နေရင်းနဲ့ ဒီလိုချစ်ခဲ့တဲ့သူကို မုန်းသွားတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူကိုယ့်ကိုပေးတဲ့ခံစားမှုတွေက အချစ်မှ အမုန်းဆီ ဦးတည်သွားစေခဲ့လို့ပါ။ ကိုယ်ကချစ်သလောက် ကိုယ့်အပေါ် တန်ဖိုးထားခြင်းမရှိလို့ သူ့ကို စိတ်ထဲကနေ နာကျင်ခံစားလာမယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်သမျှ အသေးစိတ်ကလေးတွေကနေ ကိုယ်က ဂရုစိုက်ပေးသလောက် ကိုယ့်အပေါ် အလေးပေးဆက်ဆံတာမျိုးမရှိရင် ရင်ထဲက နာကျင်ခံစားလာရမယ်။ ကိုယ်ကသူ့ကို ပထမဦးစားပေးနေရာထားပေမယ့် သူကကိုယ့်ကို ချောင်ထိုးထားသလို ခံစားရမယ်ဆိုရင်လည်း ရင်နာလာတတ်တယ်။
ရင်နာစရာခံစားချက်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ အဖန်ဖန် ခံစားနေရရင်း ဒီခံစားမှုတွေကို မခံစားနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာ ကိုယ်အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့သူကိုလည်း သိစိတ်ကဖြစ်ဖြစ် ၊ မသိစိတ်ကဖြစ်ဖြစ် မုန်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒီကတဆင့် မခံချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ မုန်းတီးစိတ်ကလေးလှစ်ခနဲ ပေါ်လာချိန်နဲ့ မခံချင်စိတ်တွေ အားကောင်းချိန်မှာ ကိုယ်နာကျင်ခံစားရတဲ့ သူ့အပြုအမူ ၊ အပြောအဆိုတွေ ကြုံလာရင်တော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအပေါ် စိတ်နာသွားပါတော့တယ်။
လူနှစ်ဦးမဆုံချင်တော့လောက်အောင် ကျောခိုင်းသွားစေတဲ့ ခိုင်မာသောအကြောင်းတရပ်ဟာ စိတ်နာကြည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပြတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ၊ ငဲ့ညှာထောက်ထားစရာတွေရှိတယ်လို့ ဦးနှောက်က ဘယ်လောက်အသိပေးပေး ဒီလူအပေါ် စိတ်နာသွားပြီဆိုရင်တော့ အပြီးတိုင်ကျောခိုင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်စိတ်နာသွားခဲ့ပြီဆို ဒီလူ့ဘက် ခြေဦးပြန်မလှည့်တော့ဘူး။ ဒီလူရဲ့အနီးမှာ မရှိနေချင်တော့ဘူး။ ဒီလူရဲ့စကားသံနဲ့ ဟန်ပန်တွေဆိုတာကိုလည်း ခါးသည်းလာတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလူ့ကို မမြင်နိုင်တဲ့အရပ် ၊ မကြားနိုင်တဲ့နေရာ ၊ ပတ်သက်မှုမရှိတော့တဲ့ အနေအထားမှာပဲ ဆက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတော့တယ်။ တကယ်စိတ်နာသွားတဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ပြန်ငြှိလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
လူတစ်ဦးစိတ်နာသွားကာမှ မှားပါတယ် ၊ နောင်တရပါပြီ ၊ အသစ်ကစ ပြန်စကြရအောင်ပြောလည်း နောက်ကျသွားပါပြီ။ ရိုးရိုးစိတ်နာသွားရုံပဲ ခံစားရတဲ့သူတွေရှိသလို အရင်ကချစ်ခဲ့သူကို မုန်းသွားခဲ့တဲ့ သာဓကတွေလည်းရှိပါတယ်။ လူတွေဟာ ကိုယ်ပေးသလောက်ပြန်ရချင်တယ်။ ကိုယ်အကောင်းဆုံးပေးဆပ်နေရက်က ကိုယ့်စေတနာနဲ့မေတ္တာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ စော်ကားတာ ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ဒီလူကို ချစ်တဲ့ခံစားမှုကသပ်သပ် ၊ မုန်းတဲ့ခံစားမှုကသပ်သပ် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီလူ့ကိုစိတ်နာပေမယ့်လည်း ချစ်တဲ့စိတ်ဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာ သူနဲ့ဝေးဝေးမနေနိုင်ဘူး။ သူ့ဒဏ်ကို ဆက်ခံဖို့ ၊ ဆက်သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့ ၊ သူနဲ့ကိုယ်မြဲနေဖို့ကို ဦးစားပေးတွေးတယ်။ မုန်းတဲ့ခံစားမှုဖုံးနေချိန်မှာ ဒီလူ့အနားကနေ အဝေးဆုံးထွက်ပြေးသွားလိုစိတ် ၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ကျောခိုင်းသွားလိုစိတ် ၊ သူ့ကိုလမ်းခွဲလိုက်ဖို့ ဦးစားပေးတွေးတယ်။
ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ မုန်းတဲ့စိတ်လွန်ဆွဲရင်း မပြတ်မသားဖြစ်နေချိန်တွေ ဘယ်လိုရှိနေပစေ ၊ စိတ်နာသွားတဲ့အခြေအနေမှာတော့ သွားလိုက်တော့လို့ လှည့်မကြည့်စတမ်း ကျောခိုင်းသွားမှာပါ။ အမြဲတမ်းချစ်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေလည်း တချိန် တယောက်ကိုတယောက် မကြည့်ချင်လောက်အောင် မုန်းသွားနိုင်တယ်။ မခွဲနိုင်ဘူး တတွတ်တွတ်ရွတ်ခဲ့သူတွေ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တော့လောက်အောင် ခါးသည်းသွားနိုင်တယ်။ ဘဝအဆက်ဆက် ပေါင်းဖက်ရပါစေလို့ ဘုရားအဆူဆူမှာ ဆုပန်ခဲဖူးပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်နေသေးတဲ့သက်တမ်းမှာ ဒီလူနဲ့ပြန်မဆုံချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ရိုးမြေကျ ပေါင်းဖက်ရပါစေသားလို့ တိုင်တည်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမယ့် မအိုခင် ၊ မနာခင် လမ်းခွဲလိုက်တဲ့စုံတွဲတွေလည်းရှိတယ်။
အမျိုးသမီးမှ ဒီလိုခံစားတတ်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခံစားချက်ရှိသူတိုင်း ၊ ချစ်တတ်သူတိုင်းဟာ ချစ်တာနဲ့အမျှ မုန်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမုန်းကို ကိုယ့်ဘာသာသိမ်းထားပြီး ဥပက္ခာပြုလိုက်တဲ့သူတွေရှိသလို သေတောင်မကြေနိုင်ဘူး ၊ ကမ္ဘာမကြေဘူးလို့ အငြှိုးထားသူတွေလည်းရှိတယ်။ အမုန်းကနေ အငြှိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ တဖက်လူမှာ အန္တရာယ်များတာပေါ့။ အငြှိုးကြီးရင်ကြီးသလောက် ဒုက္ခပေးတော့မှာလေ။
ချစ်သူကို ရန်သူတစ်ယောက်အဖြစ် အဆုံးမသတ်ချင်ဘူးဆိုရင် သူ့ခံစားချက်ကို ငဲ့ညှာပါ။ သူ့တန်ဖိုးကို နားလည်ပါ။ သူ့မေတ္တာကို တန်ဖိုးထားပါ။ ကိုယ်သဘောမတူတဲ့အရာတွေကို သူနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ညှိနှိုင်းပြောဆိုကျင့် လုပ်ထားပါ။ ရေရှည်လက်တွဲသွားလိုရင် ကိုယ်တွေနှစ်ဦးအကြား နားလည်မှု အပြန်အလှန်တည်ဆောက်ပါ။ သစ္စာတရားလည်းမြဲမြံပါစေ ။ တာဝန်ဝတ္တရားလည်း ကျေပါစေ။ မေတ္တာတရားလည်း အမြဲလက်ကိုင်ထားပါလေ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းကြပါစေ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%94%e1%80%b2%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%99%e1%81%bd%e1%80%bd%e1%80%99%e1%80%af%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90/feed/ 1